teaching mp3 audio by Sayadaw U Nyanissara <!-[if Webkit]> <!-[if Konq]> <!-[if Opera]> <!-[if FF]>
SayaDaw U Nyanissara (D.Litt)
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် အဓိပတိ
သာယာစေမှု၊ လုံ့လပြုအံ့။ ။
ဒို့ သီတဂူအဓိဋ္ဌာန်မှာ မှာထားတဲ့စကားနှစ်ရပ်ကို အားလုံးစွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်သားပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ကြဘို့လိုတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဘဝသမိုင်း မရိုင်းစေရန် ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ မင်းတို့တပည့်တွေအားလုံး သာသနာတော်အတွက် ကံကောင်းလို့လုပ်ခွင့်ရနေတာ၊ အဲ့ဒီလုပ်ခွင့်ရနေ တာကိုက ကံကောင်းလို့ လုပ်ခွင့်ရနေတာ။ ဒီလုပ်ငန်းကို လုပ်ခွင့်ရနေတာကိုက ကံကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးလို့ မှတ်သားပြီးတော့ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေကို အလွဲသုံးစားမလုပ်ဘို့၊ ရထားတဲ့လုပ်ခွင့်ကို ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ပြီးတော့ အခွင့်အရေးကို မိမိရရ အရယူဘို့၊ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့အလုပ်ကို ထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ပဲ အခွင့်အရေးကို ရအောင်မယူတတ်ဘူး၊ မယူနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဘဝသမိုင်းဟာ ရိုင်းသွားလိမ့်မယ်။
ထိထိရောက်ရောက်မလုပ်တဲ့အပြင် ရထားတဲ့အခွင့်အရေးကို ပျက်စီးအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီသူဟာ ကိုယ့်ဘဝသမိုင်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အရိုင်းသမိုင်းလို့သိပြီး နောင်တပူပန်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အားလုံး ဘဝသမိုင်းမှာ မရိုင်းရအောင်၊ သမိုင်းမှတ်တမ်း ကောင်းအောင် သင်သွားဘို့၊ လုပ်သွားဘို့၊ ကျင့်သွားဘို့တိုက်တွန်းတယ်။
ဘဝသမိုင်းမရိုင်းအောင် ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် ဒို့သာသနာ ဒို့ပြည်ရွာကို သာယာစေမှု လုံ့လပြုရမယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့သာသနာအတွက် ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှကို လုပ်ခွင့်ရသလောက်၊ လုပ်နိုင်သလောက် အကုန်လုံးလုပ်ကြရမယ်။ ငါ့တိုင်းပြည်နဲ့ ငါ့သာသနာအတွက် ငါ ဘာတွေလုပ်နိုင်သလဲ၊ ဘာတွေလုပ်ခွင့်ရသလဲ၊ အဲဒီနှစ်ချက်တွက်ပြီးတော့ အလေးအနက် လုပ်နိုင်သလောက်၊ လုပ်ခွင့်ရသလောက်၊ ထည့်လိုက်ဦး လုပ်ဖြစ်သလောက် အကုန်လုံးလုပ်ရမယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့သာသနာမှာ လုပ်ခွင့်ရပါလျှက်နဲ့၊ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါလျှက်နဲ့၊ လုပ်လို့ဖြစ် ပါလျက်နဲ့ မလုပ်လိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင် သိတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘဝမှာအသက်ရှည်ရင် ရှည်သလောက် အဲဒီချွတ်ယွင်းမှုတွေနဲ့ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်ဖျက်ဆီးရာကျတယ်။ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်ဖျက်ဆီးခြင်းဟာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ ကိုယ့်သာသနာကို ဖျက်ဆီးခြင်းပဲ။ တိုင်းပြည်နဲ့သာသနာကိုဖျက်ဆီးခြင်းဟာလည်း ကိုယ့်ဘဝကို ဖျက်ဆီးခြင်းပဲ။ ဘဝရယ် တိုင်းပြည်ရယ် သာသနာရယ်ဟာ ခွဲလို့မရဘူး။ ဒီသုံးခုဟာ အတူတူပဲ။
ခုလိုအထက်တန်းရောက်လာတာဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ သာသနာက ကျေးဇူးပြုလို့ပဲ။ သီတဂူဆရာတော်ကကျေးဇူးပြုလို့ဆိုတာထက် သာသနာကကျေးဇူးပြုတာလို့ ဒီလိုတွက်ရမယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့သာသနာက ဒို့ကိုဒီလောက်ကျေးဇူးပြုထားရင် ဒို့ကလည်း ဒို့တိုင်းပြည်နဲ့ ဒို့သာသနာတော်အတွက် ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုရမယ်။ အဲဒီလို သုံးခု ဟန်ချက်ညီသွားရင် ဘဝသမိုင်းဟာ ကောင်းသွားတာပဲ။ အဲဒါကြောင့် ဘဝသမိုင်းမရိုင်းကြရအောင်ရယ်၊ တိုင်းပြည်နဲ့သာသနာလှပအောင်ရယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း သမိုင်း မရိုင်းဘူး။ ကိုယ့်ဘဝလည်း လှပလာလိမ့်မယ်။ အဲဒီခံယူချက်နဲ့ ရထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကို စနစ်တကျ တိုင်းပြည်နဲ့သာသနာတော်အတွက်ရော မိမိအတွက်ရော အသုံးချ။
သဗ္ဗော လောကော အဿကော-တစ်လောကလုံး ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာ ဘာမှမရှိဘူး။ သဗ္ဗံ ပဟာယ ဂမနီယံ-အကုန်လုံးစွန့်ပစ်ထားပြီး သွားကြရမှာပဲ။ အလွန်တိုတောင်းတဲ့အချိန်ကလေးအတွင်းမှာ ဒါတွေဟာ အကုန်လုံးပြီးသွားကြပြီ၊ လွန်သွားကြပြီ၊ နောက်ပြန်လှည့်လို့မရဘူး။ အဲဒါကြောင့် အနှစ်သာရနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှာမရတဲ့ ဒိကမ္ဘာမှာ ငါ့တိုင်းပြည်နဲ့ ငါ့သာသနာအတွက် ငါဘာထားပစ်ခဲ့မလဲ၊ ငါ့အတွက်ကော ဘာတွေယူသွားမလဲ၊ အဲဒီစိတ်တွေကို အလေးအနက်ပြုပြီးတော့ ရထားတဲ့အခွင့်အရေး၊ ရထားတဲ့အချိန်၊ ရထားတဲ့ဘဝနဲ့ခန္ဓာကို တိုင်းပြည် နဲ့သာသနာတော်အတွက် များများကြီးအသုံးချပါလို့ဆိုတာ တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
၂၇-၀၂-၂၀၂၀ - “သီတဂူဆရာတော် ဓမ္မသဘင်" (နေပူကုန်းကျေးရွာဆန်အလှူတော်)
၂၇-၀၂-၂၀၂၀ - သီတဂူရေအလှူတော် အထူးဓမ္မသဘင် (သီတဂူဝိပဿနာ တက္ကသိုလ်)
၂၆-၀၂-၂၀၂၀ - "သီတဂူဆရာတော် ဓမ္မသဘင်" (သံရွာဆန်အလှူတော်၊ ကျောက်ဆည်)
၁၈-၀၂-၂၀၂၀ - ဒါနကထာတရားတော်
၁၇-၀၂-၂၀၂၀ - သက္ကပဉှ သုတ္တံ – သိကြားမင်းမှ မြတ်စွာဘုရားကိုမေးသောမွေးခွန်းများ (ပဲခူး)
၁၃-၀၂-၂၀၂၀ - အပ္ပမာဒတရားတော်
၁၂-၀၂-၂၀၂၀ - သက္ကပဉှ သုတ္တံ – သိကြားမင်းမှ မြတ်စွာဘုရားကိုမေးသောမွေးခွန်းများ
၀၉-၀၂-၂၀၂၀ - အရှင်သာရိပုတ္တရာ နှင့် အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန် အကြောင်း တရားတော်
၀၈-၀၂-၂၀၂၀ - ဘုရားမြတ်အဆူဆူတို့၏ သြဝါဒသုံးချက် တရားတော်
၀၇-၀၂-၂၀၂၀ - နတ်ပြည်တက်ကြောင်း စောင်းတန်းလှေကား တရားတော်
၀၅-၀၂-၂၀၂၀ - ဘဝရဲ့ရိက္ခာထုပ် တရားတော် (ကျောက်ကလပ်)
၀၄-၀၂-၂၀၂၀ - ဒါနကထာ တရားတော် (မြဝတီ)
၀၃-၀၂-၂၀၂၀ - ကိုယ်ကျင့်တရားသည် လူသားတို့၏ဘဝအရင်းအနှီးတရားတော်
၀၂-၀၂-၂၀၂၀ - နတ်ပြည်တက်ကြောင်း စောင်းတန်းလှေခါး (အနာတပိဏ်သူဌေးအကြောင်း)
၀၁-၀၂-၂၀၂၀ - စုန္ဒဆွမ်းအလှူအကြောင်း
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များစုစည်းမှု
၁-၅-၂၀၁၉ သေလာထေရီသုတ္တန်တရားတော(မဲသောဝ့်ကျောင်း၊ မဲဆောက်မြို့)
၂-၅-၂၀၁၉ ချစ်သူတို့ရဲ့ မေတ္တာ တရားတော်(ရွှေကုက္ကိုမြိုင်၊ ကရင်ပြည်နယ်)
၇-၅-၂၀၁၉ သြဃတရဏသုတ္တံတရားတော် (ပြင်ဦးလွင်)
Dhamma Talk on 16th April at ARENA Country club
Dhamma Talk on 17th April at Poh Ern Shih Temple
၁၅-၁၁-၂၀၀၉ အစွန်းမရောက်ကြစေနဲ့ တရားတော် စင်္ကာပူနိုင်ငံ မင်္ဂလဝိဟာရကျောင်း
၂၄-၅-၂၀၀၅ လောက သဘော (ရှေ့ပိုင်း ၁၉မိနစ်တွင် အင်္ဂလိပ်လို ဟော၍ နောက်ပိုင်းတွင် ဗမာလို ဟော ထားပါသည်)
ဆရာတော်ဦးဉာဏိဿရ လေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် အလှူခံတရားပွဲ
၂၅-၅-၂၀၀၈ စင်္ကာပူနိုင်ငံ မင်္ဂလဝိဟာရကျောင်း
၂၆-၅-၂၀၀၈ သုခလေးပါးတရားတော်၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံ
၃၁-၈-၂၀၀၈ စင်္ကာပူနိုင်င NTU Alumini
၂၈-၁၂-၂၀၀၈ စင်္ကာပူနိုင်ငံ မင်္ဂလဝိဟာရကျောင်း
MP3 Version 2
ဤ Version2mp3 များကို Singapore နိုင်ငံရှိ ကိုရဲမြင့်နှင့် သူငယ်ချင်းတစုမှ Analog တိပ်ခွေများမှ Digital Media သို့ပြောင်းလဲ ပေးကြပါသည်။
ထို mp3 များကို Singapore နိုင်ငံရှိ ကိုဇော်ထွဋ်မှ တပုဒ်ခြင်း နာယူ၍ ဆရာတော် တရားအစပိုင်းတွင် ထဲ့သွင်းဟောပြောသည့် မြန်မာရက်စွဲများကို လိုက်လံမှတ်သားပြီး နှစ်၁၀၀ မြန်မာ English ပြကဒိန်မှ ခရစ်သက္ကရာဇ်များဖြင့် ယှဉ်တွဲ မှတ်သားကာ ရက်၊ လ၊ ခုနှစ် အစဉ်လိုက် စီစဉ်တင်ပြနိုင်ရန် ကူညီခဲ့ပါသည်။ တရားခေါင်းစဉ်၊ ရက်စွဲနှင့် တခြားသော ကြောင်းအရာများအတွက် Feedback ပေးပို့လိုပါက dhammadownload.admin@gmail.com သို့ email ဖြင့် အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
ဝဝဝ၁။ ဗဟုဒီတရသုတ္တန်(၁) (၃၁-၁၂-၁၉၇၆) ၁၃၃၈၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝဝဝ၂။ ဗဟုဒီတရသုတ္တန်(၂) (၃၁-၁၂-၁၉၇၆) ၁၃၃၈၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝဝဝ၃။ ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ္တန်(၁) (၀၁-၀၁-၁၉၇၇) ၁၃၃၈၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၃) ရက်
ဝဝဝ၄။ ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ္တန်(၂) (၀၁-၀၁-၁၉၇၇) ၁၃၃၈၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၃) ရက်
ဝဝဝ၅။ ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ္တန်(၃) (၀၁-၀၁-၁၉၇၇) ၁၃၃၈၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၃) ရက်
ဝဝဝ၆။ ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ္တန်(၄) (၀၁-၀၁-၁၉၇၇) ၁၃၃၈၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၃) ရက်
ဝဝဝ၇။ ဓမ္မာဒါသ တရားကြေးမုံ (၀၂-၀၅-၁၉၇၇) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁)ရက်
ဝဝဝ၈။ အာနာပါန၊ သတိပဌာန်တရား (၁) (၁၆-၀၅-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝဝဝ၉။ အာနာပါန၊ သတိပဌာန်တရား (၂) (၁၆-၀၅-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝဝ၁ဝ။ အာနာပါန၊ သတိပဌာန်တရား (၃) (၁၆-၀၅-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝဝ၁၁။ ပဋိကူလမနသီကာရတရား(၁) (၀၃-၀၇-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်(၃)ရက်
ဝဝ၁၂။ ပဋိကူလမနသီကာရတရား(၂) (၀၃-၀၇-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်(၃)ရက်
ဝဝ၁၃။ ပဋိကူလမနသီကာရတရား(၃) (၀၃-၀၇-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်(၃)ရက်
ဝဝ၁၄ ။ ကေသမုတ္တိသုတ္တန်(၁) (၂၁-၁၁-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ တဆောင်မုန်းလပြည့်ဆန်း (၁၁)ရက်
ဝဝ၁၅ ။ ကေသမုတ္တိသုတ္တန်(၂) (၂၁-၁၁-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ တဆောင်မုန်းလပြည့်ဆန်း (၁၁)ရက်
ဝဝ၁၆ ။ ကေသမုတ္တိသုတ္တန်(၃) (၂၁-၁၁-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ တဆောင်မုန်းလပြည့်ဆန်း (၁၁)ရက်
ဝဝ၁၇။ မုနိသုတ္တန်(၁) (၁၀-၁၂-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ တန်ဆောင်မုန်းလကွယ်နေ့
ဝဝ၁၈။ မုနိသုတ္တန်(၂) (၁၀-၁၂-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ တန်ဆောင်မုန်းလကွယ်နေ့
ဝဝ၁၉။ မုနိသုတ္တန်(၃) (၁၀-၁၂-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ တန်ဆောင်မုန်းလကွယ်နေ့
ဝဝ၂ဝ။ အာသီဝိသောပမာသုတ္တန် (၁) (၁၂-၁၂-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လဆန်း(၂)ရက်
ဝဝ၂၁။ အာသီဝိသောပမာသုတ္တန်(၂) (၁၂-၁၂-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လဆန်း(၂)ရက်
ဝဝ၂၂။ အာသီဝိသောပမာသုတ္တန်(၃) (၁၂-၁၂-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လဆန်း(၂)ရက်
ဝဝ၂၃။ အာသီဝိသောပမာသုတ္တန်(၄) (၁၂-၁၂-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လဆန်း(၂)ရက်
ဝဝ၂၄။ အာသီဝိသောပမာသုတ္တန်(၅) (၁၂-၁၂-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လဆန်း(၂)ရက်
ဝဝ၂၅။ အာသီဝိသောပမာသုတ္တန်(၆) (၁၂-၁၂-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လဆန်း(၂)ရက်
ဝဝ၂၆။ အဇိတကေသကဗ္ဗလဒိဋ္ဌိတရား(၁) (၂၄-၁၂-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လဆန်း(၁၄)ရက်
ဝဝ၂၇။ အဇိတကေသကဗ္ဗလဒိဋ္ဌိတရား(၂) (၂၄-၁၂-၁၉၇၇) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လဆန်း(၁၄)ရက်
ဝဝ၂၈။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်(၁) (၀၉-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၃)ရက်
ဝဝ၂၉။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်(၂) (၀၉-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၃)ရက်
ဝဝ၃ဝ။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်(၃) (၁၀-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝဝ၃၁။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်(၄) (၁၀-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝဝ၃၂။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်(၅) (၁၀-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝဝ၃၃။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်(၆) (၁၀-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝဝ၃၄။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်(၇) (၁၀-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝဝ၃၅။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်(၈) (၁၀-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝဝ၃၆။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်(၉) (၁၀-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝဝ၃၇။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်(၁၀) (၁၀-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝဝ၃၈။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်(၁၁) (၁၀-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝဝ၃၉ ။ ဝေလာမသုတ္တန် (၁) (၁၈-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၀) ရက်
ဝဝ၄ဝ ။ ဝေလာမသုတ္တန် (၂) (၁၈-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၀) ရက်
ဝဝ၄၁။ သက္ကပဥှာသုတ္တန်(၁) (၂၅-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၄၂။ သက္ကပဥှာသုတ္တန်(၂) (၂၅-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၄၃။ သက္ကပဥှာသုတ္တန်(၃) (၂၅-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၄၄။ သက္ကပဥှာသုတ္တန်(၄) (၂၅-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၄၅။ သက္ကပဥှာသုတ္တန်(၅) (၂၅-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၄၆။ သက္ကပဥှာသုတ္တန်(၆) (၂၅-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၄၇။ သက္ကပဥှာသုတ္တန်(၇) (၂၅-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၄၈။ သက္ကပဥှာသုတ္တန်(၈) (၂၅-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၄၉။ သက္ကပဥှာသုတ္တန်(၉) (၂၅-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၅ဝ။ သက္ကပဥှာသုတ္တန်(၁၀) (၂၅-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၅၁။ သက္ကပဥှာသုတ္တန်(၁၁) (၂၅-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၅၂။ သက္ကပဥှာသုတ္တန်(၁၂) (၂၅-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၅၃။ သက္ကပဥှာသုတ္တန်(၁၃) (၂၅-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၅၄။ သက္ကပဥှာသုတ္တန်(၁၄) (၂၅-၀၁-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၅၅။ ပဏ္ဍိတ သာမဏေ(၁) (၀၉-၀၂-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ တပို့တွဲလဆန်း(၂) ရက်
ဝဝ၅၆။ ပဏ္ဍိတ သာမဏေ(၂) (၀၉-၀၂-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ တပို့တွဲလဆန်း(၂) ရက်
ဝဝ၅၇။ မဟာသာလဗြဟ္မဏသုတ္တန်(၁) (၀၆-၀၃-၁၉၇၈) ၁၃၃၉ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၁၂)ရက်
ဝဝ၅၈။ မဟာသာလဗြဟ္မဏသုတ္တန်(၂) (၀၆-၀၃-၁၉၇၈) ၁၃၃၉ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၁၂)ရက်
ဝဝ၅၉။ ကာမသုတ္တန် (၁) (၀၇-၀၃-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၁၃)ရက်
ဝဝ၆ဝ။ ကာမသုတ္တန် (၂) (၀၇-၀၃-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၁၃)ရက်
ဝဝ၆၁။ မက္ခ္ခလိဂေါသာလဒိဋ္ဌိတရား(၁) (၁၈-၀၃-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ တပေါင်းလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝဝ၆၂။ မက္ခ္ခလိဂေါသာလဒိဋ္ဌိတရား(၂) (၁၈-၀၃-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ တပေါင်းလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝဝ၆၃။ ပူရဏကဿဖတိတ္ထိကြီး(၁) (၃၁-၀၃-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၈)ရက်
ဝဝ၆၄။ ပူရဏကဿဖတိတ္ထိကြီး(၂) (၃၁-၀၃-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၈)ရက်
ဝဝ၆၅။ သဥဏယဗေလဋ္ဌဒိဋ္ဌိတရား(၁) (၁၂-၀၄-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ တန်ခူးလဆန်း(၅)ရက်
ဝဝ၆၆။ သဥဏယဗေလဋ္ဌဒိဋ္ဌိတရား(၂) (၁၂-၀၄-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ တန်ခူးလဆန်း(၅)ရက်
ဝဝ၆၇။ ပုဏ္ဏောဝါဒသုတ္တန် (၀၁-၀၅-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၇)ရက်
ဝဝ၆၈။ ဆန္ဒောဝါဒသုတ္တန်(၁) (၀၃-၀၅-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော် (၉) ရက်
ဝဝ၆၉။ ဆန္ဒောဝါဒသုတ္တန်(၂) (၀၃-၀၅-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော် (၉) ရက်
ဝဝ၇ဝ။ ဆန္ဒောဝါဒသုတ္တန်(၃) (၀၃-၀၅-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော် (၉) ရက်
ဝဝ၇၁။ ဆန္ဒောဝါဒသုတ္တန်(၄) (၀၃-၀၅-၁၉၇၈) ၁၃၃၉၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော် (၉) ရက်
ဝဝ၇၂။ နန္ဒ မာတာသုတ္တန်(၁) (၀၄-၀၅-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၁၂)ရက်
ဝဝ၇၃။ နန္ဒ မာတာသုတ္တန်(၂) (၀၄-၀၅-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၁၂)ရက်
ဝဝ၇၄။ နိဂဏ္ဍနာဋပုတ္တဒိဋ္ဌိ(၁) (၀၅-၀၅-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၁၃)ရက်
ဝဝ၇၅။ နိဂဏ္ဍနာဋပုတ္တဒိဋ္ဌိ(၂) (၀၅-၀၅-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၁၃)ရက်
ဝဝ၇၆။ မဟာလိသုတ္တန်(၁) (၁၉-၀၅-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၃) ရက်
ဝဝ၇၇။ မဟာလိသုတ္တန်(၂) (၁၉-၀၅-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၃) ရက်
ဝဝ၇၈။ ပကုဋကစ ္ဆာရနဒိဋ္ဌိတရား(၁) (၀၅-၀၆-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝဝ၇၉။ ပကုဋကစ ္ဆာရနဒိဋ္ဌိတရား(၂) (၀၅-၀၆-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝဝ၈ဝ ။ ရောဟိနိမင်းသမီး(၁) (၀၉-၀၆-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ နယုန်လဆန်း (၄) ရက်
ဝဝ၈၁ ။ ရောဟိနိမင်းသမီး(၂) (၀၉-၀၆-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ နယုန်လဆန်း (၄) ရက်
ဝဝ၈၂။ နိဂြောဓ သာမဏေ(၁) (၁၉-၀၉-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ တော်သလင်းလပြည့့််ကျော်(၃)ရက်
ဝဝ၈၃။ နိဂြောဓ သာမဏေ(၂) (၁၉-၀၉-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ တော်သလင်းလပြည့့််ကျော်(၃)ရက်
ဝဝ၈၄။ နိဂြောဓ သာမဏေ(၃) (၁၉-၀၉-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ တော်သလင်းလပြည့့််ကျော်(၃)ရက်
ဝဝ၈၅။ အဘိဏ္ဏပစ္စဝက္ခိတဗ္ဗသုတ္တန်(၁) (၁၈-၁၀-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၈၆။ အဘိဏ္ဏပဉ္စဝက္ခိတဗ္ဗသုတ္တန်(၂) (၁၈-၁၀-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၈၇။ အဘိဏ္ဏပဉ္စဝက္ခိတဗ္ဗသုတ္တန်(၃) (၁၈-၁၀-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၈၈။ အဘိဏ္ဏပဉ္စဝက္ခိတဗ္ဗသုတ္တန်(၄) (၁၈-၁၀-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၈၉။ အဘိဏှပစ္စဝက္ခိတဗ္ဗသူတ္တန်(၁) (၁၈-၁၀-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၉ဝ။ အဘိဏှပစ္စဝက္ခိတဗ္ဗသူတ္တန်(၂) (၁၈-၁၀-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၉၁။ အဘိဏှပစ္စဝက္ခိတဗ္ဗသူတ္တန်(၃) (၁၈-၁၀-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၉၂။ အဘိဏှပစ္စဝက္ခိတဗ္ဗသူတ္တန်(၄) (၁၈-၁၀-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝဝ၉၃။ ဘဒ္ဒဝဂ္ဂီညီနောင်သုံးကျိပ်(၁) (၃၁-၁၀-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁)ရက်
ဝဝ၉၄။ ဘဒ္ဒဝဂ္ဂီညီနောင်သုံးကျိပ်(၂) (၃၁-၁၀-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁)ရက်
ဝဝ၉၅။ မုနိသုတ္တန်နှင့်နန္ဒသုတ္တန်(၁) (၂၂-၁၂-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၈)ရက်
ဝဝ၉၆။ မုနိသုတ္တန်နှင့် နန္ဒသုတ္တန်(၂) (၂၂-၁၂-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၈)ရက်
ဝဝ၉၇။ မုနိသုတ္တန်နှင့်နန္ဒသုတ္တန်(၃) (၂၂-၁၂-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၈)ရက်
ဝဝ၉၈။ သဒ္ဓါနှင့်မစ္ဆရိယတိုက်ပွဲ (၂၄-၁၂-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁၀)ရက်
ဝဝ၉၉။ မနာပဒါယီသုတ္တန်(၁) (၂၉-၁၂-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလဆန်း(၁)ရက်
ဝ၁ဝဝ။ မနာပဒါယီသုတ္တန်(၂) (၂၉-၁၂-၁၉၇၈) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလဆန်း(၁)ရက်
ဝ၁ဝ၁။ အနုရုဒ္ဓါသုတ္တန်(၂) (၀၂-၀၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၀ ပြာသိုလဆန်း (၅) ရက်နေ့
ဝ၁ဝ၂။ အနုရုဒ္ဓါသုတ္တန်(၁) (၀၂-၀၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၀ ပြာသိုလဆန်း (၅) ရက်နေ့
ဝ၁ဝ၃။ နန္ဒသုတ္တန်(၁) (၁၂-၀၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလပြည့်နေ့
ဝ၁ဝ၄။ နန္ဒသုတ္တန်(၂) (၁၂-၀၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလပြည့်နေ့
ဝ၁ဝ၅။ နန္ဒသုတ္တန်(၃) (၁၂-၀၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလပြည့်နေ့
ဝ၁ဝ၆။ အဟိရာဇသုတ္တန်(၁) (၁၉-၀၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၇)ရက်
ဝ၁ဝ၇ ။ မောရသုတ္တန်(၁) (၂၂-၀၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၁ဝ၈ ။ မောရသုတ္တန်(၂) (၂၂-၀၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၁ဝ၉။ ဝဋပေါတကဇာတကသုတ္တန်(၁) (၂၉-၀၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ တပို့တွဲလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၁၁ဝ။ ဝဋပေါတကဇာတကသုတ္တန်(၁) (၂၉-၀၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ တပို့တွဲလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၁၁၁။ ဝဋပေါတကဇာတကသုတ္တန်(၂) (၂၉-၀၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ တပို့တွဲလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၁၁၂။ ဂီလာနသုတ္တန်(၁) (၀၁-၀၂-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ တပို့တွဲလပြည့်ဆန်း(၅) ရက်
ဝ၁၁၃။ ဂီလာနသုတ္တန်(၂) (၀၁-၀၂-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ တပို့တွဲလပြည့်ဆန်း(၅) ရက်
ဝ၁၁၄။ သုခ(၄)ပါး (၀၂-၀၂-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ တပို့တွဲလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၁၁၅။ ကုလသုတ္တန်နှင့်ကေသဝဇာတ(၁) (၀၃-၀၂-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ တပို့တွဲလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၁၁၆။ ကုလသုတ္တန်နှင့်ကေသဝဇာတ(၂) (၀၃-၀၂-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ တပို့တွဲလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၁၁၇။ ဒက္ခိဏဝိသုဒ္ဓိလေးပါး (၀၃-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၁၁၈။ ပထမအနာထပိဏ္ဍကသုတ္တန်(၁) (၀၆-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၁၀)ရက်
ဝ၁၁၉။ ပထမအနာထပိဏ္ဍကသုတ္တန်(၂) (၀၆-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၀၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၁၀)ရက်
ဝ၁၂ဝ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၁) (၁၃-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (သြင်္ကန်အကြိုနေ့)
ဝ၁၂၁ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၂) (၁၃-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (သြင်္ကန်အကြိုနေ့)
ဝ၁၂၂ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၃) (၁၃-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (သြင်္ကန်အကြိုနေ့)
ဝ၁၂၃ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၄) (၁၃-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (သြင်္ကန်အကြိုနေ့)
ဝ၁၂၄ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၅) (၁၄-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (သြင်္ကန်အကျနေ့)
ဝ၁၂၅ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၆) (၁၄-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (သြင်္ကန်အကျနေ့)
ဝ၁၂၆ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၇) (၁၄-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (သြင်္ကန်အကျနေ့)
ဝ၁၂၇ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၈) (၁၄-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (သြင်္ကန်အကျနေ့)
ဝ၁၂၈ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၉) (၁၄-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (သြင်္ကန်အကျနေ့)
ဝ၁၂၉ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၁၀) (၁၅-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (သြင်္ကန်အကြတ်နေ့)
ဝ၁၃ဝ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၁၁) (၁၅-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (သြင်္ကန်အကြတ်နေ့)
ဝ၁၃၁ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၁၂) (၁၅-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (သြင်္ကန်အကြတ်နေ့)
ဝ၁၃၂ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၁၃) (၁၅-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (သြင်္ကန်အကြတ်နေ့)
ဝ၁၃၃ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၁၄) (၁၆-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (သြင်္ကန်အတတ်နေ့)
ဝ၁၃၄ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၁၅) (၁၆-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (သြင်္ကန်အတတ်နေ့)
ဝ၁၃၅ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၁၆) (၁၆-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (သြင်္ကန်အတတ်နေ့)
ဝ၁၃၆ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၁၇) (၁၇-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (နှစ်ဆန်း၁ရက်နေ့)
ဝ၁၃၇ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၁၈) (၁၇-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (နှစ်ဆန်း၁ရက်နေ့)
ဝ၁၃၈ ။ ဝေဒနာနုပဿနာ သတိပဌာန်တရား(၁) (၂၀-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၉)ရက်
ဝ၁၃၉ ။ ဝေဒနာနုပဿနာ သတိပဌာန်တရား(၂) (၂၀-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၉)ရက်
ဝ၁၄ဝ ။ ဝေဒနာနုပဿနာ သတိပဌာန်တရား(၃) (၂၀-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၉)ရက်
ဝ၁၄၁။ ဘဝတန်ဘိုး (၂၅-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၁၄၂။ ဒါန(၃)ပါးတရားတော်(၁) (၂၅-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ တန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၁၄၃။ ဒါန(၃)ပါးတရားတော်(၂) (၂၅-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ တန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၁၄၄။ ဒုတိယအနာထပိဏ္ဍိကသုတ္တန်(၁) (၂၆-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၁)ရက်
ဝ၁၄၅။ ဒုတိယအနာထပိဏ္ဍိကသုတ္တန်(၂) (၂၆-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၁)ရက်
ဝ၁၄၆။ ဒဋ္ဌဗ္ဗသုတ္တန် (၃၀-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၅)ရက်
ဝ၁၄၇။ ဒဋ္ဌဗ္ဗသုတ္တန် (၃၀-၀၄-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၅)ရက်
ဝ၁၄၈ ။ လောဟကုမ ္ဘီဇာတ်(၁) (၀၁-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၆) ရက်
ဝ၁၄၉ ။ လောဟကု မ္ဘီဇာတ်(၂) (၀၁-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၆) ရက်
ဝ၁၅ဝ။ ပူဇနိယမင်္ဂလာတရားတော် (၀၃-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၈) ရက်
ဝ၁၅၁။ ဝိဘက်တော်(၁၂)ပါး (၁)။ ဝတ်တော်(၁၂)ပါး (၀၃-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၈)ရက်
ဝ၁၅၂။ ဝိဘက်တော်(၁၂)ပါး (၂) (၀၄-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၉)ရက်
ဝ၁၅၃။ ဝိဘက်တော်(၁၂)ပါး (၃) (၀၅-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၁၅၄။ ဝိဘက်တော်(၁၂)ပါး (၄) (၀၆-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၁၅၅။ ဝိဘက်တော်(၁၂)ပါး (၅) (၀၇-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၁၅၆။ ဝိဘက်တော်(၁၂)ပါး (၆) (၀၈-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၁၅၇။ ဝိဘက်တော်(၁၂)ပါး (၇) (၀၈-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၁၅၈။ ဝိဘက်တော်(၁၂)ပါး (၈) (၀၉-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၁၅၉။ ဝိဘက်တော်(၁၂)ပါး (၉) (၀၉-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၁၆ဝ။ သဟသာရဟဂါထာတရား (၁၀-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့်
ဝ၁၆၁။ ဝိဘက်တော်(၁၂)ပါး (၁၀) (၁၀-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််
ဝ၁၆၂။ ဝိဘက်တော်(၁၂)ပါး (၁၀) (၁၀-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််
ဝ၁၆၃။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၂) (၁၁-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််
ဝ၁၆၄။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၃) (၁၁-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််
ဝ၁၆၅။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၄) (၁၁-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််
ဝ၁၆၆။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၅) (၁၁-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််
ဝ၁၆၇။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၆) (၁၁-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််
ဝ၁၆၈။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၇) (၁၁-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််
ဝ၁၆၉။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၉) (၁၁-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််
ဝ၁၇ဝ။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၉) (၁၁-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််
ဝ၁၇၁။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၁၀) (၁၁-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််
ဝ၁၇၂။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၁၁) (၁၁-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််
ဝ၁၇၃။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၁၂) (၁၁-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််
ဝ၁၇၄။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၁၃) (၁၁-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််
ဝ၁၇၅။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၁)။ သင်္ဂါလသုတ္တန် (၁၁-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၁)ရက်
ဝ၁၇၆။ ဖန္ဒနသုတ္တန်(၁) (၁၃-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၃)ရက်
ဝ၁၇၇။ ဖန္ဒနသုတ္တန်(၂) (၁၃-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၃)ရက်
ဝ၁၇၈ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၁) (၂၃-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၁၃) ရက်
ဝ၁၇၉ ။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမာသုတ္တန်(၂) (၂၃-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၁၃) ရက်
ဝ၁၈ဝ။ ဝက္ကလိသုတ္တန် (အဓိမာနိက)(၁) (၂၄-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၁၈၁။ ဝက္ကလိသုတ္တန် (အဓိမာနိက)(၂) (၂၄-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၁၈၂။ ဝက္ကလိသုတ္တန် (သဒ္ဒ ါဝိမုတ္တ ဧတဒေဂ်)(၁) (၂၅-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၁၈၃။ ဝက္ကလိသုတ္တန် (သဒ္ဒ ါဝိမုတ္တ ဧတဒေဂ်)(၂) (၂၅-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၁၈၄။ စူဠပန္တကထေရ်ရအပါဒါန်တရား(၁) (၂၆-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ နယုန်လဆန်း(၁)ရက်
ဝ၁၈၅။ စူဠပန္တကထေရ်ရအပါဒါန်တရား(၂) (၂၆-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ နယုန်လဆန်း(၁)ရက်
ဝ၁၈၆။ နိယာမတရားနှင့်အနတ္တတရား(၁) (၂၆-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ နယုန်လဆန်း(၁)ရက်
ဝ၁၈၇။ နိယာမတရားနှင့်အနတ္တတရား(၂) (၂၆-၀၅-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ နယုန်လဆန်း(၁)ရက်
ဝ၁၈၈။ အမ္ဗပါလီထေရီအပါဒါန်(၁) (၁၉-၀၆-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၁၈၉။ အမ္ဗပါလီထေရီအပါဒါန်(၂) (၁၉-၀၆-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၁၉ဝ။ အမ္ဗပါလီထေရီအပါဒါန် (၃) (၁၉-၀၆-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၁၉၁။ အမ္ဗပါလီထေရီအပါဒါန်(၄) (၁၉-၀၆-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၁၉၂။ အဿဇိသုတ္တန်(၁) (၁၂-၀၉-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော်(၇)ရက်
ဝ၁၉၃။ အဿဇိသုတ္တန်(၂) (၁၂-၀၉-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော်(၇)ရက်
ဝ၁၉၄။ သာဓုသုတ္တန်(၁) (၂၂-၁၀-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၃)ရက်
ဝ၁၉၅။ သာဓုသုတ္တန်(၂) (၂၂-၁၀-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၃)ရက်
ဝ၁၉၆။ ဝိဟာရအနုမောဒနာတရား (၃၀-၁၀-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၁၉၇။ ပရိယေသနာသုတ္တန်(၁) (၁၄-၁၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၁၉၈။ ပရိယေသနာသုတ္တန်(၂) (၁၄-၁၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၁၉၉။ ပရိယေသနာသုတ္တန်(၃) (၁၄-၁၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၂ဝဝ။ ကုဒါလပဏ္ဍိတဇာတ်နှင့်သတိပဌါန်တရား(၁) (၂၈-၁၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ နတ်တော်လဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၂ဝ၁။ ကုဒါလပဏ္ဍိတဇာတ်နှင့်သတိပဌါန်တရား(၂) (၂၈-၁၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ နတ်တော်လဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၂ဝ၂။ ကုဒါလပဏ္ဍိတဇာတ်နှင့်သတိပဌါန်တရား(၃) (၂၈-၁၁-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ နတ်တော်လဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၂ဝ၃။ ဗျုသနတရား(၅)ပါးတရားတော် (၁၇-၁၂-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၂ဝ၄။ ဗျုသနတရား(၅)ပါးတရားတော် (၁၇-၁၂-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၂ဝ၅။ ဗျုသနတရား(၅)ပါးတရားတော် (၁၇-၁၂-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၂ဝ၆။ ကပ်ကြီး(၃)ပါးတရားတော် (၁၉-၁၂-၁၉၇၉) ၁၃၄၁ ပြာသိုလပြည့့််ဆန်း (၂) ရက်နေ့
ဝ၂ဝ၇။ ကပ်ကြီး(၃)ပါးတရားတော် (၁၉-၁၂-၁၉၇၉) ၁၃၄၁ ပြာသိုလပြည့့််ဆန်း (၂) ရက်နေ့
ဝ၂ဝ၈။ မာတိကာမာတာသုတ္တန်(၁) (၂၇-၁၂-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၂ဝ၉။ မာတိကာမာတာသုတ္တန်(၂) (၂၇-၁၂-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၂၁ဝ။ မာတိကာမာတာ သုတ္တန်(၁) (၂၇-၁၂-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၂၁၁။ မာတိကာမာတာ သုတ္တန်(၂) (၂၇-၁၂-၁၉၇၉) ၁၃၄၁၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၂၁၂။ သဒ္ဓမ္မပတိရူပကသုတ္တန်(၁) (၀၈-၀၁-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၇)ရက်
ဝ၂၁၃။ သဒ္ဓမ္မပတိရူပကသုတ္တန်(၂) (၀၈-၀၁-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၇)ရက်
ဝ၂၁၄။ ဝနရောပသုတ္တန်(၁) (၁၈-၀၁-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ တပို့တွဲလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၂၁၅။ ဝနရောပသုတ္တန်(၂) (၁၈-၀၁-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ တပို့တွဲလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၂၁၆။ မင်္ဂလာ့သုတ္တန်တရားတော်(၁) (၃၁-၀၃-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၁)ရက်
ဝ၂၁၇။ မင်္ဂလာ့သုတ္တန်တရားတော်(၁) (၃၁-၀၃-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၁)ရက်
ဝ၂၁၈။ မင်္ဂလာ့သုတ္တန်တရားတော်(၂) (၀၁-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၂၁၉။ မင်္ဂလာ့သုတ္တန်တရားတော်(၂) (၀၁-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၂၂ဝ။ မင်္ဂလာ့သုတ္တန်တရားတော်(၃) (၀၂-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၃)ရက်
ဝ၂၂၁။ မင်္ဂလာ့သုတ္တန်တရားတော်(၃) (၀၂-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၃)ရက်
ဝ၂၂၂။ မင်္ဂလာ့သုတ္တန်တရားတော်(၃) (၀၂-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၃)ရက်
ဝ၂၂၃။ ပဏ္ဍိတာနဉ္စသေဝနာ(၁) (၀၄-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၅)ရက်
ဝ၂၂၄။ ပဏ္ဍိတာနဉ္စသေဝနာ(၂) (၀၄-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၅)ရက်
ဝ၂၂၅။ ပဏ္ဍိတာနဉ္စသေဝနာ(၃)၊မင်္ဂလာ့သုတ္တန်တရားတော်(၅) (၀၅-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၆)ရက်
ဝ၂၂၆။ ပဏ္ဍိတာနဉ္စသေဝနာ(၄) (၀၅-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၆)ရက်
ဝ၂၂၇။ ပဏ္ဍိတာနဉ္စသေဝနာ(၅) (၀၅-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၆)ရက်
ဝ၂၂၈။ ပူဇာစပူဇနိယ(၁) (၀၆-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၇)ရက်
ဝ၂၂၉။ ပူဇာစပူဇနိယ(၂) (၀၆-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၇)ရက်
ဝ၂၃ဝ။ ပတိရူပဒေသဝါသောစ(၁) (၀၇-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၈)ရက်
ဝ၂၃၁။ ပတိရူပဒေသဝါသောစ(၂) (၀၇-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၈)ရက်
ဝ၂၃၂။ ပတိရူပဒေသဝါသောစ(၃) (၀၇-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၈)ရက်
ဝ၂၃၃။ ပုဗ္ဗေစကတပုညတာ(၁) (၀၉-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၂၃၄။ ပုဗ္ဗေစကတပုညတာ(၂) (၀၉-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၂၃၅။ ဗာဟုသစ္စဉ္စ(၁) (၁၁-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၁၂)ရက်
ဝ၂၃၆။ ဗာဟုသစ္စဉ္စ(၂) (၁၁-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၁၂)ရက်
ဝ၂၃၇။ ဗာဟုသစ္စဉ္စ(၃) (၁၁-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့့််ကျော်(၁၂)ရက်
ဝ၂၃၈။ စန္ဒာဘထေရ်ရ (၁) (၁၂-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့်ကျော်(၁၃)ရက်
ဝ၂၃၉။ စန္ဒာဘထေရ်ရ (၂) (၁၂-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့်ကျော်(၁၃)ရက်
ဝ၂၄ဝ။ ပါနိယဒါနှင့်သိပ္ပဉ္စ(၁) (၁၇-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း၄)ရက်
ဝ၂၄၁။ ပါနိယဒါနှင့်သိပ္ပဉ္စ(၂) (၁၇-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း၄)ရက်
ဝ၂၄၂။ ပါနိယဒါနှင့်သိပ္ပဉ္စ(၃) (၁၇-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း၄)ရက်
ဝ၂၄၃။ ရာဟုလောဝါဒသုတ္တန်(၁) (၂၀-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၇)ရက်
ဝ၂၄၄။ ရာဟုလောဝါဒသုတ္တန်(၂) (၂၀-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၇)ရက်
ဝ၂၄၅။ ရာဟုလောဝါဒသုတ္တန်(၃) (၂၀-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၇)ရက်
ဝ၂၄၆။ ဝိနယသုသိက္ခိတ(၁) (၂၁-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၈)ရက်
ဝ၂၄၇။ ဝိနယသုသိက္ခိတ(၂) (၂၁-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၈)ရက်
ဝ၂၄၈။ သုဘာသိတဝါစာ(၁) (၂၃-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၂၄၉။ သုဘာသိတဝါစာ(၂) (၂၃-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၂၅ဝ။ သုဘာသိတဝါစာ(၃) (၂၃-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၂၅၁။ အာနန္ဒာထေရအပါဒါန် (၁) (၂၄-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၂၅၂။ အာနန္ဒာထေရအပါဒါန် (၂) (၂၄-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၂၅၃။ မာတာပီတုဥပဋ္ဌာနံ(၁) (၂၄-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၂၅၄။ မာတာပီတုဥပဋ္ဌာနံ(၂) (၂၄-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၂၅၅။ မာတာပီတုဥပဋ္ဌာနံ(၃) (၂၄-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၂၅၆။ ပုတ္တဒါရဿသင်္ဂဟ(၁) (၂၅-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၂၅၇။ ပုတ္တဒါရဿသင်္ဂဟ(၂) (၂၅-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၂၅၈။ ပုတ္တဒါရဿသင်္ဂဟမင်္ဂလာ(၃) (၂၅-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၂၅၉။ အနာကုလာစကမ္မန္တာမင်္ဂလာ(၁) (၂၆-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၂၆ဝ။ အနာကုလာစကမ္မန္တာမင်္ဂလာ(၂) (၂၆-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၂၆၁။ ဒါနဉ္စမင်္ဂလာ(၁) (၂၇-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၂၆၂။ ဒါနဉ္စမင်္ဂလာ(၂) (၂၇-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၂၆၃။ ဓမ္မပူဇာဒေသနာတရား (၂၈-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့
ဝ၂၆၄။ ဓမ္မစရိယမင်္ဂလာ(၁) (၂၉-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၁)ရက်
ဝ၂၆၅။ ဓမ္မစရိယမင်္ဂလာ(၂) (၂၉-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၁)ရက်
ဝ၂၆၆။ ဉာတကာနဉ္စသင်္ဂဟောမင်္ဂလာ(၁) (၃၀-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၂၆၇။ ဉာတကာနဉ္စသင်္ဂဟောမင်္ဂလာ(၂) (၃၀-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၂၆၈။ အနဝဇ္ဇကမ္မမင်္ဂလာ(၁) (၀၁-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၃)ရက်
ဝ၂၆၉။ အနဝဇ္ဇကမ္မ(၂) (၀၁-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၃)ရက်
ဝ၂၇ဝ။ အာရတီရတီပါပါ(၁) (၀၂-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၄)ရက်
ဝ၂၇၁။ အာရတီရတီပါပါ(၂) (၀၂-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၄)ရက်
ဝ၂၇၂။ အပ္ပမာဒေါစဓမ္မေတု(၁) (၀၄-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၆)ရက်
ဝ၂၇၃။ အပ္ပမာဒေါစဓမ္မေတု(၂) (၀၄-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၆)ရက်
ဝ၂၇၄။ မဇ္ဇပါနာသံယမော(၁) (၀၄-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၆)ရက်
ဝ၂၇၅။ မဇ္ဇပါနာသံယမော(၂) (၀၄-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၆)ရက်
ဝ၂၇၆။ ဂါရဝ(၁) (၁၅-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လဆန်း(၂) ရက် ၊
ဝ၂၇၇။ ဂါရဝ(၂) (၁၅-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လဆန်း(၂) ရက် ၊
ဝ၂၇၈။ ဂါရဝ(၃) (၁၅-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လဆန်း(၂) ရက် ၊
ဝ၂၇၉။ နိဝါတ မင်္ဂလာ(၁) (၂၃-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လဆန်း(၁၀) ရက် ၊
ဝ၂၈ဝ။ နိဝါတ မင်္ဂလာ(၂) (၂၃-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လဆန်း(၁၀) ရက် ၊
ဝ၂၈၁။ နိဝါတ မင်္ဂလာ(၃) (၂၃-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လဆန်း(၁၀) ရက် ၊
ဝ၂၈၂။ သန္တုဌိမင်္ဂလာ(၁) (၃၀-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၂၈၃။ သန္တုဌိမင်္ဂလာ(၂) (၃၀-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၂၈၄။ သန္တုဌိမင်္ဂလာ(၃) (၃၀-၀၅-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၂၈၅။ ရ။ ကတညုတာ မင်္ဂလာ(၁) (၀၅-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၈)ရက်
ဝ၂၈၆။ ကတညုတာ မင်္ဂလာ(၂) (၀၅-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၈)ရက်
ဝ၂၈၇။ ကာလေနဓမ္မသာဝန မင်္ဂလာ(၁) (၀၆-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၉)ရက်
ဝ၂၈၈။ ကာလေနဓမ္မသာဝန မင်္ဂလာ(၂) (၀၆-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၉)ရက်
ဝ၂၈၉။ ခန္တီ မင်္ဂလာ(၁) (၀၇-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၂၉ဝ။ ခန္တီ မင်္ဂလာ(၂) (၀၇-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၂၉၁။ ခန္တီ မင်္ဂလာ(၃) (၀၇-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၂၉၂ ။ သောဝစဿတာ မင်္ဂလာ(၁) (၀၈-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၂၉၃ ။ သောဝစဿတာ မင်္ဂလာ(၂) (၀၈-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၂၉၄။ ဇီဝကဝတ္တုတရားတော်(၁) (၀၈-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၂၉၅။ ဇီဝကဝတ္တုတရားတော်(၂) (၀၈-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၂၉၆။ သာမဏာနဉ္စဒဿနံ မင်္ဂလာ(၁) (၁၄-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၂၉၇။ သာမဏာနဉ္စဒဿနံ မင်္ဂလာ(၂) (၁၄-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၂၉၈။ ကာလေနဓမ္မသာကစ္ဆာ မင်္ဂလာ(၁) (၁၅-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလဆန်း(၃)ရက်
ဝ၂၉၉။ ကာလေနဓမ္မသာကစ္ဆာ မင်္ဂလာ(၂) (၁၅-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလဆန်း(၃)ရက်
ဝ၃ဝဝ။ တပ မင်္ဂလာ(၁) (၂၇-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလဆန်း(၁၅)ရက်
ဝ၃ဝ၁။ တပ မင်္ဂလာ(၂) (၂၇-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလဆန်း(၁၅)ရက်
ဝ၃ဝ၂။ တပ မင်္ဂလာ(၃) (၂၇-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလဆန်း(၁၅)ရက်
ဝ၃ဝ၃။ ဗြဟ္မစရိယ မင်္ဂလာ(၁) (၂၈-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၁)ရက်
ဝ၃ဝ၄။ ဗြဟ္မစရိယ မင်္ဂလာ(၂) (၂၈-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၁)ရက်
ဝ၃ဝ၅။ အရိယာသစ္စာနဒဿနံမင်္ဂလာ(၁) (၂၉-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၃ဝ၆။ အရိယာသစ္စာနဒဿနံ မင်္ဂလာ(၂) (၂၉-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၃ဝ၇။ အရိယာသစ္စာနဒဿနံ မင်္ဂလာ(၃) (၂၉-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၃ဝ၈။ နိဗ္ဗာနသစ္ဆိကိရိယာစ မင်္ဂလာ(၁) (၃၀-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၃)ရက်
ဝ၃ဝ၉။ နိဗ္ဗာနသစ္ဆိကိရိယာစ မင်္ဂလာ(၂) (၃၀-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၃)ရက်
ဝ၃၁ဝ။ နိဗ္ဗာနသစ္ဆိကိရိယာစ မင်္ဂလာ(၃) (၃၀-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၃)ရက်
ဝ၃၁၁ ။ လောကဓမ္မနကမ္ပတိမင်္ဂလာ(၁) (၀၁-၀၇-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၄)ရက်
ဝ၃၁၂ ။ လောကဓမ္မနကမ္ပတိမင်္ဂလာ(၂) (၀၁-၀၇-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၄)ရက်
ဝ၃၁၃။ အသောကံ မင်္ဂလာ(၁) (၀၂-၀၇-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၅)ရက်
ဝ၃၁၄။ အသောကံ မင်္ဂလာ(၂) (၀၂-၀၇-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၅)ရက်
ဝ၃၁၅။ အသောကံ မင်္ဂလာ(၃) (၀၂-၀၇-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၅)ရက်
ဝ၃၁၆။ ဝိရဇံ မင်္ဂလာ(၁) (၀၃-၀၇-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၆)ရက်
ဝ၃၁၇။ ဝိရဇံ မင်္ဂလာ(၂) (၀၃-၀၇-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၆)ရက်
ဝ၃၁၈ ။ ခေမံ မင်္ဂလာ(၁) (၀၅-၀၇-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၈)ရက်
ဝ၃၁၉ ။ ခေမံ မင်္ဂလာ(၂) (၀၅-၀၇-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၈)ရက်
ဝ၃၂ဝ ။ ခေမံ မင်္ဂလာ(၃) (၀၅-၀၇-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၈)ရက်
ဝ၃၂၁။ တိရိယပါပ္ပဒထေရအပါဒါန်(၁) (၁၉-၀၇-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၃၂၂။ တိရိယပါပ္ပဒထေရအပါဒါန်(၂) (၁၉-၀၇-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၃၂၃။ တိရိယပါပ္ပဒထေရအပါဒါန်(၃) (၁၉-၀၇-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၃၂၄။ ပါဏီယာဟာရသုတ္တန်တရားတော်(၁) (၁၉-၀၉-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တော်သလင်းလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၃၂၅။ ပါဏီယာဟာရသုတ္တန်တရားတော်(၂) (၁၉-၀၉-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တော်သလင်းလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၃၂၆။ ပါဏီယာဟာရတရားတော်(၁) (၁၉-၀၉-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တော်သလင်းလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၃၂၇။ ပါဏီယာဟာရတရားတော်(၂) (၁၉-၀၉-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တော်သလင်းလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၃၂၈။ သဉ္ဇာလီရွှေပလ္လင် (၂၁-၀၉-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တော်သလင်းလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၃၂၉။ ဓါတုဝိဘဇ္ဇနတရားတော်(၁) (၁၂-၁၀-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၃)ရက်
ဝ၃၃ဝ။ ဓါတုဝိဘဇ္ဇနတရားတော်(၂) (၁၂-၁၀-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၃)ရက်
ဝ၃၃၁။ ဓါတုဝိဘဇ္ဇနတရားတော်(၃) (၁၂-၁၀-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၃)ရက်
ဝ၃၃၂။ အဘိဏှပစ္စဝက္ခိတဗ္ဗသူတ္တန်(၁) not complete (၂၆-၁၀-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၃၃၃ ။ ရွှေဥမြှုပ်တရားတော်(၁) (၀၉-၁၁-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တဆောင်မုန်းလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၃၃၄ ။ ရွှေဥမြှုပ်တရားတော်(၂) (၀၉-၁၁-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တဆောင်မုန်းလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၃၃၅ ။ ရွှေဥမြှုပ်တရားတော်(၃) (၀၉-၁၁-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တဆောင်မုန်းလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၃၃၆။ ကုမ ္ဘာကာရဇာတ်(၁) (၁၇-၁၁-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၃၃၇။ ကုမ ္ဘာကာရဇာတ်(၂) (၁၇-၁၁-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၃၃၈။ သုဇာတာဥပါသိကာတရား(၁) (၁၈-၁၁-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၃၃၉။ သုဇာတာဥပါသိကာတရား(၂) (၁၈-၁၁-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၃၄ဝ။ တဖုဿနှင့်ဘလိကညီနောင် (၁) (၁၉-၁၁-၁၉၈၀) ၁၃၄၂ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၃၄၁။ တဖုဿနှင့်ဘလိကညီနောင် (၂) (၁၉-၁၁-၁၉၈၀) ၁၃၄၂ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၃၄၂။ စူဠဂေါသိင်္ဂသုတ္တန် (၁) ပထမပိုင်း (၀၆-၁၂-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၃၄၃။ စူဠဂေါသိင်္ဂသုတ္တန် (၁) ဒုတိယပိုင်း (၀၆-၁၂-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၃၄၄။ စူဠဂေါသိင်္ဂသုတ္တန် (၂) ပထမပိုင်း (၀၆-၁၂-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၃၄၅။ စူဠဂေါသိင်္ဂသုတ္တန် (၂) ဒုတိယပိုင်း (၀၆-၁၂-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၃၄၆။ စူဠဂေါသိင်္ဂသုတ္တန် (၃) ပထမပိုင်း (၀၆-၁၂-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၃၄၇။ စူဠဂေါသိင်္ဂသုတ္တန် (၃) ဒုတိယပိုင်း (၀၆-၁၂-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၃၄၈။ ဧက္ခဏသုတ္တန် (၁၇-၁၂-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နတ်တော်လပြည့်ဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၃၄၉ ။ ရောဟိတဿသုတ္တန်(၁) (၂၃-၁၂-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁)ရက်
ဝ၃၅ဝ ။ ရောဟိတဿသုတ္တန်(၂) (၂၃-၁၂-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁)ရက်
ဝ၃၅၁။ နိဗ္ဗာနပဥှာသုတ္တန်(၁) (၁၈-၀၁-၁၉၈၁) ၁၃၄၂၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၃၅၂။ နိဗ္ဗာနပဥှာသုတ္တန်(၂) (၁၈-၀၁-၁၉၈၁) ၁၃၄၂၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၃၅၃။ ဇဋာသုတ္တန်(၁) (၂၁-၀၁-၁၉၈၁) ၁၃၄၂၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁)ရက်
ဝ၃၅၄။ ဇဋာသုတ္တန်(၂) (၂၁-၀၁-၁၉၈၁) ၁၃၄၂၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁)ရက်
ဝ၃၅၅။ အစေလကဿပတရား(၁) (၁၀-၀၂-၁၉၈၁) ၁၃၄၂၊ တပို့တွဲလဆန်း(၆)ရက်
ဝ၃၅၆။ အစေလကဿပတရား(၂) (၁၀-၀၂-၁၉၈၁) ၁၃၄၂၊ တပို့တွဲလဆန်း(၆)ရက်
ဝ၃၅၇။ အစေလကဿပတရား(၃) (၁၀-၀၂-၁၉၈၁) ၁၃၄၂၊ တပို့တွဲလဆန်း(၆)ရက်
ဝ၃၅၈။ ဘာရသုတ္တန် (၂၃-၀၂-၁၉၈၁) ၁၃၄၂၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် (၄)ရက်
ဝ၃၅၉။ ဗုဒ္ဓဘိသေကမင်္ဂလာ (၁) (၁၄-၀၃-၁၉၈၁) ၁၃၄၂၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၉)ရက်
ဝ၃၆ဝ။ ဗုဒ္ဓဘိသေကမင်္ဂလာ (၂) (၁၄-၀၃-၁၉၈၁) ၁၃၄၂၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၉)ရက်
ဝ၃၆၁။ ပထမနိဗ္ဗာနပတိသံယုတ္တသုတ္တန်(၁) (၁၇-၀၄-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ တန်ခူးလဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၃၆၂။ ပထမနိဗ္ဗာနပတိသံယုတ္တသုတ္တန်(၂) (၁၇-၀၄-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ တန်ခူးလဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၃၆၃။ ပထမနိဗ္ဗာနပတိသံယုတ္တသုတ္တန်(၃) (၁၇-၀၄-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ တန်ခူးလဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၃၆၄။ တတိယနိဗ္ဗာနပတိသံယုတ္တသုတ္တန်(၁) (၂၁-၀၄-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၃၆၅။ တတိယနိဗ္ဗာနပတိသံယုတ္တသုတ္တန်(၂) (၂၁-၀၄-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၃၆၆။ (၇)နေ့ဗုဒ္ဓဝင်တရားတော်(၁) (၁၈-၀၅-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၅) ရက် ၊
ဝ၃၆၇။ (၇)နေ့ဗုဒ္ဓဝင်တရားတော်(၂) (၁၈-၀၅-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၅) ရက် ၊
ဝ၃၆၈။ (၇)နေ့ဗုဒ္ဓဝင်တရားတော်(၃) (၁၈-၀၅-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၅) ရက် ၊
ဝ၃၆၉။ ပါရာသိသုတ္တန်(ပထမပိုင်း)-(၁) (၂၈-၀၅-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၃၇ဝ။ ပါရာသိသုတ္တန်(ပထမပိုင်း)-(၂) (၂၈-၀၅-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၃၇၁။ ပါရာသိသုတ္တန်(ဒုတိယပိုင်း)-(၁) (၂၈-၀၅-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၃၇၂။ ပါရာသိသုတ္တန်(ဒုတိယပိုင်း)-(၂) (၂၈-၀၅-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၃၇၃။ ပါရာသိသုတ္တန်(တတိယပိုင်း)-(၁) (၀၅-၀၆-၁၉၈၁) ၁၃၄၃ ၊ နယုန်လဆန်း(၃)ရက်
ဝ၃၇၄။ ပါရာသိသုတ္တန်(တတိယပိုင်း)-(၂) (၀၅-၀၆-၁၉၈၁) ၁၃၄၃ ၊ နယုန်လဆန်း(၃)ရက်
ဝ၃၇၅။ ပါရာသိသုတ္တန်(ပဉ္စမပိုင်း)-(၁) (၁၄-၀၆-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ နယုန်လဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၃၇၆။ ပါရာသိသုတ္တန်(ပဉ္စမပိုင်း)-(၂) (၁၄-၀၆-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ နယုန်လဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၃၇၇။ ပါရာသိသုတ္တန်(ဆဌမပိုင်း)-(၁) (၂၂-၀၆-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၅)ရက်
ဝ၃၇၈။ ပါရာသိသုတ္တန်(ဆဌမပိုင်း)-(၂) (၂၂-၀၆-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၅)ရက်
ဝ၃၇၉။ ပါရာသိသုတ္တန်(သတ္တမပိုင်း)-(၁) (၂၃-၀၆-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၆)ရက်
ဝ၃၈ဝ။ ပါရာသိသုတ္တန်(သတ္တမပိုင်း)-(၂) (၂၃-၀၆-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၆)ရက်
ဝ၃၈၁။ ပါရာသိသုတ္တန်(အဌမပိုင်း)-(၁) (၁၀-၀၇-၁၉၈၁) ၁၃၄၃ ၊ ဝါဆိုလဆန်း(၉)ရက်
ဝ၃၈၂။ ပါရာသိသုတ္တန်(အဌမပိုင်း)-(၂) (၁၀-၀၇-၁၉၈၁) ၁၃၄၃ ၊ ဝါဆိုလဆန်း(၉)ရက်
ဝ၃၈၃။ ပါရာသိသုတ္တန်(နောက်ဆုံးပိုင်း)-(၁) (၁၂-၀၇-၁၉၈၁) ၁၃၄၃ ၊ ဝါဆိုလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၃၈၄။ ပါရာသိသုတ္တန်(နောက်ဆုံးပိုင်း)-(၂) (၁၂-၀၇-၁၉၈၁) ၁၃၄၃ ၊ ဝါဆိုလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၃၈၅။ သာသနာကွယ်ကြောင်းတရားအပေါင်း(၁) (၁၅-၁၁-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝ၃၈၆။ သာသနာကွယ်ကြောင်းတရားအပေါင်း(၂) (၁၅-၁၁-၁၉၈၁) ၁၃၄၃၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝ၃၈၇။ သံဝေဇနိယလေးဌာနတရား(၁) (၂၉-၀၃-၁၉၈၂) ၁၃၄၃၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၅)ရက်
ဝ၃၈၈။ သံဝေဇနိယလေးဌာနတရား(၂) (၂၉-၀၃-၁၉၈၂) ၁၃၄၃၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၅)ရက်
ဝ၃၈၉။ သံဝေဇနိယလေးဌာနတရား(၃) (၂၉-၀၃-၁၉၈၂) ၁၃၄၃၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၅)ရက်
ဝ၃၉ဝ။ သံဝေဇနိယလေးဌာနတရား(၄) (၂၉-၀၃-၁၉၈၂) ၁၃၄၃၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၅)ရက်
ဝ၃၉၁။ သံဝေဇနိယလေးဌာန (၁) (၂၉-၀၃-၁၉၈၂) ၁၃၄၃၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၅)ရက်
ဝ၃၉၂။ သံဝေဇနိယလေးဌာန (၂) (၂၉-၀၃-၁၉၈၂) ၁၃၄၃၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၅)ရက်
ဝ၃၉၃။ သံဝေဇနိယလေးဌာန (၃) (၂၉-၀၃-၁၉၈၂) ၁၃၄၃၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၅)ရက်
ဝ၃၉၄။ သံဝေဇနိယလေးဌာန(၄) (၂၉-၀၃-၁၉၈၂) ၁၃၄၃၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၅)ရက်
ဝ၃၉၅။ ဒုတိကနိဗ္ဗာနပတိသံယုတ္တသုတ္တန်(၁) (၂၃-၀၄-၁၉၈၂) ၁၃၄၃၊ ကဆုန်လဆန်း(၁)ရက်
ဝ၃၉၆။ ဒုတိကနိဗ္ဗာနပတိသံယုတ္တသုတ္တန်(၂) (၂၃-၀၄-၁၉၈၂) ၁၃၄၃၊ ကဆုန်လဆန်း(၁)ရက်
ဝ၃၉၇။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(ပထမပိုင်း)(၁) (၁၆-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၀)ရက်
ဝ၃၉၈။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(ပထမပိုင်း)(၂) (၁၆-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၀)ရက်
ဝ၃၉၉။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(ပထမပိုင်း)(၃) (၁၆-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၀)ရက်
ဝ၄ဝဝ။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(ဒုတိယပိုင်း)(၁) (၁၇-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၁)ရက်
ဝ၄ဝ၁။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(ဒုတိယပိုင်း)(၂) (၁၇-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၁)ရက်
ဝ၄ဝ၂။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(ဒုတိယပိုင်း)(၃) (၁၇-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၁)ရက်
ဝ၄ဝ၃။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(တတိယပိုင်း)(၁) (၁၈-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၂)ရက်
ဝ၄ဝ၄။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(တတိယပိုင်း)(၂) (၁၈-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၂)ရက်
ဝ၄ဝ၅။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(တတိယပိုင်း)(၃) (၁၈-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၂)ရက်
ဝ၄ဝ၆။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(စတုတ္ထပိုင်း)(၁) (၁၉-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၃)ရက်
ဝ၄ဝ၇။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(စတုတ္ထပိုင်း)(၂) (၁၉-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၃)ရက်
ဝ၄ဝ၈။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(ပဉ္စမပိုင်း)(၁) (၂၀-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၄)ရက်
ဝ၄ဝ၉။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(ပဉ္စမပိုင်း)(၂) (၂၀-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၄)ရက်
ဝ၄၁ဝ။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(ပဉ္စမပိုင်း)(၃) (၂၀-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၄)ရက်
ဝ၄၁၁။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(ဆဌမပိုင်း)(၁) (၂၁-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း(၁)ရက်
ဝ၄၁၂။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(ဆဌမပိုင်း)(၂) (၂၁-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း(၁)ရက်
ဝ၄၁၃။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(သတ္တမပိုင်း)(၁) (၂၂-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၄၁၄။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(သတ္တမပိုင်း)(၂) (၂၂-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၄၁၅။ ဝမ္မိကသုတ္တန်(သတ္တမပိုင်း)(၃) (၂၂-၀၆-၁၉၈၂) ၁၃၄၄၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၄၁၆ ။ ကျောင်း၆၀ တရား(၁) (၁၇-၀၆-၁၉၈၄) ၁၃၄၆၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝ၄၁၇ ။ ကျောင်း၆၀ တရား(၂) (၁၇-၀၆-၁၉၈၄) ၁၃၄၆၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝ၄၁၈။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရားတော်(၁) (၂၈-၀၆-၁၉၈၄) 1984 june 28
ဝ၄၁၉။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရားတော်(၂) (၂၉-၀၆-၁၉၈၄) 1984 june 29
ဝ၄၂ဝ။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရားတော်(၃) (၃၀-၀၆-၁၉၈၄) 1984 june 30
ဝ၄၂၁။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရားတော်(၄) (၀၁-၀၇-၁၉၈၄) 1984 july 1
ဝ၄၂၂။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရားတော်(၅) (၀၂-၀၇-၁၉၈၄) 1984 july 2
ဝ၄၂၃။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရားတော်(၆) (၀၃-၀၇-၁၉၈၄) 1984 july 3
ဝ၄၂၄။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရားတော်(၇) (၀၄-၀၇-၁၉၈၄) 1984 july 4
ဝ၄၂၅။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရားတော်(၈) (၀၅-၀၇-၁၉၈၄) 1984 july 5
ဝ၄၂၆။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရားတော်(၉) (၀၆-၀၇-၁၉၈၄) 1984 july 6
ဝ၄၂၇။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရားတော်(၁၀) (၀၇-၀၇-၁၉၈၄) 1984 july 7
ဝ၄၂၈။ အရှင်ဃောဓိကမထေရ်တရား (၀၂-၀၃-၁၉၈၅) ၁၃၄၆၊ တပေါင်းလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၄၂၉။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မှီကိုးကွယ်မှုအခြေအနေတရား(၁) (၂၀-၀၇-၁၉၈၅) ၁၃၄၇၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၃)ရက်
ဝ၄၃ဝ။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မှီကိုးကွယ်မှုအခြေအနေတရား(၂) (၂၁-၀၇-၁၉၈၅) ၁၃၄၇၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၄)ရက်
ဝ၄၃၁။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မှီကိုးကွယ်မှုအခြေအနေတရား(၃) (၂၂-၀၇-၁၉၈၅) ၁၃၄၇၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၅)ရက်
ဝ၄၃၂။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မှီကိုးကွယ်မှုအခြေအနေတရား(၄) (၂၃-၀၇-၁၉၈၅) ၁၃၄၇၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၆)ရက်
ဝ၄၃၃။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မှီကိုးကွယ်မှုအခြေအနေတရား(၅) (၂၄-၀၇-၁၉၈၅) ၁၃၄၇၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၄၃၄။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မှီကိုးကွယ်မှုအခြေအနေတရား(၆) (၂၅-၀၇-၁၉၈၅) ၁၃၄၇၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၈)ရက်
ဝ၄၃၅။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မှီကိုးကွယ်မှုအခြေအနေတရား(၇) (၂၆-၀၇-၁၉၈၅) ၁၃၄၇၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၉)ရက်
ဝ၄၃၆။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မှီကိုးကွယ်မှုအခြေအနေတရား(၈) (၂၇-၀၇-၁၉၈၅) ၁၃၄၇၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၄၃၇။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မှီကိုးကွယ်မှုအခြေအနေတရား(၉) (၂၈-၀၇-၁၉၈၅) ၁၃၄၇၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၄၃၈။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မှီကိုးကွယ်မှုအခြေအနေတရား(၁၀) (၂၉-၀၇-၁၉၈၅) ၁၃၄၇၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၄၃၉။ ဓမ္မဒီပတရားတော်(၁) (၁၄-၀၃-၁၉၈၆) ၁၃၄၇ တပေါင်းလပြည့်ဆန်း (၄) ရက်နေ့
ဝ၄၄ဝ။ ဓမ္မဒီပတရားတော်(၂) (၁၄-၀၃-၁၉၈၆) ၁၃၄၇ တပေါင်းလပြည့်ဆန်း (၄) ရက်နေ့
ဝ၄၄၁။ ဗုဒ္ဓခရီးစဉ် (၁) (၂၆-၀၉-၁၉၈၇) ၁၃၄၉၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၄)ရက်
ဝ၄၄၂။ ဗုဒ္ဓခရီးစဉ် (၂) (၂၆-၀၉-၁၉၈၇) ၁၃၄၉၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၄)ရက်
ဝ၄၄၃။ ဗုဒ္ဓခရီးစဉ် (၃) (၂၆-၀၉-၁၉၈၇) ၁၃၄၉၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၄)ရက်
ဝ၄၄၄။ ဗုဒ္ဓနုဿတိဘာဝနာ(၁) (၀၅-၀၁-၁၉၉၀) ၁၃၅၁၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၀) ရက်
ဝ၄၄၅။ ဗုဒ္ဓနုဿတိဘာဝနာ(၂) (၀၅-၀၁-၁၉၉၀) ၁၃၅၁၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၀) ရက်
ဝ၄၄၆။ မရဏသတိကထာ (၁) (၂၃-၀၉-၁၉၉၀) ၁၃၅၂၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၅)ရက်
ဝ၄၄၇။ မရဏသတိကထာ (၂) (၂၃-၀၉-၁၉၉၀) ၁၃၅၂၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၅)ရက်
ဝ၄၄၈။ ခရီးသွားရခြင်းအကျိုးကျေးဇူး (၀၃-၀၃-၁၉၉၃) ၁၃၅၄၊ တပေါင်းလဆန်း (၁၁) ရက်
ဝ၄၄၉။ မဂ္ဂသုတ္တန်(၁) (၀၆-၀၃-၁၉၉၃) ၁၃၅၄၊ တပေါင်းလဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၄၅ဝ။ မဂ္ဂသုတ္တန်(၂) (၀၆-၀၃-၁၉၉၃) ၁၃၅၄၊ တပေါင်းလဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၄၅၁။ မဂ္ဂသုတ္တန်(၃) (၀၆-၀၃-၁၉၉၃) ၁၃၅၄၊ တပေါင်းလဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၄၅၂။ ဧကာယနသုတ္တန်(ဒုတိယပိုင်း)(၁) (၂၂-၀၄-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ ကဆုန်လဆန်း(၂)ရက်
ဝ၄၅၃။ ဧကာယနသုတ္တန်(ဒုတိယပိုင်း)(၂) (၂၂-၀၄-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ ကဆုန်လဆန်း(၂)ရက်
ဝ၄၅၄။ ဧကာယနသုတ္တန်(ဒုတိယပိုင်း)(၃) (၂၂-၀၄-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ ကဆုန်လဆန်း(၂)ရက်
ဝ၄၅၅။ ဧကာယနသုတ္တန်(တတိယပိုင်း)(၁) (၂၃-၀၄-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ ကဆုန်လဆန်း(၃)ရက်
ဝ၄၅၆။ ဧကာယနသုတ္တန်(တတိယပိုင်း)(၂) (၂၃-၀၄-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ ကဆုန်လဆန်း(၃)ရက်
ဝ၄၅၇။ ဧကာယနသုတ္တန်(တတိယပိုင်း)(၃) (၂၃-၀၄-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ ကဆုန်လဆန်း(၃)ရက်
ဝ၄၅၈။ မဂ္ဂဧကာယနနှင့်သဘာဝဓမ္မ(၁) (၂၃-၀၅-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ နယုန်လဆန်း(၃)ရက်
ဝ၄၅၉။ မဂ္ဂဧကာယနနှင့်သဘာဝဓမ္မ(၂) (၂၃-၀၅-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ နယုန်လဆန်း(၃)ရက်
ဝ၄၆ဝ။ မဂ္ဂဧကာယနနှင့်သဘာဝဓမ္မ(၃) (၂၃-၀၅-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ နယုန်လဆန်း(၃)ရက်
ဝ၄၆၁။ အပ္ပမာဒတရား(၁) (၂၇-၀၅-၁၉၉၃) ၁၃၅၅ ၊ နယုန်လဆန်း(၇) ရက် ၊
ဝ၄၆၂။ အပ္ပမာဒတရား(၂) (၂၇-၀၅-၁၉၉၃) ၁၃၅၅ ၊ နယုန်လဆန်း(၇) ရက် ၊
ဝ၄၆၃။ အပ္ပမာဒတရား(၁) (၂၇-၀၅-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ နယုန်လဆန်း(၇)ရက်
ဝ၄၆၄။ အပ္ပမာဒတရား(၂) (၂၇-၀၅-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ နယုန်လဆန်း(၇)ရက်
ဝ၄၆၅။ မဂ္ဂဧကာယနနှင့်နတုံမှာကာပိမာတာဝတ(၁) (၃၀-၀၅-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ နယုန်လဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၄၆၆။ မဂ္ဂဧကာယနနှင့်နတုံမှာကာပိမာတာဝတ(၂) (၃၀-၀၅-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ နယုန်လဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၄၆၇။ မဂ္ဂဧကာယနနှင့်နတုံမှာကာပိမာတာဝတ(၃) (၃၀-၀၅-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ နယုန်လဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၄၆၈။ သူတော်ကောင်းတရား(၇)ပါး-၁ (၃၀-၀၇-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၄၆၉။ သူတော်ကောင်းတရား(၇)ပါး-၂ (၃၀-၀၇-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၄၇ဝ။ သူတော်ကောင်းတရား(၇)ပါး-၃ (၃၀-၀၇-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၄၇၁ ။ ကောသလမင်း ဆင်ခြင်ရာတရား (၁၇-၁၁-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၄)ရက်
ဝ၄၇၂။ တန်ဖိုးရှိသောလေးဂါထာ တရား(၁) (၀၄-၁၂-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့့််ကျော်(၆)ရက်
ဝ၄၇၃။ တန်ဖိုးရှိသောလေးဂါထာ တရား(၂) (၀၄-၁၂-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့့််ကျော်(၆)ရက်
ဝ၄၇၄။ အပ္ပမာဒသတိပဌာန်(၁) (၀၆-၁၂-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၈)ရက်
ဝ၄၇၅။ အပ္ပမာဒသတိပဌာန်(၂) (၀၆-၁၂-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၈)ရက်
ဝ၄၇၆။ အပ္ပမာဒသတိပဌာန်(၃) (၀၆-၁၂-၁၉၉၃) ၁၃၅၅၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၈)ရက်
ဝ၄၇၇။ ဥတ္တရနန္ဒမာတာဝတ္တု(၁) not complete (၁၂-၀၃-၁၉၉၄) ၁၃၅၅၊ တပေါင်းလဆန်း(၁)ရက်
ဝ၄၇၈ ။ မေတ္တာစွမ်းရည် (၂၂-၀၃-၁၉၉၄) ၁၃၅၅၊ တပေါင်းလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၄၇၉။ ရတနာငါးမျိုးနှင့်ဝိဟာရအာနုမောဒနာ (၂၂-၀၃-၁၉၉၄) ၁၃၅၅၊ တပေါင်းလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၄၈ဝ။ အင်္ဂုလိမာလ (၁) (၁၃-၀၅-၁၉၉၄) ၁၃၅၆၊ ကဆုန်လဆန်း(၄)ရက်
ဝ၄၈၁။ အင်္ဂုလိမာလ (၂) (၁၃-၀၅-၁၉၉၄) ၁၃၅၆၊ ကဆုန်လဆန်း(၄)ရက်
ဝ၄၈၂။ အင်္ဂုလိမာလ (၃) (၁၃-၀၅-၁၉၉၄) ၁၃၅၆၊ ကဆုန်လဆန်း(၄)ရက်
ဝ၄၈၃။ ဧဒကဘဒ္ဒဇာတ်(၁) (၁၆-၀၅-၁၉၉၄) ၁၃၅၆၊ ကဆုန်လဆန်း (၇) ရက်
ဝ၄၈၄။ ဝိဒကဘဒ္ဒဇာတ်(၂) (၁၆-၀၅-၁၉၉၄) ၁၃၅၆၊ ကဆုန်လဆန်း (၇) ရက်
ဝ၄၈၅။ ဓမ္မတန်ဘိုးတရားတော်(၁) (၂၆-၀၅-၁၉၉၄) ၁၃၅၆၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၄၈၆။ ဓမ္မတန်ဘိုးတရားတော်(၂) (၂၆-၀၅-၁၉၉၄) ၁၃၅၆၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၄၈၇။ ဓမ္မတန်ဘိုးတရားတော်(၃) (၂၆-၀၅-၁၉၉၄) ၁၃၅၆၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၄၈၈ ။ မေတ္တာတရား (၀၄-၀၆-၁၉၉၄) ၁၃၅၆၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၁) ရက်
ဝ၄၈၉။ အရှင်နာဂသိန်နှင့်အဘိဓမ္မာ(၁) (၁၉-၁၀-၁၉၉၄) ၁၃၅၆၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်
ဝ၄၉ဝ။ အရှင်နာဂသိန်နှင့်အဘိဓမ္မာ(၂) (၁၉-၁၀-၁၉၉၄) ၁၃၅၆၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်
ဝ၄၉၁။ အသက်ရှည်ကြောင်းမဟာဓမ္မပါလဇာတ် (၁) (၀၂-၁၂-၁၉၉၄) ၁၃၅၆၊ တဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၄၉၂။ အသက်ရှည်ကြောင်းမဟာဓမ္မပါလဇာတ် (၂) (၀၂-၁၂-၁၉၉၄) ၁၃၅၆၊ တဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၄၉၃။ သတ္တိသုတ္တန်(၁) (၀၄-၁၂-၁၉၉၄) ၁၃၅၆၊ နတ်တော်လဆန်း(၂)ရက်
ဝ၄၉၄။ သတ္တိသုတ္တန်(၂) (၀၄-၁၂-၁၉၉၄) ၁၃၅၆၊ နတ်တော်လဆန်း(၂)ရက်
ဝ၄၉၅။ စိတ္တသူကြယ်အတ္ထုပတ္တိ(၁) (၁၂-၀၁-၁၉၉၅) ၁၃၅၆၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၄၉၆။ စိတ္တသူကြယ်အတ္ထုပတ္တိ(၂) (၁၂-၀၁-၁၉၉၅) ၁၃၅၆၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၄၉၇။ အရှင်ဝင်္ဂီသထေရ်ရပါဒါန်(၁) (၁၁-၀၂-၁၉၉၅) ၁၃၅၆၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၄၉၈။ အရှင်ဝင်္ဂီသထေရ်ရပါဒါန်(၂) (၁၁-၀၂-၁၉၉၅) ၁၃၅၆၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၄၉၉။ အရှင်ဝင်္ဂီသထေရ်ရပါဒါန်(၃) (၁၁-၀၂-၁၉၉၅) ၁၃၅၆၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၅ဝဝ။ အရဟံဗုဒ္ဓနုဿတိဘာဝနာ(၁) (၁၂-၀၂-၁၉၉၅) ၁၃၅၆၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၅ဝ၁။ အရဟံဗုဒ္ဓနုဿတိဘာဝနာ(၂) (၁၂-၀၂-၁၉၉၅) ၁၃၅၆၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၅ဝ၂။ သူတော်ကောင်းတရား(၁) (၂၂-၀၂-၁၉၉၅) ၁၃၅၆၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၈)ရက်
ဝ၅ဝ၃။ သူတော်ကောင်းတရား(၂) (၂၂-၀၂-၁၉၉၅) ၁၃၅၆၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၈)ရက်
ဝ၅ဝ၄ ။ မေတ္တာစေတော်မုတ္တိသတ္တိသုတ္တန်(၁) (၂၄-၀၂-၁၉၉၅) ၁၃၅၆၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၅ဝ၅ ။ မေတ္တာစေတော်မုတ္တိသတ္တိသုတ္တန်(၂) (၂၄-၀၂-၁၉၉၅) ၁၃၅၆၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၅ဝ၆။ ဗာကုလ ဝတ္ထု (၁) (၁၁-၀၃-၁၉၉၅) ၁၃၅၆၊ တပေါင်းလဆန်း (၁၁) ရက်နေ့
ဝ၅ဝ၇။ ဗာကုလ ဝတ္ထု (၂) (၁၁-၀၃-၁၉၉၅) ၁၃၅၆၊ တပေါင်းလဆန်း (၁၁) ရက်နေ့
ဝ၅ဝ၈။ ဗာဟိယအလုပ်ပေးတရား(၁) (၁၃-၀၃-၁၉၉၅) ၁၃၅၆၊ တပေါင်းလဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၅ဝ၉။ ဗာဟိယအလုပ်ပေးတရား(၂) (၁၃-၀၃-၁၉၉၅) ၁၃၅၆၊ တပေါင်းလဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၅၁ဝ။ နတ္တဓိဇာတ်တော် (၁၂-၀၄-၁၉၉၅) ၁၃၅၆၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၁၃)ရက်
ဝ၅၁၁ ။ ရွှေစေတီဝတ္တု(၁) (၁၃-၀၆-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ နယုန်လပြည့့််ကျော် (၁)ရက်
ဝ၅၁၂ ။ ရွှေစေတီဝတ္တု(၂) (၁၃-၀၆-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ နယုန်လပြည့့််ကျော် (၁)ရက်
ဝ၅၁၃။ ဝနရောပသုတ္တန် (၁၃-၀၆-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၁)ရက်
ဝ၅၁၄။ ဗဟဿုတ ပစ္စေက ဗုဒ္ဓ(၁) (၀၇-၁၀-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၅၁၅။ ဗဟုဿုတ ပစ္စေက ဗုဒ္ဓ(၂) (၀၇-၁၀-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၅၁၆။ အန္တိမပူဇာသဓုကိဋနာဒေသနာတော်(၁) (၁၆-၁၀-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၈)ရက်
ဝ၅၁၇။ အန္တိမပူဇာသဓုကိဋနာဒေသနာတော်(၂) (၁၆-၁၀-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၈)ရက်
ဝ၅၁၈။ အန္တိမပူဇာသဓုကိဋနာဒေသနာတော်(၃) (၁၆-၁၀-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၈)ရက်
ဝ၅၁၉ ။ ထေရဝါဒဓမ္မအောင်လံတရား(၁) (၀၈-၁၁-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၅၂ဝ ။ ထေရဝါဒဓမ္မအောင်လံတရား(၂) (၀၈-၁၁-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၅၂၁ ။ ထေရဝါဒဓမ္မအောင်လံတရား(၃) (၀၈-၁၁-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၅၂၂ ။ ထေရဝါဒဓမ္မအောင်လံတရား(၁) (၀၈-၁၁-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၅၂၃ ။ ထေရဝါဒဓမ္မအောင်လံတရား(၂) (၀၈-၁၁-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၅၂၄ ။ ထေရဝါဒဓမ္မအောင်လံတရား(၃) (၀၈-၁၁-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၅၂၅။ သီဟပစ္စေကဗုဒ္ဓတရား(၁) (၂၁-၁၁-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့့််ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၅၂၆။ သီဟပစ္စေကဗုဒ္ဓတရား(၂) (၂၁-၁၁-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့့််ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၅၂၇။ အဂ္ဂပူဇာတရားတော် (၂၇-၁၂-၁၉၉၅) ၁၃၅၇၊ ပြာသိုလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၅၂၈။ သီဟပစ္စေကဗုဒ္ဓတရား (၀၃-၀၁-၁၉၉၆) ၁၃၅၇၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၅၂၉။ လူတို့၏ကျင့်ဝတ်တရား (၁) (၁၃-၀၁-၁၉၉၆) ၁၃၅၇၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၉)ရက်
ဝ၅၃ဝ။ လူတို့၏ကျင့်ဝတ်တရား (၁) (၁၃-၀၁-၁၉၉၆) ၁၃၅၇၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၉)ရက်
ဝ၅၃၁။ နိဓိကဏ္ဍတရား(၁) (၁၅-၀၁-၁၉၉၆) ၁၃၅၇၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၅၃၂။ နိဓိကဏ္ဍတရား(၂) (၁၅-၀၁-၁၉၉၆) ၁၃၅၇၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၅၃၃။ ဗုဒ္ဓဓမ္မတရား(၁) (၃၁-၀၁-၁၉၉၆) ၁၃၅၇၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၅၃၄။ ဗုဒ္ဓဓမ္မတရား(၂) (၃၁-၀၁-၁၉၉၆) ၁၃၅၇၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၅၃၅ ။ ဂေါသိင်္ဂသုတ္တန်(၁) (၀၁-၀၂-၁၉၉၆) ၁၃၅၇၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၅၃၆ ။ ဂေါသိင်္ဂသုတ္တန်(၂) (၀၁-၀၂-၁၉၉၆) ၁၃၅၇၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၅၃၇။ သံတဝိဟာရတရား (ချမ်းသာစွာနေနည်း) (၁၁-၀၂-၁၉၉၆) ၁၃၅၇၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၈)ရက်
ဝ၅၃၈။ မဉ္ဇိမဂုဏ်ရည်တရား (၁၁-၀၂-၁၉၉၆) ၁၃၆၃၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၅၃၉။ ပါဝေယကဆင်ကြီးဥပမာ (၁၂-၀၂-၁၉၉၆) ၁၃၅၇၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၉)ရက်
ဝ၅၄ဝ။ မမေ့အပ်တဲ့လေးဌာနတရား (၂၁-၀၂-၁၉၉၆) ၁၃၅၇၊ တပေါင်းလဆန်း(၄)ရက်
ဝ၅၄၁။ သုခလေးပါးနှင့်ဓမ္မတန်ဖိုးတရား (၀၈-၀၃-၁၉၉၆) ၁၃၅၉၊ တပေါင်းလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၅၄၂။ သုခလေးပါးနှင့်ဓမ္မတန်ဖိုးတရား (၀၈-၀၃-၁၉၉၆) ၁၃၅၉၊ တပေါင်းလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၅၄၃။ ပဉ္စ္စက္ကဒါယကာဝတ္တု (၀၅-၀၅-၁၉၉၆) ၁၃၅၈၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၄) ရက်
ဝ၅၄၄။ မုစလိန္ဒသုတ္တန်(၁) (၁၄-၀၅-၁၉၉၆) ၁၃၅၈၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၁၃) ရက်
ဝ၅၄၅။ မုစလိန္ဒသုတ္တန်(၂) (၁၄-၀၅-၁၉၉၆) ၁၃၅၈၊ ကဆုန်လပြည့့််ကျော်(၁၃) ရက်
ဝ၅၄၆။ ဘုရားအဆူဆူတို့သာသနာသုံးရပ်တရား (၀၅-၀၆-၁၉၉၆) ၁၃၅၈၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၅)ရက်
ဝ၅၄၇။ ဘုရားအဆူဆူအဆုံးအမတရား (၀၆-၀၆-၁၉၉၆) ၁၃၅၈၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၆)ရက်
ဝ၅၄၈။ သာသနာသုံးရပ်အကျဉ်းချုပ် (၀၇-၀၆-၁၉၉၆) ၁၃၅၈၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၇)ရက်
ဝ၅၄၉။ ဘုရားအဆူဆူတို့၏အထာကတာ(၁) (၀၇-၀၆-၁၉၉၆) ၁၃၅၈၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၇)ရက်
ဝ၅၅ဝ။ ဘုရားအဆူဆူတို့၏အထာကတာ(၂) (၀၇-၀၆-၁၉၉၆) ၁၃၅၈၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၇)ရက်
ဝ၅၅၁ ။ မြတ်ဗုဒ္ဒ၏မေတ္တာတရား(၁) (၀၉-၀၆-၁၉၉၆) ၁၃၅၈ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၉)ရက်
ဝ၅၅၂ ။ မြတ်ဗုဒ္ဒ၏မေတ္တာတရား(၂) (၀၉-၀၆-၁၉၉၆) ၁၃၅၈ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၉)ရက်
ဝ၅၅၃ ။ ရောဇမလ္လမင်းသား (၁၂-၀၆-၁၉၉၆) ၁၃၅၈ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၂)ရက်
ဝ၅၅၄ ။ နေနည်း၃ပါးတရား(၁) (၁၂-၀၆-၁၉၉၆) ၁၃၅၈ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၂)ရက်
ဝ၅၅၅ ။ နေနည်း၃ပါးတရား(၂) (၁၂-၀၆-၁၉၉၆) ၁၃၅၈ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၂)ရက်
ဝ၅၅၆။ သာသနာ၏အကျဉ်းချုပ်တရား(၁) (၂၄-၀၆-၁၉၉၆) ၁၃၅၈၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း(၉)ရက်
ဝ၅၅၇။ သာသနာ၏အကျဉ်းချုပ်တရား(၂) (၂၄-၀၆-၁၉၉၆) ၁၃၅၈၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း(၉)ရက်
ဝ၅၅၈။ သံဝေဂ ကထာ (၁) (၂၂-၁၀-၁၉၉၆) ၁၃၅၈၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၅၅၉။ သံဝေဂ ကထာ (၂) (၂၂-၁၀-၁၉၉၆) ၁၃၅၈၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၅၆ဝ။ သဟသဟာရ ၄ ဂါထာတရား(၁) (၂၆-၁၀-၁၉၉၆) ၁၃၅၈၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၅၆၁။ သဟသဟာရ ၄ ဂါထာတရား(၂) (၂၆-၁၀-၁၉၉၆) ၁၃၅၈၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၅၆၂။ သဟသဟာရ ၄ ဂါထာတရား(၃) (၂၆-၁၀-၁၉၉၆) ၁၃၅၈၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၅၆၃ ။ မေတ္တာသုတ် တရားတော်(၁) (၁၇-၀၁-၁၉၉၇) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၅) ရက်နေ့
ဝ၅၆၄ ။ မေတ္တာသုတ် တရားတော်(၂) (၁၇-၀၁-၁၉၉၇) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၅) ရက်နေ့
ဝ၅၆၅ ။ မေတ္တာသုတ် တရားတော်(၃) (၁၇-၀၁-၁၉၉၇) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၅) ရက်နေ့
ဝ၅၆၆ ။ မေတ္တာသုတ် တရားတော်(၄) (၁၇-၀၁-၁၉၉၇) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၅) ရက်နေ့
ဝ၅၆၇ ။ မေတ္တာသုတ် တရားတော်(၅) (၁၇-၀၁-၁၉၉၇) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၅) ရက်နေ့
ဝ၅၆၈ ။ မေတ္တာသုတ် တရားတော်(၁) (၁၇-၀၁-၁၉၉၇) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၅) ရက်နေ့
ဝ၅၆၉ ။ မေတ္တာသုတ် တရားတော်(၂) (၁၇-၀၁-၁၉၉၇) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၅) ရက်နေ့
ဝ၅၇ဝ ။ မေတ္တာသုတ် တရားတော်(၃) (၁၇-၀၁-၁၉၉၇) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၅) ရက်နေ့
ဝ၅၇၁ ။ မေတ္တာသုတ် တရားတော်(၄) (၁၇-၀၁-၁၉၉၇) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၅) ရက်နေ့
ဝ၅၇၂ ။ မေတ္တာသုတ် တရားတော်(၅) (၁၇-၀၁-၁၉၉၇) ၁၃၄၀၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၅) ရက်နေ့
ဝ၅၇၃။ မာဃဇာတ်တော် (အပ္ပမာဒ) (၁) (၂၉-၀၁-၁၉၉၇) ၁၃၅၈၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၆)ရက်
ဝ၅၇၄။ မာဃဇာတ်တော် (အပ္ပမာဒ) (၂) (၂၉-၀၁-၁၉၉၇) ၁၃၅၈၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၆)ရက်
ဝ၅၇၅။ ရဟန်းတပါး၏တန်ဘိုးတရား (၂၇-၀၂-၁၉၉၇) ၁၃၅၈၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၅)ရက်
ဝ၅၇၆။ မီးကွင်းသစ္စာတရား (၁၈-၀၃-၁၉၉၇) ၁၃၅၈၊ တပေါင်းလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၅၇၇။ ဝဋ်တကဇာတ်တော်တရား (၁၈-၀၃-၁၉၉၇) ၁၃၅၈၊ တပေါင်းလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၅၇၈ ။ ကေသမုတ္တတရား (၀၆-၀၄-၁၉၉၇) ၁၃၅၈၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၅၇၉။ ဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်နှင့်ဓမ္မဖြစ်စဉ် (၁) (၁၂-၀၄-၁၉၉၇) ၁၃၅၈၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၅)ရက်
ဝ၅၈ဝ။ ဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်နှင့်ဓမ္မဖြစ်စဉ် (၂) (၁၂-၀၄-၁၉၉၇) ၁၃၅၈၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၅)ရက်
ဝ၅၈၁။ ဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်နှင့်ဓမ္မဖြစ်စဉ် (၃) (၁၂-၀၄-၁၉၉၇) ၁၃၅၈၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၅)ရက်
ဝ၅၈၂။ မိလိန္ဒနှင့်အသျှင်နာဂသေန (၂၀-၀၄-၁၉၉၇) ၁၃၅၈၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၁၃)ရက်
ဝ၅၈၃။ အနာထပိဏ္ဍိကောဝါဒသုတ္တန်-၁ (၀၇-၀၅-၁၉၉၇) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၂)ရက်
ဝ၅၈၄။ အနာထပိဏ္ဍိကောဝါဒသုတ္တန်-၂ (၀၇-၀၅-၁၉၉၇) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၂)ရက်
ဝ၅၈၅။ အနာထပိဏ္ဍိကောဝါဒသုတ္တန်-၃ (၀၇-၀၅-၁၉၉၇) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၂)ရက်
ဝ၅၈၆။ အနာထပိဏ္ဍိကောဝါဒသုတ္တန်-၄ (၀၇-၀၅-၁၉၉၇) ၁၃၄၁၊ ကဆုန်လဆန်း(၂)ရက်
ဝ၅၈၇ ။ ဂေါဒိကသုတ္တန်(၁) (၃၀-၀၈-၁၉၉၇) ၁၃၅၉၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော်(၁၂)ရက်
ဝ၅၈၈ ။ ဂေါဒိကသုတ္တန်(၂) (၃၀-၀၈-၁၉၉၇) ၁၃၅၉၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော်(၁၂)ရက်
ဝ၅၈၉။ အပျော်ဆုံးနေ့တရား(၁) (၁၉-၁၀-၁၉၉၇) ၁၃၅၉ ၊သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၃)ရက်
ဝ၅၉ဝ။ အပျော်ဆုံးနေ့တရား(၂) (၁၉-၁၀-၁၉၉၇) ၁၃၅၉ ၊သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၃)ရက်
ဝ၅၉၁။ အပျော်ဆုံးနေ့တရား(၁) (၁၉-၁၀-၁၉၉၇) ၁၃၅၉၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၃)ရက်
ဝ၅၉၂။ အပျော်ဆုံးနေ့တရား(၂) (၁၉-၁၀-၁၉၉၇) ၁၃၅၉၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၃)ရက်
ဝ၅၉၃။ အဝေးဆုံးသောအရာဝတ္ထု နှစ်မျိုး တရား (၁) (၂၁-၁၁-၁၉၉၇) ၁၃၅၉၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၇)ရက်
ဝ၅၉၄။ အဝေးဆုံးသောအရာဝတ္ထု နှစ်မျိုး တရား (၂) (၂၁-၁၁-၁၉၉၇) ၁၃၅၉၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၇)ရက်
ဝ၅၉၅။ အဝေးဆုံးသောအရာနှစ်မျိုးတရား(၁) (၂၁-၁၁-၁၉၉၇) ၁၃၅၉၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၇)ရက်
ဝ၅၉၆။ အဝေးဆုံးသောအရာနှစ်မျိုးတရား(၂) (၂၁-၁၁-၁၉၉၇) ၁၃၅၉၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၇)ရက်
ဝ၅၉၇။ သာမဏေကျော်လေးပါး(၁) (၁၅-၁၂-၁၉၉၇) ၁၃၄၁၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁၂)ရက်
ဝ၅၉၈။ သာမဏေကျော်လေးပါး(၂) (၁၅-၁၂-၁၉၉၇) ၁၃၄၁၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁၂)ရက်
ဝ၅၉၉။ အညောညနိသိတတရား(၁) (၂၆-၁၂-၁၉၉၇) ၁၃၅၉၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁၂)ရက်
ဝ၆ဝဝ။ အညောညနိသိတတရား(၂) (၂၆-၁၂-၁၉၉၇) ၁၃၅၉၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁၂)ရက်
ဝ၆ဝ၁။ ဓမ္မုပဒေသဓမ္မလမ်းညွှန်တရား (၂၉-၁၂-၁၉၉၇) ၁၃၅၉၊ ပြာသိုလဆန်း(၁)ရက်
ဝ၆ဝ၂ ။ မေဃိယဝတ္ထု (၂၉-၁၂-၁၉၉၇) ၁၃၅၉၊ ပြာသိုလဆန်း(၁)ရက်
ဝ၆ဝ၃။ ဆွမ်းအနုမောဒနာ (ပုဏ္ဏအမျိုးသမီး) (၁၆-၀၁-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝ၆ဝ၄။ စိတ်ကိုဆုံးမနည်း (၁၆-၀၁-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝ၆ဝ၅။ ဆွမ်းအနုမောဒနာ (ပုဏ္ဏာအမျိုးသမီး) (၁၆-၀၁-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝ၆ဝ၆။ ဘုန်းကံကြီးသူတို့အတွက်သာသနာ(၁) (၁၇-၀၁-၁၉၉၈) ၁၃၅၉ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၅) ရက်နေ့
ဝ၆ဝ၇။ ဘုန်းကံကြီးသူတို့အတွက်သာသနာ(၂) (၁၇-၀၁-၁၉၉၈) ၁၃၅၉ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၅) ရက်နေ့
ဝ၆ဝ၈ ။ စေတိယပူဇာ(၁) (၁၇-၀၁-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၅)ရက်
ဝ၆ဝ၉ ။ စေတိယပူဇာ(၂) (၁၇-၀၁-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၅)ရက်
ဝ၆၁ဝ။ ရှင်မဟာကဿဖမထေရ်ဝထ္ထု (၁၂-၀၂-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၁)ရက်
ဝ၆၁၁။ သက္ကသုတ္တန်(၁) (၁၃-၀၂-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၆၁၂။ သက္ကသုတ္တန်(၁) same as D74.04 (၁၃-၀၂-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၆၁၃။ ချမ်းသာသုခတရားလေးပါး (၀၈-၀၃-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ တပေါင်းလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၆၁၄။ ဒါနကထာ (၁) (၁၆-၀၃-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝ၆၁၅။ ဒါနကထာ (၂) (၁၆-၀၃-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝ၆၁၆။ ဗုဒ္ဓသာသနာအကျဉ်းချုပ်(၁) (၀၃-၀၄-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၆၁၇။ ဗုဒ္ဓသာသနာအကျဉ်းချုပ်(၂) (၀၃-၀၄-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၆၁၈။ ဗုဒ္ဓသာသနာအကျဉ်းချုပ် (ဒုတိယပိုင်း)(၁) (၀၄-၀၄-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၈)ရက်
ဝ၆၁၉။ ဗုဒ္ဓသာသနာအကျဉ်းချုပ် (ဒုတိယပိုင်း)(၂) (၀၄-၀၄-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၈)ရက်
ဝ၆၂ဝ။ ဗုဒ္ဓသာသနာအကျဉ်းချုပ် (ဒုတိယပိုင်း)(၃) (၀၄-၀၄-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၈)ရက်
ဝ၆၂၁။ အမြတ်တရားလေးပါး တရား (၀၅-၀၄-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၉)ရက်
ဝ၆၂၂။ အမြတ်တရား(၄)ပါး same as D02.04 (၀၅-၀၄-၁၉၉၈) ၁၃၅၉၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၉)ရက်
ဝ၆၂၃။ လာဇာဒေဝဒီတာဝတ္တု(၁) (၁၆-၁၁-၁၉၉၈) ၁၃၆၀၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၁၃)ရက်
ဝ၆၂၄။ လာဇာဒေဝဒီတာဝတ္တု(၂) (၁၆-၁၁-၁၉၉၈) ၁၃၆၀၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၁၃)ရက်
ဝ၆၂၅။ ရဟန်းတို့၏အောင်လံတရား (၁၆-၀၁-၁၉၉၉) ၁၃၆၀၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၆၂၆။ သြဝါဒပါတိမောက်တရား(၁) (၃၁-၀၁-၁၉၉၉) ၁၃၆၀၊ တပို့တွဲလပြည့့််
ဝ၆၂၇။ သြဝါဒပါတိမောက်တရား(၂) (၃၁-၀၁-၁၉၉၉) ၁၃၆၀၊ တပို့တွဲလပြည့့််
ဝ၆၂၈။ ဓမ္မကထာ တရား (၁၇-၀၃-၁၉၉၉) ၁၃၆၀၊ တန်ခူးလဆန်း
ဝ၆၂၉။ အနှစ်သုံးပါးတရား (၁) (၀၅-၀၄-၁၉၉၉) ၁၃၆၀၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့်ကျော်(၅)ရက်
ဝ၆၃ဝ။ အနှစ်သုံးပါးတရား (၂) (၀၅-၀၄-၁၉၉၉) ၁၃၆၀၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့်ကျော်(၅)ရက်
ဝ၆၃၁။ ဓမ္မအောင်လံတရား (၁) (၀၁-၀၅-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၆၃၂။ ဓမ္မအောင်လံတရား (၂) (၀၁-၀၅-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၆၃၃။ အာဖြည့်တရား(၁) (၀၁-၀၅-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၆၃၄။ အာဖြည့်တရား(၂) (၀၁-၀၅-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၆၃၅။ သရဏဂုံ(၃)ပါးတရားတော် (၁၆-၀၅-၁၉၉၉) ၁၃၆၂ ၊ နယုန်လဆန်း(၂) ရက် ၊
ဝ၆၃၆ ။ မေတ္တာဘာဝနာ(၁) (၂၃-၀၅-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ နယုန်လဆန်း(၉) ရက် ၊
ဝ၆၃၇ ။ မေတ္တာဘာဝနာ(၂) (၂၃-၀၅-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ နယုန်လဆန်း(၉) ရက် ၊
ဝ၆၃၈။ ပမာဒနှင့်အပ္ပမာဒတရား (၂၄-၀၅-၁၉၉၉) ၁၃၆၁ ၊ နယုန်လဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၆၃၉။ သမ္မောဒမာနဇာတ်တော်(၁) (၂၆-၀၅-၁၉၉၉) ၁၃၆၁ ၊ နယုန်လဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၆၄ဝ။ သမ္မောဒမာနဇာတ်တော်(၂) (၂၆-၀၅-၁၉၉၉) ၁၃၆၁ ၊ နယုန်လဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၆၄၁။ ဖန္ဒနဇာတ်တော်(၁) (၃၁-၀၅-၁၉၉၉) ၁၃၆၁ ၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၆၄၂။ ဖန္ဒနဇာတ်တော်(၂) (၃၁-၀၅-၁၉၉၉) ၁၃၆၁ ၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၆၄၃။ ဗန္ဓနဇာတ်တော်(၁) (၃၁-၀၅-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၆၄၄။ ဗန္ဓနဇာတ်တော်(၂) (၃၁-၀၅-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၆၄၅။ သုဘူတိထေရ်ရအပါဒါန်(၁) (၀၁-၀၆-၁၉၉၉) ၁၃၆၁ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၃)ရက်
ဝ၆၄၆။ သုဘူတိထေရ်ရအပါဒါန်(၂) (၀၁-၀၆-၁၉၉၉) ၁၃၆၁ ၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၃)ရက်
ဝ၆၄၇ ။ မေတ္တာစွမ်းရည်နှင့်သုပူတိထေရ်ရအပါဒါန်(၁) (၀၁-၀၆-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၃) ရက်
ဝ၆၄၈ ။ မေတ္တာစွမ်းရည်နှင့်သုပူတိထေရ်ရအပါဒါန်(၂) (၀၁-၀၆-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၃) ရက်
ဝ၆၄၉။ ရှင်ရဟန်းတို့၏ဂုဏ်ရည်ပြ (မုနိသုတ္တန်) (၀၉-၀၆-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၆၅ဝ။ အဘိဓမ္မာတရားနှင့်ပဉ္စက္ကဒါယကာဝတ္ထု (၂၄-၁၀-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်
ဝ၆၅၁။ အဘိဓမ္မာတရားနှင့် ပဉ္စက္ကဒါယကဝတ္တု (၂၄-၁၀-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်
ဝ၆၅၂။ ကံဏှဖာတ်တော်(၁) (၂၅-၁၀-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၁)ရက်
ဝ၆၅၃။ ကံဏှဖာတ်တော်(၂) (၂၅-၁၀-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၁)ရက်
ဝ၆၅၄။ ဘိက္ခုအပရိဟာနိယ(၇)ပါး(၁) (၂၈-၁၀-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝ၆၅၅။ ဘိက္ခုအပရိဟာနိယ(၇)ပါး(၂) (၂၈-၁၀-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝ၆၅၆။ ကိုယ်စောင့်တရားလေးပါးတရား (၁၈-၁၂-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ နတ်တော်လဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၆၅၇။ လတုကိကဇာတ်တော် (၂၉-၁၅-၁၉၉၉) ၁၃၆၁၊ နယုန်လဆန်း(၁၅)ရက်
ဝ၆၅၈ ။ ကောသတက္ကီဝိမာနဝတ္တု(၁) (၁၅-၀၁-၂၀၀၀) ၁၃၆၁၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၆၅၉ ။ ကောသတက္ကီဝိမာနဝတ္တု(၂) (၁၅-၀၁-၂၀၀၀) ၁၃၆၁၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၆၆ဝ။ ဝိဇ္ဇာနှင့်စရဏတရား(၁) (၃၀-၀၁-၂၀၀၀) ၁၃၆၁ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၁၀) ရက်နေ့
ဝ၆၆၁။ ဝိဇ္ဇာနှင့်စရဏတရား(၂) (၃၀-၀၁-၂၀၀၀) ၁၃၆၁ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၁၀) ရက်နေ့
ဝ၆၆၂။ သီလနှင့်ပညာ(၁) (၃၁-၀၁-၂၀၀၀) ၁၃၆၁၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၆၆၃။ သီလနှင့်ပညာ(၂) (၃၁-၀၁-၂၀၀၀) ၁၃၆၁၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၆၆၄။ သီလကထာ တရား (၂၈-၀၃-၂၀၀၀) ၁၃၆၁၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၉)ရက်
ဝ၆၆၅။ အမြတ်ဆုံးဥစ္စာတရား၂ပါး(၁) (၂၉-၀၃-၂၀၀၀) ၁၃၆၁ တပေါင်းလပြည့်ကျော် (၁၀) ရက်နေ့
ဝ၆၆၆။ အမြတ်ဆုံးဥစ္စာတရား၂ပါး(၂) (၂၉-၀၃-၂၀၀၀) ၁၃၆၁ တပေါင်းလပြည့်ကျော် (၁၀) ရက်နေ့
ဝ၆၆၇။ ဂန္ဘီရဉာဏ် (၂၉-၀၃-၂၀၀၀) ၁၃၆၁၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၁၀)ရက်
ဝ၆၆၈။ ပညာကထာ တရား (၀၃-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၁၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၆၆၉။ အပမာဒတရား(၁) (၀၅-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၁၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၆၇ဝ။ အပမာဒတရား(၂) (၀၅-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၁၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၆၇၁ ။ သောဏဒဏ္ဌသုတ္တန် (၀၉-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၁၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၆)ရက်
ဝ၆၇၂။ မူလပရိယာယတရား(၁) (၁၀-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၁၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၆၇၃။ မူလပရိယာယတရား(၂) (၁၀-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၁၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၆၇၄။ နှစ်သစ်ကူးသတိပဌါန်တရား(၁) (၁၂-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း(၉)ရက်
ဝ၆၇၅။ နှစ်သစ်ကူးသတိပဌါန်တရား(၂) (၁၂-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း(၉)ရက်
ဝ၆၇၆။ နှစ်သစ်ကူးသတိပဌါန်တရား(၃) (၁၃-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၆၇၇။ နှစ်သစ်ကူးသတိပဌါန်တရား(၄) (၁၃-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၆၇၈။ နှစ်သစ်ကူးသတိပဌါန်တရား(၅) (၁၃-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း(၁၀)ရက်
ဝ၆၇၉။ နှစ်သစ်ကူးသတိပဌါန်တရား(၆) (၁၄-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၆၈ဝ။ နှစ်သစ်ကူးသတိပဌါန်တရား(၇) (၁၄-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၆၈၁။ နှစ်သစ်ကူးသတိပဌါန်တရား(၈) (၁၄-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၆၈၂။ နှစ်သစ်ကူးသတိပဌါန်တရား(၉) (၁၅-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၆၈၃။ နှစ်သစ်ကူးသတိပဌါန်တရား(၁၀) (၁၅-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၆၈၄။ နှစ်သစ်ကူးသတိပဌါန်တရား(၁၁) (၁၅-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၆၈၅။ နှစ်သစ်ကူးသတိပဌါန်တရား(၁၂) (၁၆-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၆၈၆။ နှစ်သစ်ကူးသတိပဌါန်တရား(၁၃) (၁၆-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၆၈၇ ။ ထေရဝါဒမိတ်ဆက်တရား(၁) (၂၀-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၆၈၈ ။ ထေရဝါဒမိတ်ဆက်တရား(၂) (၂၀-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၆၈၉။ မူလပရိယာယတရား(၁) (၂၅-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၁၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၆၉ဝ။ မူလပရိယာယတရား(၂) (၂၅-၀၄-၂၀၀၀) ၁၃၆၁၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၆၉၁။ ကဆုန်လပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့(၁) (၁၅-၀၅-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၆၉၂။ ကဆုန်လပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့(၂) (၁၅-၀၅-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၆၉၃။ ကဆုန်လပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့(၃) (၁၅-၀၅-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၆၉၄ ။ မေတ္တာအကျိုုးပြတရား (၃၁-၀၅-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၄) ရက်
ဝ၆၉၅။ သရဏဂုံအခြေခံ တရား (၃၁-၀၅-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၆၉၆။ သရဏဂုံအခြေခံ တရား same as D02.08 (၃၁-၀၅-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၆၉၇ ။ မေတ္တာတရားပွါးများနည်း(၁) (၀၁-၀၆-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၆၉၈ ။ မေတ္တာတရားပွါးများနည်း(၂) (၀၁-၀၆-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၆၉၉ ။ ထေရဝါဒနိဒါန်းတရား (၀၂-၀၆-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ နယုန်လဆန်း(၁)ရက်
ဝ၇ဝဝ ။ ထေရဝါဒနိဒါန်းတရား (၀၂-၀၆-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ နယုန်လဆန်း(၁)ရက်
ဝ၇ဝ၁ ။ ထေရဝါဒ သင်္ဂါယနာတင်တရား (၀၃-၀၆-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ နယုန်လဆန်း(၂)ရက်
ဝ၇ဝ၂။ ကိုရင်လေးတွေရဲ့အသံ (၀၇-၀၆-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ နယုန်လဆန်း(၆)ရက်
ဝ၇ဝ၃။ သီလတန်ဖိုးပြတရား(၁) (၀၉-၀၆-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ နယုန်လဆန်း (၈)ရက်
ဝ၇ဝ၄။ သီလတန်ဖိုးပြတရား(၂) (၀၉-၀၆-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ နယုန်လဆန်း (၈)ရက်
ဝ၇ဝ၅။ လတုကိကဇာတ်တော်(၁) (၁၇-၀၆-၂၀၀၀) ၁၃၆၁၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၁) ရက်
ဝ၇ဝ၆။ လတုကိကဇာတ်တော်(၂) (၁၇-၀၆-၂၀၀၀) ၁၃၆၁၊ နယုန်လပြည့့််ကျော်(၁) ရက်
ဝ၇ဝ၇။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ထေရ်ရဝါဒ(၁) (၁၃-၁၂-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၃)ရက်
ဝ၇ဝ၈။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ထေရ်ရဝါဒ(၂) (၁၃-၁၂-၂၀၀၀) ၁၃၆၂၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၃)ရက်
ဝ၇ဝ၉ ။ ထေရ်ရဝါဒ (၂၇-၀၁-၂၀၀၁) ၁၃၆၂၊ တပို့တွဲလဆန်း(၄)ရက်
ဝ၇၁ဝ။ ပညာမပါပွဲမဖြစ်ဘူး(၁) (၁၈-၀၂-၂၀၀၁) ၁၃၆၂၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် (၁၁) ရက်
ဝ၇၁၁။ ပညာမပါပွဲမဖြစ်ဘူး(၂) (၁၈-၀၂-၂၀၀၁) ၁၃၆၂၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် (၁၁) ရက်
ဝ၇၁၂။ ကံဏှရသေ့ (၂၆-၀၃-၂၀၀၁) ၁၃၆၂၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၃)ရက်
ဝ၇၁၃။ ကံဏှရသေ့ (၂၆-၀၃-၂၀၀၁) ၁၃၆၂၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၃)ရက်
ဝ၇၁၄။ မူလပရိယာယသုတ္တန်(၁) (၃၀-၀၃-၂၀၀၁) ၁၃၆၂၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၇)ရက်
ဝ၇၁၅။ မူလပရိယာယသုတ္တန်(၂) (၃၀-၀၃-၂၀၀၁) ၁၃၆၂၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၇)ရက်
ဝ၇၁၆။ ကဏှဆုတောင်း-၁ (၀၉-၀၆-၂၀၀၁) 09.06.2001 (SINGAPORE)
ဝ၇၁၇။ ကဏှဆုတောင်း-၂ (၀၉-၀၆-၂၀၀၁) 09.06.2001 (SINGAPORE)
ဝ၇၁၈။ ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်ခြင်း (၁၆-၀၆-၂၀၀၁) ၁၃၆၃၊ နယုန်လဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၇၁၉။ အဘိဓမ္မာနှင့်ဝိပဿနာတရားတော်(၁) (၀၁-၁၁-၂၀၀၁) ၁၃၆၃၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်
ဝ၇၂ဝ။ အဘိဓမ္မာနှင့်ဝိပဿနာတရားတော်(၂) (၀၁-၁၁-၂၀၀၁) ၁၃၆၃၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်
ဝ၇၂၁။ သာမညဖလသုတ္တန်(၁) (၂၉-၁၁-၂၀၀၁) ၁၃၆၃၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၇၂၂။ သာမညဖလသုတ္တန်(၂) (၂၉-၁၁-၂၀၀၁) ၁၃၆၃၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၇၂၃။ သာမညဖလသုတ္တန်(၁) (၂၉-၁၁-၂၀၀၁) ၁၃၆၃၊ တဆောင်မုန်းလဆန်း (၁၄)ရက်
ဝ၇၂၄။ သာမညဖလသုတ္တန်(၂) (၂၉-၁၁-၂၀၀၁) ၁၃၆၃၊ တဆောင်မုန်းလဆန်း (၁၄)ရက်
ဝ၇၂၅။ ကုမုဒြာတွေပွင့်တဲ့ည(၁) (၃၀-၁၁-၂၀၀၁) ၁၃၆၃၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့
ဝ၇၂၆။ ကုမုဒြာတွေပွင့်တဲ့ည(၂) (၃၀-၁၁-၂၀၀၁) ၁၃၆၃၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့
ဝ၇၂၇။ ဂုဏ်ပေါင်းခြုံလွှမ်းကျောင်းသင်္ခမ်းတရား(၁) (၁၄-၁၂-၂၀၀၁) ၁၃၆၃၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၇၂၈။ ဂုဏ်ပေါင်းခြုံလွှမ်းကျောင်းသင်္ခမ်းတရား(၂) (၁၄-၁၂-၂၀၀၁) ၁၃၆၃၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၇၂၉။ သဗ္ဗမင်္ဂလာတရားတော် (၁) (၃၁-၁၂-၂၀၀၁) ၁၃၆၃၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁)ရက်
ဝ၇၃ဝ။ ၁သဗ္ဗမင်္ဂလာတရားတော် (၂) (၃၁-၁၂-၂၀၀၁) ၁၃၆၃၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁)ရက်
ဝ၇၃၁ ။ မြတ်ဗုဒ္ဓချီးမွှမ်းသည့်ကောင်းမှုတရား(၁) (၀၈-၀၁-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၉)ရက်
ဝ၇၃၂ ။ မြတ်ဗုဒ္ဓချီးမွှမ်းသည့်ကောင်းမှုတရား(၂) (၀၈-၀၁-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၉)ရက်
ဝ၇၃၃ ။ မြတ်ဗုဒ္ဓချီးမွှမ်းသည့်ကောင်းမှုတရား(၁) (၀၈-၀၁-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၉)ရက်
ဝ၇၃၄ ။ မြတ်ဗုဒ္ဓချီးမွှမ်းသည့်ကောင်းမှုတရား(၂) (၀၈-၀၁-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၉)ရက်
ဝ၇၃၅။ ဓမ္မရတနာပူဇာတရားတော် (၂၉-၀၁-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁)ရက်
ဝ၇၃၆။ သဒ္ဒါနှင့်စာဂတရား(၁) (၁၀-၀၂-၂၀၀၂) ၁၃၆၃ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၁၃) ရက်နေ့
ဝ၇၃၇။ သဒ္ဒါနှင့်စာဂတရား(၂) (၁၀-၀၂-၂၀၀၂) ၁၃၆၃ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၁၃) ရက်နေ့
ဝ၇၃၈။ ကံကောင်းသူများတရား (၁၂-၀၂-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၇၃၉။ ဓမ္မဒူတ ကိုးဋ္ဌာန (၁) (၁၉-၀၂-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ တပို့တွဲလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၇၄ဝ။ ဓမ္မဒူတ ကိုးဋ္ဌာန (၂) (၁၉-၀၂-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ တပို့တွဲလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၇၄၁။ ဓမ္မဒူတ ကိုးဋ္ဌာန (၃) (၁၉-၀၂-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ တပို့တွဲလဆန်း(၇)ရက်
ဝ၇၄၂။ ပါတဠိပုတ်တရား(၁) (၂၄-၀၂-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၇၄၃။ ပါတဠိပုတ်တရား(၂) (၂၄-၀၂-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၇၄၄။ ဝဇီယာထေရ်ရီ(၁) (၀၇-၀၃-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော်(၈) ရက်
ဝ၇၄၅။ ဝဇီယာထေရ်ရီ(၂) (၀၇-၀၃-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော်(၈) ရက်
ဝ၇၄၆ ။ သေလာ ထေရ်ရီ (၁) (၁၀-၀၃-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော်(၁၁) ရက်
ဝ၇၄၇ ။ သေလာ ထေရ်ရီ (၂) (၁၀-၀၃-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော်(၁၁) ရက်
ဝ၇၄၈။ စာလာထေရ်ရီ(၁) (၁၂-၀၃-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော်(၁၃) ရက်
ဝ၇၄၉။ စာလာထေရ်ရီ(၂) (၁၂-၀၃-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော်(၁၃) ရက်
ဝ၇၅ဝ။ ဥပစာလာ ထေရ်ရီ (၁) (၁၃-၀၃-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော်(၁၄) ရက်
ဝ၇၅၁။ ဥပစာလာထေရ်ရီ (၂) (၁၃-၀၃-၂၀၀၂) ၁၃၆၃၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော်(၁၄) ရက်
ဝ၇၅၂။ ဗုဒ္ဓအသံတရား(၁) (၂၅-၀၅-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၇၅၃။ ဗုဒ္ဓအသံတရား(၂) (၂၅-၀၅-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၇၅၄။ ဗုဒ္ဓအသံတရား(၃) (၂၅-၀၅-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၇၅၅။ အရှိတရားနှင့်အမှန်တရား(၁) (၁၂-၁၀-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်
ဝ၇၅၆။ အရှိတရားနှင့်အမှန်တရား(၂) (၁၂-၁၀-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်
ဝ၇၅၇။ အရှိတရားနှင့်အမှန်တရား(၁) (၂၁-၁၀-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်
ဝ၇၅၈။ အရှိတရားနှင့်အမှန်တရား(၂) (၂၁-၁၀-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်
ဝ၇၅၉။ ကာဠီကုရရဂရိကာ ဝတ္ထု(၁) (၂၃-၁၀-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၂) ရက်
ဝ၇၆ဝ။ ကာဠီကုရရဂရိကာ ဝတ္ထု(၂) (၂၃-၁၀-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၂) ရက်
ဝ၇၆၁။ ကတိယာနီ ဝတ္ထု(၁) (၂၄-၁၀-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၃) ရက်
ဝ၇၆၂။ ကတိယာနီ ဝတ္ထု(၂) (၂၄-၁၀-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၃) ရက်
ဝ၇၆၃။ သုဇာတာဝတ္ထု(၁) (၂၅-၁၀-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၄) ရက်
ဝ၇၆၄။ သုဇာတာဝတ္ထု(၂) (၂၅-၁၀-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၄) ရက်
ဝ၇၆၅။ သိဋ္ဌဓမ္မအမြတ်တရား(၁) (၂၆-၁၀-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၅) ရက်
ဝ၇၆၆။ သိဋ္ဌဓမ္မအမြတ်တရား(၂) (၂၆-၁၀-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၅) ရက်
ဝ၇၆၇။ ခုဇ္ဇတ္တရာဝတ္ထု(၁) (၂၇-၁၀-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၆) ရက်
ဝ၇၆၈။ ခုဇ္ဇတ္တရာဝတ္ထု(၂) (၂၇-၁၀-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၆) ရက်
ဝ၇၆၉။ ကုဏ္ဍလကေသီထေရီအပါဒါန်တရား (၁၈-၁၁-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၇၇ဝ။ ကုဏ္ဍလကေသီထေရီအပါဒါန်တရား (၁၈-၁၁-၂၀၀၂) ၁၃၆၄၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၇၇၁။ ကာဠိဥရရကာတ(၁) (၂၇-၀၁-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၇၇၂။ ကာဠိဥရရကာတ(၂) (၂၇-၀၁-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၇၇၃။ သုပ္ပိယာ(၁) (၀၂-၀၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁)ရက်
ဝ၇၇၄။ သုပ္ပိယာ(၂) (၀၂-၀၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁)ရက်
ဝ၇၇၅။ သုပ္ပိယ ဝတ္ထု(၁) (၀၃-၀၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁) ရက်
ဝ၇၇၆။ သုပ္ပိယ ဝတ္ထု(၂) (၀၃-၀၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁) ရက်
ဝ၇၇၇။ သုဘဒ္ဒသတ္တန်တရားတော်(၁) (၂၅-၀၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် (၉) ရက်
ဝ၇၇၈။ သုဘဒ္ဒသတ္တန်တရားတော်(၂) (၂၅-၀၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် (၉) ရက်
ဝ၇၇၉။ ဝိသာခါဝတ္ထု(၁) (၂၆-၀၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် (၁၀) ရက်
ဝ၇၈ဝ။ ဝိသာခါဝတ္ထု(၂) (၂၆-၀၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် (၁၀) ရက်
ဝ၇၈၁။ သုပ္ပဝါသာဝတ္ထု (အမျိုးသမီးရေးရာ)(၁) (၂၇-၀၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၇၈၂။ သုပ္ပဝါသာဝတ္ထု (အမျိုးသမီးရေးရာ)(၂) (၂၇-၀၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၇၈၃။ သုပ္ပဝါသာ (၁) (၂၇-၀၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော်(၁၁) ရက်
ဝ၇၈၄။ သုပ္ပဝါသာ (၂) (၂၇-၀၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော်(၁၁) ရက်
ဝ၇၈၅။ သာမာဝတီဝတ္ထု (၂၈-၀၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် (၁၂) ရက်
ဝ၇၈၆။ သာမာဝတီဝတ္ထု (၂၈-၀၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် (၁၂) ရက်
ဝ၇၈၇။ ဥတ္တရာ (၁) (၀၁-၀၃-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော်(၁၃) ရက်
ဝ၇၈၈။ ဥတ္တရာ (၂) (၀၁-၀၃-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော်(၁၃) ရက်
ဝ၇၈၉။ နကုလမာတာ (၁) (၀၂-၀၃-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော်(၁၄) ရက်
ဝ၇၉ဝ။ နကုလမာတာ (၂) (၀၂-၀၃-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော်(၁၄) ရက်
ဝ၇၉၁။ အပ္ပမာဒတရား(၃) (၂၆-၀၃-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၉)ရက်
ဝ၇၉၂။ အပ္ပမာဒတရား(၄) (၂၆-၀၃-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၉)ရက်
ဝ၇၉၃။ အပ္ပမာဒတရား(၅) (၀၃-၀၄-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၇၉၄။ အပ္ပမာဒတရား(၆) (၀၄-၀၄-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၃)ရက်
ဝ၇၉၅။ အပ္ပမာဒတရား(၇) (၀၄-၀၄-၂၀၀၃) ၁၃၆၄၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၃)ရက်
ဝ၇၉၆ ။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဝါကျွတ်မိန့်ခွန်း (၁၀-၁၀-၂၀၀၃) ၁၃၆၅၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်
ဝ၇၉၇။ တရားအကျဉ်းချုပ်-၄ပါး (၀၂-၁၁-၂၀၀၃) 02.11.2003 (SINGAPORE)
ဝ၇၉၈။ ဝိဟာရနေနည်းသုံးပါး (၂၃-၁၁-၂၀၀၃) ၁၃၆၅၊ တဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် (၁၅)ရက်
ဝ၇၉၉။ မြတ်ဗုဒ္ဓသရီပူဇာတရား(၁) (၀၄-၁၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၅၊ နတ်တော်လဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၈ဝဝ။ မြတ်ဗုဒ္ဓသရီပူဇာတရား (၂) (၀၄-၁၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၅၊ နတ်တော်လဆန်း(၁၁)ရက်
ဝ၈ဝ၁။ ဓမ္မုဒ္ဒေသတရား(၄)ပါး (၁) (၀၅-၁၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၅၊ နတ်တော်လဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၈ဝ၂။ ဓမ္မုဒ္ဒေသတရား(၄)ပါး (၂) (၀၅-၁၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၅၊ နတ်တော်လဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၈ဝ၃။ ဓမုဒ္ဒေသလေးပါးတရား(၁) (၀၅-၁၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၅၊ နတ်တော်လဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၈ဝ၄။ ဓမုဒ္ဒေသလေးပါးတရား(၂) (၀၅-၁၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၅၊ နတ်တော်လဆန်း(၁၂)ရက်
ဝ၈ဝ၅။ သီလနှင့်ပညာတရား (၂၀-၁၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၅၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁၂)ရက်
ဝ၈ဝ၆။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၁) (၀၄-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၃) ရက်
ဝ၈ဝ၇။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၁)တရားတော် (၀၄-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၃)ရက်
ဝ၈ဝ၈။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၂) (၀၅-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၄) ရက်
ဝ၈ဝ၉။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၂)တရားတော် (၀၅-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလဆန်း(၁၄)ရက်
ဝ၈၁ဝ။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၃) (၀၆-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့်
ဝ၈၁၁။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၃)တရားတော် (၀၆-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့်နေ့
ဝ၈၁၂။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၄)တရားတော် (၀၇-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁)ရက်
ဝ၈၁၃။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၄) (၀၇-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့့််ကျော်(၁)ရက်
ဝ၈၁၄။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၅)တရားတော် (၀၈-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်
ဝ၈၁၅။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၅) (၀၈-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့့််ကျော်(၂)ရက်
ဝ၈၁၆။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၆)တရားတော် (၀၉-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝ၈၁၇။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၇)တရားတော် (၁၀-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၅)ရက်
ဝ၈၁၈။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၆) (၁၀-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့့််ကျော်(၄)ရက်
ဝ၈၁၉။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည် ၁ (စ) (၁၁-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၆)ရက်
ဝ၈၂ဝ။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၇) (၁၁-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့့််ကျော်(၅)ရက်
ဝ၈၂၁။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည် ၁ (ဆုံး) (၁၂-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၇)ရက်
ဝ၈၂၂။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၁) (၁၂-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့့််ကျော်(၆)ရက်
ဝ၈၂၃။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၂) (၁၂-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့့််ကျော်(၆)ရက်
ဝ၈၂၄။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည် ၃ (စ) (၂၁-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၈၂၅။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည် ၃ (ဆုံး) (၂၁-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၈၂၆။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၅) (၂၁-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့့််ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၈၂၇။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၆) (၂၁-၀၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ ပြာသိုလပြည့့််ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၈၂၈။ သစ္စာမေတ္တာစွမ်းရည်(၁) (၁၄-၀၂-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော် (၉) ရက်
ဝ၈၂၉။ သစ္စာမေတ္တာစွမ်းရည်(၂) (၁၄-၀၂-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ တပို့တွဲလပြည့့််ကျော် (၉) ရက်
ဝ၈၃ဝ ။ နွေဦးတရားတော်(၁) (၀၅-၀၃-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ တပေါင်းလပြည့်နေ့
ဝ၈၃၁ ။ နွေဦးတရားတော်(၂) (၀၅-၀၃-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ တပေါင်းလပြည့်နေ့
ဝ၈၃၂။ ကံမြင့်ဗုဒ္ဓရတနာတရား (၀၈-၀၃-၂၀၀၄) ၁၃၆၅၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၃)ရက်
ဝ၈၃၃ ။ ကောင်းမှု့တန်ခိုးတရား(၁) (၀၃-၀၅-၂၀၀၄) ၁၃၆၆၊ ကဆုန်လပြည့်
ဝ၈၃၄ ။ ကောင်းမှု့တန်ခိုးတရား(၂) (၀၃-၀၅-၂၀၀၄) ၁၃၆၆၊ ကဆုန်လပြည့်
ဝ၈၃၅။ အတွင်းမီးအပြင်မီးတရား (၁၈-၁၀-၂၀၀၄) ၁၃၆၆၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၅)ရက်
ဝ၈၃၆။ ရတနာသုတ် (၁၃-၁၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၆၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၂)ရက်
ဝ၈၃၇ ။ လောကအကြောင်းတရားလေးပါး (၁၅-၁၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၆၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၄)ရက်
ဝ၈၃၈။ ရတနာသုံးပါးတန်ခိုးတရား(၁) (၂၀-၁၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၆၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၉)ရက်
ဝ၈၃၉။ ရတနာသုံးပါးတန်ခိုးတရား(၂) (၂၀-၁၁-၂၀၀၄) ၁၃၆၆၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၉)ရက်
ဝ၈၄ဝ။ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်တိုးတက်ရေး(၁) not complete (၃၀-၁၂-၂၀၀၄) ၁၃၆၆၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၄)ရက်
ဝ၈၄၁။ ဓမ္မပူဇာတရား (ငါးကျမ်းပြန်)(၁) (၃၁-၁၂-၂၀၀၄) ၁၃၆၆၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၅)ရက်
ဝ၈၄၂။ ဓမ္မပူဇာတရား (ငါးကျမ်းပြန်)(၂) (၃၁-၁၂-၂၀၀၄) ၁၃၆၆၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၅)ရက်
ဝ၈၄၃။ ဗုဒ္ဓသာသနာကာာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး(၁) (၀၁-၀၁-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၆)ရက်
ဝ၈၄၄။ ဗုဒ္ဓသာသနာကာာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး(၂) (၀၁-၀၁-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၆)ရက်
ဝ၈၄၅။ မျက်မှောက်ခေတ်ကမ ္ဘာ့အခြေအနေနှင့်ဗုဒ္ဓတရားတော် (၀၄-၀၁-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၉)ရက်
ဝ၈၄၆။ မျက်မှောက်ခေတ်ကမ ္ဘာ့အခြေအနေနှင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်(၂) (၀၅-၀၁-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်၁၀)ရက်
ဝ၈၄၇။ မျက်မှောက်ခေတ်ကမ ္ဘာ့အခြေအနေနှင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်)၁) (၀၅-၀၁-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်၁၀)ရက်
ဝ၈၄၈။ ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်ကမ ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတရား(၁) (၀၆-၀၁-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၈၄၉။ ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်ကမ ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတရား(၂) (၀၆-၀၁-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၈၅ဝ။ ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်ပညာရေး(၁) (၀၈-၀၁-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁၃)ရက်
ဝ၈၅၁။ ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်ပညာရေး(၂) (၀၈-၀၁-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁၃)ရက်
ဝ၈၅၂။ ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်ပညာရေး (၀၉-၀၁-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁၄)ရက်
ဝ၈၅၃ ။ စေတိယပူဇာ(ကာကွယ်ခြင်းငါးမျိုး)(၁) (၀၉-၀၂-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁)ရက်
ဝ၈၅၄ ။ စေတိယပူဇာ(ကာကွယ်ခြင်းငါးမျိုး)(၂) (၀၉-၀၂-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁)ရက်
ဝ၈၅၅။ ဂရုဏာဘာဝနာ(၁) (၁၂-၀၂-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ တပို့တွဲလဆန်း(၄)ရက်
ဝ၈၅၆။ ဂရုဏာဘာဝနာ(၂) (၁၂-၀၂-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ တပို့တွဲလဆန်း(၄)ရက်
ဝ၈၅၇။ ဂရုဏာဘာဝနာ(၃) (၁၂-၀၂-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ တပို့တွဲလဆန်း(၄)ရက်
ဝ၈၅၈။ အာတုမသုတ္တန်(၁) (၀၆-၀၃-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၈၅၉။ အာတုမသုတ္တန်(၂) (၀၆-၀၃-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၁၁)ရက်
ဝ၈၆ဝ။ ဓမ္မုဒေသလေးပါးတရား (၁) (၀၇-၀၃-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၁၂)ရက်
ဝ၈၆၁။ ဓမ္မုဒေသလေးပါးတရား (၂) (၀၇-၀၃-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၁၂)ရက်
ဝ၈၆၂ ။ လောကဓမ္မတရား(၁) (၁၃-၀၃-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၄)ရက်
ဝ၈၆၃ ။ လောကဓမ္မတရား(၂) (၁၃-၀၃-၂၀၀၅) ၁၃၆၆၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၄)ရက်
ဝ၈၆၄။ အရှုပ်ရှင်းတရားတော်(၁) (၂၆-၀၄-၂၀၀၅) ၁၃၆၇၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၃)ရက်
ဝ၈၆၅။ အရှုပ်ရှင်းတရားတော်(၂) (၂၆-၀၄-၂၀၀၅) ၁၃၆၇၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၃)ရက်
ဝ၈၆၆။ သံဃာရတနာ့ဂုဏ်ရည် ၁ (စ) (၂၈-၀၁-၂၀၀၆) ၁၃၆၇၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၈၆၇။ သံဃာရတနာ့ဂုဏ်ရည် ၁ (ဆုံး) (၂၈-၀၁-၂၀၀၆) ၁၃၆၇၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁၅)ရက်
ဝ၈၆၈။ သံဃာရတနာဂုဏ်ရည် ၄ (စ) (၀၃-၀၂-၂၀၀၆) ၁၃၆၇၊ တပို့တွဲလဆန်း(၆)ရက်
ဝ၈၆၉။ သံဃာရတနာဂုဏ်ရည် ၄ (ဆုံး) (၀၃-၀၂-၂၀၀၆) ၁၃၆၇၊ တပို့တွဲလဆန်း(၆)ရက်
ဝ၈၇၁။ ကိသာဂေါတမီအပါဒါန်(၁) miss date
ဝ၈၇၂။ ကိသာဂေါတမီအပါဒါန်(၂) miss date
ဝ၈၇၃။ ပရိနိဗ္ဗာန်နသုတ် (၁) miss date
ဝ၈၇၄။ ပရိနိဗ္ဗာန်နသုတ် (၂) miss date
ဝ၈၇၅။ ပရိနိဗ္ဗာန်နသုတ် (၃) miss date
ဝ၈၇၆။ ပရိနိဗ္ဗာန်နသုတ် (၄) miss date
ဝ၈၇၇။ ပရိနိဗ္ဗာန်နသုတ် (၅) miss date
ဝ၈၇၈။ သင်္ခတနှင့်အသင်္ခတ (၁) miss date
ဝ၈၇၉။ သင်္ခတနှင့်အသင်္ခတ (၂) miss date
ဝ၈၈ဝ။ ဓမ္မစြင်္ကာ၊ အနတ္တလက္ခဏသုတ်၊ No Date
ဝ၈၈၁။ ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်၊ ပါဠိအနက် (၁) No Date
ဝ၈၈၂။ ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်၊ ပါဠိအနက် (၂) No Date
ဝ၈၈၃ ။ နောက်ဆုံးဆယ်လမြတ်ဗုဒ္ဓ (၁) No Date
ဝ၈၈၄ ။ နောက်ဆုံးဆယ်လမြတ်ဗုဒ္ဓ (၂) No Date
ဝ၈၈၅။ ဒုလ္လဘတရား(၅)ပါး No Date
ဝ၈၈၆။ ဧကသာဓက ပုဏ္ဏား ဝတ္ထု No Date
ဝ၈၈၇။ သစ္စာလေးပါးတရား No Date
ဝ၈၈၈။ အာယုဒီဃကောင်းမှု့(၆)ပါး No Date
ဝ၈၈၉။ အစုန်နှင့်အဆန်တရားတော် No Date
ဝ၈၉ဝ။ လသာတုန်းဗိုင်းငင်တရားတော် No Date
ဝ၈၉၁။ အခွင့်သာခိုက်လုံံံ့လစိုက်တရားတော် No Date
ဝ၈၉၂။ အခွင့်သာခိုက်လုံံံ့လစိုက်တရားတော် No Date
ဝ၈၉၃ ။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဘဝလမ်းညွှန်တရား No Date
ဝ၈၉၄။ ဗုဒ္ဓ၊ဓမ္မ၊သံဃာ့ လမ်းညွှန်တရား(၁) no Date
ဝ၈၉၅။ ဗုဒ္ဓ၊ဓမ္မ၊သံဃာ့ လမ်းညွှန်တရား(၂) no Date
ဝ၈၉၆။ အဘိဏှသြဝါဒတရား No Date
ဝ၈၉၇။ ဥယျာဉ်ကြီးကိုရေလောင်းပါတရား(၁) No Date
ဝ၈၉၈။ ဥယျာဉ်ကြီးကိုရေလောင်းပါတရား(၂) no Date
ဝ၈၉၉။ သိကြားမင်း၏ခန္တီစာတမ်း(၁) No Date
ဝ၉ဝဝ။ သိကြားမင်း၏ခန္တီစာတမ်း(၂) No Date
ဝ၉ဝ၁။ အတ္တသမ္မာပဏိဓိစ(၁) No Date
ဝ၉ဝ၂။ အတ္တသမ္မာပဏိဓိစ(၂) No Date
ဝ၉ဝ၃။ အတ္တသမ္မာပဏိဓိစ(၃) No Date
ဝ၉ဝ၄။ ပါနိယဒါနှင့်သိပ္ပဉ္စ(၄) No Date
ဝ၉ဝ၅။ ပါနိယဒါနှင့်သိပ္ပဉ္စ(၅) No Date
ဝ၉ဝ၆။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၃) no date
ဝ၉ဝ၇။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၄) no date
ဝ၉ဝ၈။ ပရိနိဗ္ဗာန်နှင့်နိဗ္ဗာန်တရား no date
ဝ၉ဝ၉။ ဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်ပွါးရေး(၁) no date
ဝ၉၁ဝ။ ဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်ပွါးရေး(၂) no date
ဝ၉၁၁။ သာသနာသုံးရပ်တရား no date
ဝ၉၁၂။ သံဝေဂ ဉာဏ်နှင့်သံဝေဂ ဘာဝနာ No Date
ဝ၉၁၃။ ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်ဘာသာတရား(၁) No Date
ဝ၉၁၄။ ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်ဘာသာတရား(၂) No Date
ဝ၉၁၅။ အဘိုးအဘွားများအတွက်သံဝေဂတရား No Date
ဝ၉၁၆။ ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲ တရား No Date
ဝ၉၁၇။ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်အဘိဓာန် No Date
ဝ၉၁၈။ ပါရမီ(၁၀)ပါး No Date
ဝ၉၁၉။ ရာဟုလာသုတ္တန် No Date
ဝ၉၂ဝ။ ၃၇မင်းနှင့်ဘိုးတော်မယ်တော်များ No Date
ဝ၉၂၁ ။ ကျောင်းအလှူတရားတော် No Date
ဝ၉၂၂။ ပါရာသိသုတ္တန်(စတုတ္ထပိုင်း)-(၁) No Date
ဝ၉၂၃။ ပါရာသိသုတ္တန်(စတုတ္ထပိုင်း)-(၂) No Date
ဝ၉၂၄။ အနိစ္စသုတ္တန် No Date
ဝ၉၂၅။ ဘဒ္ဒိကရတ္တသုတ္တန် No Date
ဝ၉၂၆။ အာဒိတ္တသုတ္တန် No Date
ဝ၉၂၇။ စူဠသုဘဒ္ဒါဂုဏ်ရည်ပြတရား No Date
ဝ၉၂၈ ။ ကောင်းခြင်းသုံးဖြာဒေသနာတရား No Date
ဝ၉၂၉။ ကုဒါလပဏ္ဍိတဇာတ်တော် No Date
ဝ၉၃ဝ။ ဗုဒ္ဓဘာသာအစအမှန်သိမြင်ခြင်းက No Date
ဝ၉၃၁။ အရှင်ဓမ္မပါလဆုတောင်းတရား(၁) No Date
ဝ၉၃၂။ အရှင်ဓမ္မပါလဆုတောင်းတရား(၂) No Date
ဝ၉၃၃။ ကမ ္ဘာ့အလှဆုံးတိုင်းပြည်(၁) No Date
ဝ၉၃၄။ ကမ ္ဘာ့အလှဆုံးတိုင်းပြည်(၂) No Date
ဝ၉၃၅။ ဓမ္မအောင်လံတရား(၁) No Date
ဝ၉၃၆။ ဓမ္မအောင်လံတရား(၂) No Date
ဝ၉၃၇။ ဓမ္မအောင်လံတရား(၃) No Date
ဝ၉၃၈ ။ ကျောင်းတရား(၁) No Date
ဝ၉၃၉ ။ ကျောင်းတရား(၂) No Date
ဝ၉၄ဝ။ ရုက္ခဓမ္မဇာတ်တော်(၁) No Date
ဝ၉၄၁။ ရုက္ခဓမ္မဇာတ်တော်(၂) No Date
ဝ၉၄၂။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရား(၁) No Date
ဝ၉၄၃။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရား(၂) No Date
ဝ၉၄၄။ ဘာရသုတ္တန်(၁) No Date
ဝ၉၄၅။ ဘာရသုတ္တန်(၂) No Date
ဝ၉၄၆။ ဘာရသုတ္တန်(၃) No Date
ဝ၉၄၇။ ဘာရသုတ္တန်(၄) No Date
ဝ၉၄၈။ တိဿ သာမဏေတရား(၁) No Date
ဝ၉၄၉။ တိဿ သာမဏေတရား(၂) No Date
ဝ၉၅ဝ။ သုမနပန်းတော်ဆက်(၁) No Date
ဝ၉၅၁။ သုမနပန်းတော်ဆက်(၂) No Date
ဝ၉၅၂။ ဗဟုပုတ္တိကာသောဏာထေရီအပါဒါန်(၁) No Date
ဝ၉၅၃။ ဗဟုပုတ္တိကသောဏာထေရီအပါဒါန်(၂) No Date
ဝ၉၅၄။ ဗဟုပုတ္တိကာသောဏာထေရီအပါဒါန်(၃) No Date
ဝ၉၅၅ ။ သောဏထေရီတရား(၁) No Date
ဝ၉၅၆ ။ သောဏထေရီတရား(၂) No Date
ဝ၉၅၇။ သဒ္ဒါဝိမုတ္တသုတ္တန်(၁) No Date
ဝ၉၅၈။ သဒ္ဒါဝိမုတ္တသုတ္တန်(၂) No Date
ဝ၉၅၉ ။ လောကအကြောင်းတရားလေးပါး No Date
ဝ၉၆ဝ။ ပရိတ္တတရား(၁) No Date
ဝ၉၆၁။ ပရိတ္တတရား(၂) No Date
ဝ၉၆၂။ သာသနာတော်ကြီးပွားကြောင်းတရား (၇)ပါး(၁) No Date
ဝ၉၆၃။ သာသနာတော်ကြီးပွားကြောင်းတရား (၇)ပါး(၂) No Date
ဝ၉၆၄ ။ ရွှေဥမင်ဆရာတောအန္တိမပူဇာရေစက်ချတရားတော် No Date
ဝ၉၆၅။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည် ၂ (စ) No Date
ဝ၉၆၆။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည် ၂ (ဆုံး) No Date
ဝ၉၆၇ ။ သောပါကမဏေတရား(၁) No Date
ဝ၉၆၈ ။ သောပါကမဏေတရား(၂) No Date
ဝ၉၆၉။ ရှင်ပြုမောဒနာတရား (၁) No Date
ဝ၉၇ဝ။ ရှင်ပြုမောဒနာတရား(၂) No Date
ဝ၉၇၁။ သာရသုံးပါးတရား No Date
ဝ၉၇၂။ ကထိန်အနုမောဒနာတရား No Date
ဝ၉၇၃။ သီလအကျိုးပြတရား No Date
ဝ၉၇၄ ။ အောင်ဆုတောင်းဂါထာ။အနေကဇာတင်တရား။ No Date
ဝ၉၇၅။ ကိုယ်ကျင့်တရားသည်လူ့တန်ခိုးတရား No Date
ဝ၉၇၆ ။ နေ့စဉ်သုံးတရား no Date
ဝ၉၇၇။ သာနုသုတ္တန်(၁) No Date
ဝ၉၇၈။ သာနုသုတ္တန်(၂) No Date
ဝ၉၇၉။ အချိန်ကိုအသုံးချတတ်ကြောင်းတရား No Date
ဝ၉၈ဝ ။ ဒေဝဟိတသုတ္တန် No Date
ဝ၉၈၁ ။ ကျေးဇူးတရားငါးပါး(၁) No Date
ဝ၉၈၂ ။ ကျေးဇူးတရားငါးပါး(၂) No Date
ဝ၉၈၃။ သုဗ္ဗဗုဒ္ဓကုဋိသုတ္တန် no Date
ဝ၉၈၄။ သုဗ္ဗဗုဒ္ဓကုဋိသုတ္တန် No Date
ဝ၉၈၅။ ကိဿဝစဏရသေ့တရား No Date
ဝ၉၈၆။ ကိဿဝစဏရသေ့တရား No Date
ဝ၉၈၇။ သစ္စာလေးပါးတရား No Date
ဝ၉၈၈။ သာသနာပြုမေတ္တာတရားတော် No Date
ဝ၉၈၉။ သုတ္တဗုဒ္ဓပူဇာတရား No Date
ဝ၉၉ဝ ။ ဗောဓိပူဇာတရား No Date
ဝ၉၉၁ ။ လောကသုတ္တန် No Date
ဝ၉၉၂။ စူန္ဒသုတ္တန်(၁) No Date
ဝ၉၉၃။ စူန္ဒသုတ္တန်(၂) No Date
ဝ၉၉၄။ စူန္ဒသုတ္တန်(၃) No Date
ဝ၉၉၅။ စူန္ဒသုတ္တန်(၄) No Date
ဝ၉၉၆။ စူန္ဒသုတ္တန်(၅) No Date
ဝ၉၉၇။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား(၁) / ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်ဘာသာတရား No Date
ဝ၉၉၈။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား(၂) No Date
ဝ၉၉၉။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား(၃) No Date
၁ဝဝဝ။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား(၄) No Date
၁ဝဝ၁။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား(၅) No Date
၁ဝဝ၂။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား(၆) No Date
၁ဝဝ၃။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား(၇) No Date
၁ဝဝ၄။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား(၈) No Date
၁ဝဝ၅။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား(၉) No Date
၁ဝဝ၆။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား(၁၀) No Date
၁ဝဝ၇။ ရသဘောဂဝတ္တဏတရား No Date
၁ဝဝ၈။ ဇိနဒါနတရားတော် No Date
၁ဝဝ၉။ ကံဏှဇာတ်တော်(၁) No Date
၁ဝ၁ဝ။ ကံဏှဇာတ်တော်(၂) No Date
၁ဝ၁၁။ နိကာယ်သြဝါဒတရား short file (only 19 min)
MP3 Version 1
၁။ ဓမ္မစြင်္ကာ၊ အနတ္တလက္ခဏသုတ်
၂။ ပရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ်၊ ပါဠိအနက်
၃။ ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော၊ အနေကဇာတင် တရားတော်
၄။ ဗဟုဒီတရသုတ္တန် တရားတော် (၃၁-၁၂-၁၉၇၆)
၅။ ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ္တန်(၁) (၁-၁-၁၉၇၇)-(၁၃၃၈ ပြာသိုလဆန်း ၁၃ရက်ည)
၆ ။ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ္တန်(၂) (၂-၁-၁၉၇၇)-(၁၃၃၈ ပြာသိုလဆန်း ၁၄ရက်ည)
၇။ သံကိစ္စသာမဏေ တရားတော် (၇-၄-၁၉၇၇)
CD cover design for MP3Disc1
(Please use Nero Cover Design Software and WinTaungyi Myanmar Font)
၁။ အာနာပါန သတိပဌာန် (၁၆-၅-၁၉၇၇)
၂။ ဒါနအနုမောဒနာကထာ တရားတော် (၂၀-၁၁-၁၉၇၇နေ့လည်၂နာရီ)
၃။ နောက်ဆုံးဆယ်လမြတ် ဗုဒ ္ဓ (၂၇-၁၂-၁၉၇၇)
၄။ ဝေလာမ သုတ္တန် (၁၀-၁-၁၉၇၈)
၅။ သုခ(၄)ပါး (၉-၂-၁၉၇၈)
၆။ ပဏ္ဍိတ သာမဏေ (၉-၂-၁၉၇၈) - (၁၃၃၉ တပို.တွဲလဆန်း ၂ရက် ည)
၇။ သုဒ္ဓတ သုတ္တန် (၁-၃-၁၉၇၈)
CD cover design for MP3Disc2
၁။ ဆန္ဒောဝါဒသုတ္တန်(၁) (၃-၃-၁၉၇၈) - (၁၃၃၉ တပို.တွဲလပြည်.ကျော် ၉ရက် ည)
၂။ ဆန္ဒောဝါဒသုတ္တန်(၂) (၄-၃-၁၉၇၈) - (၁၃၃၉ တပို.တွဲလပြည်.ကျော် ၁၀ရက် ည)
၃။ ကာမသုတ္တန် (၇။၃။၁၉၇၈)
၄။ ကာမဇာတ် တရား (၈-၃-၁၉၇၈)
၅။ ဒက္ခိဏဝိသုဒ္ဓိလေးပါး တရားတော် (၂၉-၄-၁၉၇၈ညနေ ၆နာရီ)
၆။ နိကြေဓသာမဏေ တရားတော် (၁၉-၉-၁၉၇၈)
CD cover design for MP3Disc 3
၁။ ကေသမုတ္တိသုတ္တန (၂၁-၁၁-၁၉၇၈)-(၁၃၃၉တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁၁ရက် ည)
၂။ သဒ္ဒါနှင့်မစ္ဆရိယတိုက်ပွဲ (၂၄-၁၂-၁၉၇၈)
၃။ အနုရုဒ္ဓါသုတ္တန် တရားတော (၂-၁-၁၉၇၉)-(၁၃၄၀ပြာသိုလဆန်း ၅ရက)်
၄။ မေတ္တ သုတ္တန်တရားတော်(၁) (၁၇-၁-၁၉၇၉)-(၁၃၄၀ပြာသိုလပြည်.ကျော် ၅ရက်ည)
၅။ မေတ္တ သုတ္တန်တရားတော်(၂) (၁၈-၁-၁၉၇၉)-(၁၃၄၀ပြာသိုလပြည်.ကျော် ၆ရက်ည)
CD cover design for MP3Disc 4
၁။ ဂီလာနသုတ္တန် (၁-၂-၁၉၇၉) (၁၃၄၀ တပို.တွဲလဆန်း ၅ရက်ည)
၂။ ဝေဒနာနုပဿနာ (၂၀-၄-၁၉၇၉) (၁၃၄၁တန်ခူးလပြည်.ကျော်၁၃ရက်ည)
၃။ ဝိဘက်တော် (၁၂) ပါး တရားတော်(၁) (၃-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လဆန်း ၈ရက်ည)
၄။ ဝိဘက်တော် (၁၂) ပါး တရားတော်(၂) (၅-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လဆန်း ၁၀ရက်ည)
၅။ ဝိဘက်တော် (၁၂) ပါး တရားတော်(၃) (၇-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လဆန်း ၁၂ရက်ည)
CD cover design for MP3Disc 5
၁။ ဝိဘက်တော်(၁၂) ပါး တရားတော်(၄) (၈-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လဆန်း ၁၃ရက်ည)
၂။ ဝိဘက်တော်(၁၂) ပါး တရားတော်(၅) (၉-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လဆန်း ၁၄ရက်ည)
၃။ ဝိဘက်တော်(၁၂) ပါး တရားတော်(၆) (၁၀-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်. ဗုဒ္ဓနေ.)
၄။ ဝိဘက်တော်(၁၂) ပါး တရားတော်(၇) (၁၄-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်.ကျော်၄ရက်)
၅။ ဝိဘက်တော်(၁၂) ပါး တရားတော်(၈) (၁၅-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်.ကျော်၅ရက်)
CD cover design for MP3Disc 6
MP3 Disc 7
၁။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၁) (၁၁-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်.ကျော် ၁ရက်)
၂။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၂) (၁၆-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်.ကျော်၆ရက်)
၃။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၃) (၁၇-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁ နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်.ကျော် ၇ရက်)
၄။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၄) (၂၀-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်.ကျော်၁၀ရက်)
၅။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၅) (၂၁-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်.ကျော် ၁၁ရက်)
၆။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၆) (၂၂-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁ နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်.ကျော်၁၂ရက်)
CD cover design for MP3Disc 7
MP3 Disc 8
၁။ ကုဒါလပဏ္ဍိတဇာတ် တရားတော် (၂၈-၁၁-၁၉၇၉)
၂။ သာမဏေကျော်လေးပါး တရားတော် (၁၅-၁၂-၁၉၇၉)
၃။ ဗြသနတရားငါးပါး (၁၇-၁၂-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နတ်တော်လပြည်.ကျော်၁၄ရက်ည)
၄။ ကပ်ကြီးသုံးပါးတရား (၁၉-၁၂-၁၉၇၉) (၁၃၄၁ပြာသိုလဆန်း ၂ရက်)
၅။ ဝနရောပသုတ္တန် တရားတော် (၁၈-၁-၁၉၈၀)
CD cover design for MP3Disc 8
MP3 Disc 9
၁။ မင်္ဂလာ့သုတ္တန်နိဒါန်း (၃၁-၃-၁၉၈၀) (၁၃၄၁နှောင်းတန်ခူးလပြည်.ကျော် ၁ရက်ည)
၂။ အသေဝနာစဗာလာနံ(၁) (၁-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၁နှောင်းတန်ခူးလပြည်.ကျော်၂ရက်ည)
၃။ အသေဝနာစဗာလာနံ(၂) (၂-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၁နှောင်းတန်ခူးလပြည်.ကျော်၃ရက်ည)
၄။ ပဏ္ဍိတာနဉ္စသေဝနာ(၁) (၄-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၁နှောင်းတန်ခူးလပြည်.ကျော်၅ရက်ည)
၅။ ပဏ္ဍိတာနဉ္စသေဝနာ(၂) (၅-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၁နှောင်းတန်ခူးလပြည်.ကျော် ၆ရက်ည)
CD cover design for MP3Disc 9
MP3 Disc 10
၁။ ပူဇာစပူဇနိယ (၆-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၁ နှောင်းတန်ခူးလပြည်.ကျော်၇ရက်ည)
၂။ ပတိရူပဒေသဝါသောစ (၇-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၁နှောင်းတန်ခူးလပြည်.ကျော်၈ရက်ည)
၃။ ပုဗ္ဗေစကတပုညတာ (၉-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၁နှောင်းတန်ခူးလပြည်.ကျော်၁၀ရက်ည)
၄။ အတ္တသမ္မာပဏိဓိစ (၁၀-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၁နှောင်းတန်ခူးလပြည်.ကျော်၁၁ရက်ည)
၅။ ဗာဟုသစ္စမင်္ဂလာ တရားတော်(၁) (၁၁-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၁နှောင်းတန်ခူးလပြည်.ကျော်၁၂ရက်ည)
CD cover design for MP3Disc 10
MP3 Disc 11
၁။ ဗာဟုသစ္စဉ္စမင်္ဂလာ တရားတော်(၂) (၁၂-၄-၁၉၈၀)
၂။ ဘဝတန်ဘိုး (၁၃-၄-၁၉၈၀)
၃။ ဒါန(၃)ပါးတရားတော် (၁၃-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၁တန်ခူးလပြည်.ကျော်၁၄ရက်ည)
၄။ ပါနိယဒါနှင့်သိပ္ပဉ္စ(၁) (၁၄-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နှစ်ကူးနှစ်ဆန်း ၁ရက်ည)
၅။ အနာထပိဏ္ဍိကောဝါဒသုတ္တန် (၁၅-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၁ကဆုန်လဆန်း ၂ရက်ည)
CD cover design for MP3Disc 11
MP3 Disc 12
၁။ ပါနိယဒါနှင့်သိပ္ပဉ္စ (၁၇-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နှစ်ကူးကဆုန်လဆန်း၄ရက်ည)
၂။ ရာဟုလောဝါဒသုတ္တန် (၂၀-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နှစ်ဦးကဆုန်လဆန်း၅ရက်ည)
၃။ ဝိနယသုသိက္ခိတ (၂၁-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန်လဆန်း ၈ရက်ည)
၄။ သုဘာသိတဝါစာ (၂၃-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန်လဆန်း ၁၀ရက်ည)
၅။ မာတာပီတုဥပဋ္ဌာနံ (၂၄-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန်လဆန်း ၁၁ရက်ည)
CD cover design for MP3Disc 12
MP3 Disc 13
၁။ အနာကုလာစကမ္မန္တာ (၂၆-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန်လဆန်း၁၃ရက်ည)
၂။ ဒါနဉ္စ (၂၇-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန်လဆန်း ၁၄ရက်ည)
၃။ ဓမ္မာစရိယ (၂၉-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန်လပြည်.ကျော်၁ရက်ည)
၄။ ဉာတကာနဉ္စသင်္ဂဟော (၃၀-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန်လပြည်.ကျော်၂ရက်ည)
၅။ အနဝဇ္ဇကမ္မ (၁-၅-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန်လပြည်.ကျော်၃ရက်ည)
၆။ အာရတီရတီပါပါ (၂-၅-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ကဆုန်လပြည်.ကျော်၄ရက်ည)
CD cover design for MP3Disc 13
MP3 Disc 14
၁။ မဇ္ဇပါနာသံယမော (၄-၅-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန်လပြည်.ကျော်၆ရက်ည)
၂။ အပ္ပမာဒေါစဓမ္မေတု (၅-၅-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန်လပြည်.ကျော်၇ရက်ည)
၃။ ဂါရဝ (၁၄-၅-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နယုန်လဆန်း ၁ရက်ည)
၄။ နိဝါတ မင်္ဂလာ (၂၃-၅-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နယုန်လဆန်း ၁၀ရက်ည)
၅။ သန္တုဌိမင်္ဂလာ (၃၀-၅-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နယုန်လပြည်.ကျော်၂ရက်ည)
CD cover design for MP3Disc 14
MP3 Disc 15
၁။ ကတညုတာ မင်္ဂလာ (၅-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နယုန်လပြည်.ကျော်၈ရက်ည)
၂။ ကာလေနဓမ္မသာဝန မင်္ဂလာ (၆-၆-၁၉၈၀(၁၃၄၂နယုန်လပြည်.ကျော်၉ရက်ည)
၃။ ခန္တီ မင်္ဂလာ (၇-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နယုန်လပြည်.ကျော်၁၀ရက်ည)
၄။ သောဝစဿတာ မင်္ဂလာ (၈-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နယုန်လပြည်.ကျော်၁၁ရက်ည)
၅။ သာမဏာနဉ္စဒဿနံမင်္ဂလာ (၁၄-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမဝါဆိုလဆန်း၂ရက်)
၆။ ကာလေနဓမ္မသာကစ္ဆာ မင်္ဂလာ (၁၅-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၃ရက်)
CD cover design for MP3Disc 15
MP3 Disc 16
၁။ တပ မင်္ဂလာ (၂၇-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမဝါဆိုလဆန်း၁၅ရက်)
၂။ ဗြဟ္မစရိယ မင်္ဂလာ (၂၈-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်၁ရက်)
၃။ အရိယာသစ္စာနဒဿနံမင်္ဂလာ (၂၉-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်၂ရက်)
၄။ နိဗ္ဗာနသစ္ဆိကိရိယာစ မင်္ဂလာ (၃၀-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်၃ရက်)
၅။ လောကဓမ္မနကမ္ပတိမင်္ဂလာ (၁-၇-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၄ရက်)
CD cover design for MP3Disc 16
MP3 Disc 17
၁။ အသောကံ မင်္ဂလာ (၂-၇-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်၅ရက်)
၂။ ဝိရဇံ မင်္ဂလာ (၃-၇-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်၆ရက်)
၃။ ခေမံ မင်္ဂလာ (၅-၇-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်၈ရက်)
၄။ ဘာရသုတ္တန် တရားတော် (၁၆-၂-၁၉၈၁)
၅။ (၇)နေ့ဗုဒ္ဓဝင်တရားတော် (၁၈-၅-၁၉၈၁) (၁၃၄၃ ကဆုန်လဆန်း ၁၅ရက်)
CD cover design for MP3Disc 17
MP3 Disc 18
၁။ ရွှေအိုးမြုပ်တရား (၂၉-၁၀-၁၉၈၁) (၁၃၄၂ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၂ရက်ည)
၂။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရားတော်(၁) (၂၉-၆-၁၉၈၄)
၃။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရားတော်(၃) (၃၀-၆-၁၉၈၄)
၄။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရားတော်(၄) (၁-၇-၁၉၈၄)
၅။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရားတော်(၅) (၂-၇-၁၉၈၄)
CD cover design for MP3Disc 18
MP3 Disc 19
၁။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရားတော် (၃-၇-၁၉၈၄)
၂။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရားတော် (၄-၇-၁၉၈၄)
၃။ ကိုယ်ကျင့်တရားတော် (၂၁-၄-၁၉၈၇)
၄။ ကာလတန်ဖိုး တရားတော် (၁၆-၁-၁၉၈၉နံက်၉နာရီ)
၅။ ဗုဒ္ဓနုဿတိဘာဝနာ (၅-၁-၁၉၉၀) (၁၃၅၁ ပြာသိုလဆန်း ၁၀ရက်ည၆၊၁၅)
၆။ ခရီးသွားရခြင်းအကျိုးကျေးဇူး (၇-၃-၁၉၉၃) (၁၃၅၄တပေါင်းလပြည့် )
၇။ သူတော်ကောင်းတရား(၇)ပါး (၃၀-၇-၁၉၉၃) (၁၃၅၅ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း ၁၂ရက် ည ရး၃၀)
CD cover design for MP3Disc 19
MP3 Disc 20
၁။ မေတ္တာစွမ်းရည် တရားတော် (၂၂-၃-၁၉၉၄) (၁၃၅၅ တပေါင်းလဆန်း ၁၁ ရက် ၆း၀၀ ည)
၂။ ဓမ္မတန်ဖိုးတရားတော် (၂၆-၅-၁၉၉၄) (၁၃၅၆ကဆုန်လပြည်.ကျော်၂ရက်ရး၃၀ည)
၃။ အပ္ပမာဒတရား (၂၇-၅-၁၉၉၃) (၁၃၅၅နယုန်လဆန်း ၇ရက်ရး၄၅ည)
၄။ ဓမ္မဒီပတရားတော် (၂၁-၂-၁၉၉၆) (၁၃၅၇တပေါင်းလဆန်း ၄ရက်၃း၃၀ည)
၅။ ဒါနကထာ (၁၆-၃-၁၉၉၆)
CD cover design for MP3Disc 20
MP3 Disc 21
၁။ ပဉ္စက္ကဒါယကာ တရားတော် (၅-၅-၁၉၉၆ ညနေ ၇နာရီ)
၂။ ဗြဟ္စစါရသုတ္တန် တရားတော် (၁၃-၁၂-၁၉၉၆ ညနေ ၈။၁၅ နာရီ)
၃။ ရဟန်းတစ်ပါး၏တန်ဖိုး တရားတော် (၂၇-၂-၁၉၉၇)
၄။ မိလိန္ဒနှင့်အသျှင်နာဂသေန (၅-၄-၁၉၉၇)
၅။ အမြတ်ဆုံးတရားလေးပါး (၁၆-၄-၁၉၉၇)
၆။ အမြတ်တရားလေးပါး တရားတော် (၁၆-၄-၁၉၉၇)
၇။ ဆွမ်းအနုမောဒနာ (ပုဏ္ဏအမျိုးသမီး) (၁၆-၁-၁၉၉၈)
၈။ မေဃိယဝတ္ထု (စိတ်ပြုပြင်နည်း) တရားတော် (၁၆-၁-၁၉၉၈)
၉။ ဘုန်းကံကြီးသူတို့အတွက်သာသနာ (၁၇-၁-၁၉၉၈) (၁၃၅၉ ပြာသိုလပြည့်ကျော်၅ရက် ၅း၅၀ ည)
CD cover design for MP3Disc 21
MP3 Disc 22
၁။ အရှင်မဟာကဿဖမထေရ် ဝထ္ထု (၁၂-၂-၁၉၉၈)
၂။ အမြတ်တရား(၄)ပါး (၅-၄-၁၉၉၈)
၃။ ဘဝတန်ဘိုး တရားတော် (၁၃-၄-၁၉၉၈)
၄။ မေတ္တာဘာဝနာ (၂၃-၅-၁၉၉၉) (၁၃၆၁နယုန်လဆန်း ၉ရက်)
၅။ ဝိဇ္ဇာနှင့်စရဏတရား (၃၀-၁-၂၀၀၀) (၁၃၆၁ ပြာသိုလပြည့်ကျော်၁၀ရက်ည ရး၁၅)
၆။ ဂန္ဘီရဉာဏ် (၂၉-၃-၂၀၀၀)
၇။ အမြတ်ဆုံးဥစ္စာတရား၂ပါး (၂၉-၃-၂၀၀၀) (၁၃၆၁ တပေါင်းလပြည့်ကျော်၁၀၇က် ရး၀၀ ည)
၈။ ဗုဒ္ဓဝါဒီတရားတော် (၃၁-၅-၂၀၀၀ ညနေ ၆နာရီ)
၉။ မေတ္တာအနှစ်ချုပ်တရားတော် (၃၁-၅-၂၀၀၀)
CD cover design for MP3Disc 22
MP3 Disc 23
၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံတရား (၃၁-၅-၂၀၀၀)
၂။ ပညာမပါပွဲမဖြစ်ဘူး (၁၈-၂-၂၀၀၁) (၁၃၆၂ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်၁၁၇က် ရး၄၅ည)
၃။ ကဆုန်လပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ (၄-၅-၂၀၀၁) (၁၃၆၂ နှစ်ဦးကဆုန်လဆန်း၁၃ရက်ည)
၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ့ သမိုင်းတရားတော်(၁) (၈-၅-၂၀၀၁)
၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ့ သမိုင်းတရားတော်(၂) (၁၁-၅-၂၀၀၁)
၆။ သရဏဂုံ(၃)ပါးတရားတော် (၂၃-၅-၂၀၀၁) (၁၃၆၂ နယုန်လဆန်း၂ ရက် ရး၄၀ည)
CD cover design for MP3Disc 23
MP3 Disc 24
၁။ ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် ဆွဲဆောင်ခြင်း တရားတော် (၂-၆-၂၀၀၁ ညနေ၇နာရီ)
၂။ ကဏှဆုတောင်း (၉-၆-၂၀၀၁ Singapore)
၃။ အဘိဓမ္မာနှင့်ဝိပဿနာတရားတော် (၁-၁၁-၂၀၀၁) (၁၃၆၃သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့)
၄။ သာမညဖလသုတ္တန် (၂၉-၁၁-၂၀၀၁) (၁၃၆၃တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁၄ရက်ည)
၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓချီးမွှမ်းသည့်ကောင်းမှုတရား (၈-၁-၂၀၀၂) (၁၃၆၃နတ်တော်လပြည့်ကျော်၉ရက်ည)
၆။ သဒ္ဒါနှင့်စာဂတရား (၁၀-၂-၂၀၀၂) (၁၃၆၃ ပြာသိုလပြည့်ကျော်၁၃ရက် ရး၃၀ ည)
၇။ အရှိတရားနှင့်အမှန်တရား (၂၁-၁၀-၂၀၀၂) (၁၃၆၄သတင်းကျွတ်လပြည့် ရး၄၀ည)
၈။ သုဇာတာဝတ္တု (၂၅-၁၀-၂၀၀၂) (၁၃၆၄သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်၄ရက် ရး၄၅ည)
CD cover design for MP3Disc 24
MP3 Disc 25
၁။ ခုဇ္ဇတ္တရာဝတ္တု (၂၇-၁၀-၂၀၀၂) (၁၃၆၄သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်၆ရက် ရး၃၀ည)
၂။ သုဘဒ္ဒသတ္တန်တရားတော် (၂၅-၂-၂၀၀၃) (၁၃၆၄တပို့တွဲလပြည့်ကျော်၉ရက် ရး၄၅ည)
၃။ ဝိသာခါဝတ္တု (၂၆-၂-၂၀၀၃) (၁၃၆၄တပို့တွဲလပြည့်ကျော်၁၀ရက် ရး၃၀ည)
၄။ သာမာဝတီဝတ္တု (၂၈-၂-၂၀၀၃) (၁၃၆၄တပို့တွဲလပြည့်ကျာ်၁၂ရက်)
၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဝါကျွတ်မိန့်ခွန်း (၁၀-၁၀-၂၀၀၃) (၁၃၆၅ သီတင်းကျွတ်လပြည့် ရး၄၅ည)
၆။ တရားအကျဉ်းချုပ်-၄ပါး (၂-၁၁-၂၀၀၃ Singapore)
၇။ ဝိဟာရနေနည်းသုံးပါး (၂၃-၁၁-၂၀၀၃) (၁၃၆၅ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်၁၅ရက ်၈း၃၀ည)
၈။ ဒါနသည်စစ်တိုက်ရသည် ထက်ခက်၏
CD cover design for MP3Disc 25
MP3 Disc 26
၁။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၁) ၄-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ပြာသိုလဆန်း ၁၃ရက်ည)
၂။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၂) ၅-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ပြာသိုလဆန်း၁၄ရက်ည)
၃။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၃) ၆-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ပြာသိုလပြည့် နေ့ည)
၄။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၄) ၇-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ပြာသိုလပြည့်ကျော်၁ရက်ည)
၅။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၅) ၈-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ပြာသိုလပြည့်ကျော်၂ရက်ည)
၆။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၆) ၁၀-၁-၂၀၀၄(၁၃၆၅ ပြာသိုလပြည့်ကျော်၄ရက်ည)
၇။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၇) ၁၁-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ပြာသိုလပြည့်ကျော်၅ရက်ည)
CD cover design for MP3Disc 26
MP3 Disc 27
၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဘဝလမ်းညွှန်တရား
၆။ ဗုဒ္ဓ၊ဓမ္မ၊သံဃာ့ လမ်းညွှန်တရား
၉။ မိဘများကသားသ္မီးများအပေါ် မျှော်လင့်ချက်(၅)ချက်
CD cover design for MP3Disc 27
MP3 Disc 28
၁။ ပရိနိဗ္ဗာန်နသုတ် ၂၇-၇-၁၉၂၃ (၁၂၈၅ခုနှစ် ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်နေ့ )
၂။ ရောဟိနိမင်းသမီး ၉-၆-၁၉၇၈ (၁၃၄၀ခုနှစ် နယုန်လဆန်း ၄ ရက်နေ့ ည)
၃။ နိဂြောဓ သာမဏေ ၁၉-၉-၁၉၇၈ (၁၃၄၀ခုနှစ် တော်သလင်းလပြည့်ကျော် ၃ ရက်နေ့ညနေ)
၄။ ဘဒ္ဒဝဂ္ဂီနောင်ညီသုံးကျိပ် ၃၁-၁၀-၁၉၇၈ (၁၃၄၀ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁ ရက်နေ့ညနေ)
CD cover design for MP3Disc 28
MP3 Disc 29
၁။ အာနန္ဒာထေရအပါဒါန် ၆-၅-၁၉၇၉ (၁၃၄၁ခုနှစ် ကဆုန်လဆန်း ၁၁ ရက်နေ့ ညနေ ၇နာရီ)
၂။ သာမဏေကျော်လေးပါး ၁၅-၁၂-၁၉၇၉ (၁၃၄၁ခုနှစ် နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၁၂ ရက်နေ့ ည)
၃။ သြဝါဒတရား ၁၉-၇-၁၉၈၀ (၁၃၄၂ခုနှစ် ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း ၇ ရက်နေ့ )
၄။ တဖုဿနှင့် ဘလိကညီနောင် ၁၉-၁၁-၁၉၈၀ (၁၃၄၂ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁၂ ရက်နေ့ ညနေ)
၅။ ဗုဒ္ဓဘိသေကမင်္ဂလာ ၂၈-၂-၁၉၈၁ (၁၃၄၂ခုနှစ် တပိုတွဲလပြည့်ကျော် ၉ ရက်နေ့ ညနေ ၅း၄၅နာရီ)
CD cover design for MP3Disc 29
MP3 Disc 30
၁။ သံဝေဇနိယလေးဌာန ၂၉-၃-၁၉၈၂ (၁၃၄၃ခုနှစ် နှောင်းတန်ခူးလဆန်း ၅ ရက်နေ့ ည)
၂။ ဗုဒ္ဓခရီးစဉ် ၂၆-၉-၁၉၈၇ (၁၃၄၉ ခုနှစ်သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၄ ရက်နေ့ ည)
၃။ မရဏသတိကထာ ၂၃-၉-၁၉၉၀ (၁၃၅၂ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၅ ရက်နေ့ ညနေ)
၄။ အင်္ဂုလိမာလ ၁၃-၅-၁၉၉၄ (၁၃၅၆ခုနှစ် ကဆုန်လဆန်း ၄ ရက်နေ့ ညနေ ရး၃ဝနာရီ)
CD cover design for MP3Disc 30
MP3 Disc 31
၁။ အရှင်နာဂသိန်နှင့်အဘိဓမ္မာ ၁၉-၁၀-၁၉၉၄ (၁၃၅၆ခုနှစ် သီတင်းကွျှတ် လပြည့်ေနေ့ ညနေ ၇ နာရီ)
၂။ အသက်ရှည်ကြောင်းမဟာဓမ္မပါလဇာတ် ၂-၁၂-၁၉၉၄ (၁၃၅၆ခုနှစ်တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်၁၅ရက်နေ့ ညနေ ၈း၃ဝနာရီ)
၃။ စိတ္တသူကြွယ်အတ္ထုပတ္တိ ၁၂-၁-၁၉၉၅ (၁၃၅၆ခုနှစ် ပြာသိုလဆန်း ၁၂ ရက်နေ့ ညနေ ရး၃ဝနာရီ)
၄။ ဗာကုလ ဝတ္ထု ၁၃-၃-၁၉၉၅ (၁၃၅၆ခုနှစ် တပေါင်းလဆန်း ၁၁ ရက်နေ့ ညနေ ရး၄၅နာရီ)
၅။ ဗာဟိယအလုပ်ပေးတရား ၁၃-၃-၁၉၉၅ (၁၃၅၆ခုနှစ် တပေါင်းလဆန်း ၁၃ ရက်နေ့ ညနေ ၈း၄၅နာရီ)
၆။ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်အဘိဓာန် ၁၄-၃-၁၉၉၅ (၁၃၅၆ခုနှစ် တပေါင်းလဆန်း ၁၄ ရက်နေ့ ညနေ ၆နာရီ)
၇။ သံဝေဂ ဉာဏ်နှင့် သံဝေဂ ဘာဝနာ
CD cover design for MP3Disc 31
MP3 Disc 32
၁။ ဗဟုသုတ ပစ္စေက ဗုဒ္ဓ ၇-၁၀-၁၉၉၅ (၁၃၅၇ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၄ ရက်နေ့ ညနေ ၇နာရီ)
၂။ ဘဝရည်ရွယ်ချက်သုံးမျိုး ၁၃-၁-၁၉၉၆ (၁၃၅၇ခုနှစ် ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၉ ရက်နေ့ နေလည် ၃း၁၅နာရီ)
၃။ သာသနာသုံးရပ် ၇-၆-၁၉၉၆ (၁၃၅၈ခုနှစ် နယုန်လပြည့်ကျော် ၇ ရက်နေ့ ညနေ ၅း၁၅နာရီ)
၄။ ဘုရားအဆူဆူတို့၏အထာကတာ ၇-၆-၁၉၉၆ (၁၃၅၈ခုနှစ် နယုန်လပြည့်ကျော် ၇ ရက်နေ့ ညနေ ၈နာရီ)
၅။ သာသနာ၏အကျဉ်းချုပ်တရား ၂၄-၆-၁၉၉၆ (၁၃၅၈ခုနှစ် ပထမဝါဆိုလဆန်း ၉ ရက်နေ့ ညနေ ၈နာရီ)
၆။ သံဝေဂ ကထာ ၂၂-၁၀-၁၉၉၆ (၁၃၅၈ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၀ ရက်နေ့ ညနေ ရး၃ဝနာရီ)
၇။ ရဟန်းတပါး၏တန်ဘိုးတရား ၂၇-၂-၁၉၉၇ (၁၃၅၈ခုနှစ် တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၅ ရက်နေ့ ညနေ ၅း၁၅နာရီ)
CD cover design for MP3Disc 32
MP3 Disc 33
၁။ ဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်နှင့်ဓမ္မဖြစ်စဉ် ၁၂-၄-၁၉၉၇ (၁၃၅၈ခုနှစ် နှောင်းတန်ခူးလဆန်း ၅ ရက်နေ့ ညနေ ၈နာရီ)
၂။ အပျော်ဆုံးနေ့ ၁၉-၁၁-၁၉၉၇ (၁၃၅၉ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၃ ရက်နေ့ ညနေ ရး၄၅နာရီ)
၃။ အနှစ်သုံးပါးတရား ၅-၄-၁၉၉၉ (၁၃၆၀ခုနှစ် နှောင်းတန်ခူးလပြည့်ကျော် ၅ ရက်နေ့ ညနေ ၈နာရီ)
၄။ အားဖြည့်တရားတော် ၁-၅-၁၉၉၉ (၁၃၆၁ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၂ ရက်နေ့ ညနေ ရး၃ဝနာရီ)
၅။ အကျင့်နှင့်အသိပညာ ၃၁-၁-၂၀၀၀ (၁၃၆၁ခုနှစ် ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်နေ့ ညနေ ရး၃ဝနာရီ)
၆။ ဘိက္ခုအပရိဟာနိယ(၇)ပါး ၂၀-၃-၂၀၀၀ (၁၃၆၁ခုနှစ် တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁ ရက်နေ့ ညနေ ၈နာရီ)
၇။ ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲ တရား (__နှစ်ဦး ကဆုန်လဆန်း ၆ ရက်နေ့ ၂း၂ဝနာရီ)
CD cover design for MP3Disc 33
MP3 Disc 34
၁။ သီလကထာ တရား ၂၈-၃-၂၀၀၀ (၁၃၆၁ခုနှစ် တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၉ ရက်နေ့ ညနေ ရး၂ဝနာရီ)
၂။ ပညာကထာ တရား ၃-၄-၂၀၀၀ (၁၃၆၁ခုနှစ် တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၅ ရက်နေ့ ညနေ ရး၃၅နာရီ)
၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ထေရ်ရဝါဒ ၁၃-၁၂-၂၀၀၀ (၁၃၆၂ခုနှစ် နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၃ ရက်နေ့ ညနေ ရး၃ဝနာရီ)
၄။ ထေရ်ရဝါဒ ၂၆-၁-၂၀၀၁ (၁၃၆၂ခုနှစ် တပို့တွဲလဆန်း ၃ ရက်နေ့ ညနေ ရး၃ဝနာရီ)
၅။ ဓမ္မဒူတ ကိုးဋ္ဌာန ၁၉-၂-၂၀၀၂ (၁၃၆၃ ခုနှစ် တပို့တွဲလဆန်း ၇ ရက်နေ့ ညနေ ၈နာရီ)
၆။ ဝဇီယာထေရ်ရီ ၇-၃-၂၀၀၂ (၁၃၆၃ခုနှစ် တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၈ ရက်နေ့ ညနေ ရး၄၅နာရီ)
၇။ သေလာ ထေရ်ရီ ၁၀-၃-၂၀၀၂ (၁၃၆၃ခုနှစ် တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်နေ့ ညနေ ရး၄၅နာရီ)
၈။ သူရသဒီမယ်တော်နှင့် ၃၇မင်းအကြောင်း
CD cover design for MP3Disc 34
MP3 Disc 35
၁။ စာလာထေရ်ရီ ၁၂-၃-၂၀၀၂ (၁၃၆၃ခုနှစ် တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်နေ့ ညနေ ရး၃ဝနာရီ)
၂။ ဥပစာလာ ထေရ်ရီ ၁၃-၃-၂၀၀၂ (၁၃၆၃ခုနှစ် တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၁၄ ရက်နေ့ ညနေ ရး၃ဝနာရီ)
၃။ ကာဠီကုရရဂရိကာ ဝတ္ထု ၂၅-၁၀-၂၀၀၂ (၁၃၆၄ခုနှစ်သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်၂ရက်နေ့ညနေ ရး၃ဝနာရီ)
၄။ ကတိယာနီ ဝတ္ထု ၂၄-၁၀-၂၀၀၂ (၁၃၆၄ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၃ ရက်နေ့ ညနေ ရး၄၅နာရီ)
၅။ သိဋ္ဌဓမ္မအမြတ်တရား ၂၆-၁၀-၂၀၀၂ (၁၃၆၄ခုနှစ် သီတင်းကွျှတ် လပြည့်ကျော် ၅ ရက်နေ့ ညနေ ရး၃ဝနာရီ)
၆။ သုပ္ပိယ ဝတ္ထု ၂-၂-၂၀၀၃ (၁၃၆၄ခုနှစ် တပို့တွဲလဆန်း ၁ ရက်နေ့ ညနေ ရး၂ဝနာရီ)
CD cover design for MP3Disc 35
MP3 Disc 36
၁။ သုပ္ပဝါသာ ၂၇-၂-၂၀၀၃ (၁၃၆၄ခုနှစ် တပိုတွဲလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်နေ့ ညနေ ရး၄၅နာရီ)
၂။ ဥတ္တရာ ၁-၃-၂၀၀၃ (၁၃၆၄ခုနှစ် တပိုတွဲလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်နေ့ ညနေ ရး၄ဝနာရီ)
၃။ နကုလမာတာ ၂-၃-၂၀၀၃ (၁၃၆၄ခုနှစ် တပိုတွဲလပြည့်ကျော် ၁၄ ရက်နေ့ ညနေ ရး၄ဝနာရီ)
၄။ အရှိတရားနှင့်အမှန်တရား ၂၁-၁၀-၂၀၀၃ (၁၃၆၄ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လပြည့် ညနေ ရး၄ဝနာရီ)
၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓသရီပူဇာတရား ၅-၁၁-၂၀၀၃ (၁၃၆၅ခုနှစ် နတ်တော်လဆန်း ၁၁ ရက်နေ့ ညနေ ရး၃ဝနာရီ)
၆။ ဓမ္မုဒ္ဒေသတရား(၄)ပါး ၅-၁၂-၂၀၀၃ (၁၃၆၅ခုနှစ် နတ်တော်လဆန်း ၁၂ ရက်နေ့ ညနေ ရး၃ဝနာရီ)
၇။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၁) ၁၂-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ခုနှစ် ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၆ ရက်နေ့ ညနေ ၇နာရီ)
CD cover design for MP3Disc 36
MP3 Disc 37
၁။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည်(၂) ၂၁-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ခုနှစ် ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၁၅ ရက်နေ့ ညနေ ရး၂ဝနာရီ)
၂။ သစ္စာမေတ္တာစွမ်းရည် ၁၄-၂-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ခုနှစ် တပို့တွဲ လပြည့်ကျာ် ၅ ရက်နေ့ ညနေ ၈နာရီ)
၃။ ကောင်းမှု့တန်ခိုးတရား ၃-၅-၂၀၀၄ (၁၃၆၆ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့်)
CD cover design for MP3Disc 37
MP3 Disc 38
၁။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်(၁) ၂၈-၁၂-၁၉၇၇ (၁၃၃၉ ခုနှစ် နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၃ရက်နေ့ည)
၂။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်(၂) ၂၉-၁၂-၁၉၇၇ (၁၃၃၉ ခုနှစ် နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၄ရက်နေ့ည)
၃။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်(၃) ၃၀-၁၂-၁၉၇၇ (၁၃၃၉ ခုနှစ် နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၅ရက်နေ့ည)
၄။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်(၄) ၃၁-၁၂-၁၉၇၇ (၁၃၃၉ ခုနှစ် နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ရက်နေ့ည)
၅။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်(၅) ၁-၁-၁၉၇၈ (၁၃၃၉ ခုနှစ် နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ရက်နေ့ည)
၆။ ဓမ္မာဒါသ တရားကြေးမုံ ၁၁-၅-၁၉၇၉ (၁၃၄၁ ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၁ရက်နေ့ည)
CD cover design for MP3Disc 38
MP3 Disc 39
၁။ ပုဏ္ဏောဝါဒသုတ္တန် ၁-၃-၁၉၇၈ (၁၃၃၉ ခုနှစ် တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၇ရက်နေ့ည)
၂။ ပူရဏကဿဖတိတ္ထိကြီး ၃၁-၃-၁၉၇၈ (၁၃၃၉ ခုနှစ် တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၈ ရက်နေ့ည)
၃။ ဝက္ကလိသုတ္တန် (အဓိမာနိက) ၂၄-၅-၁၉၇၉ (၁၃၄၁ ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၁၄ရက်နေ့)
၄။ အနှစ်ကိုးပါး ၂၅-၂-၁၉၈၂ (၁၃၄၃ ခုနှစ် တပေါင်းလဆန်း ၃ရက်နေ့ည)
၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏စွမ်းရည်ပြ ၁-၁၂-၁၉၉၄ (၁၃၅၆ ခုနှစ် နတ်တော်လဆန်း ၉ရက်နေ့)
၆။ အရဟံဂုဏ်တော် ဗုဒ္ဓနုဿတိဘာဝနာ ကမ္မဋ္ဌါန်း ၁၂-၂-၁၉၉၅ (၁၃၅၆ ခုနှစ် တပို့တွဲလဆန်း ၁၃ရက်နေ့ည)
၇။ ဘုရားအဆူအဆူတို့၏အဆုံးအမ ၆-၆-၁၉၉၆ (၁၃၅၈ ခုနှစ် နယုန်လပြည့်ကျော် ၆ရက်နေ့ည)
CD cover design for MP3Disc 39
MP3 Disc 40
၁။ ကေသမုတ္တိတရားတော် ၆-၄-၁၉၉၇ (၁၃၅၈ ခုနှစ် တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၄ရက်)
၂။ စိတ်ကိုဆုံးမနည်း ၁၆-၁-၁၉၉၈ (၁၃၅၉ ခုနှစ် ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၄ရက်နေ့ည)
၃။ လူ့ဘဝအဓိပ္ပါယ် ၂-၁၂-၁၉၉၉ (၁၃၆၁ ခုနှစ် တန်ဆော်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၀ရက်နေ့)
၄။ သီလသည် လူသားတိုင်းတို့၏ဘ၀ တရား ၁၉-၅-၂၀၀၀
၅။ ဣဿာနှင့် မစ္ဆရိယ ၁၀-၇-၂၀၀၀
၆။ အဝိဇ္ဇာမှ ဝိဇ္ဇာသို့ ၂၁-၁၀-၂၀၀၀
၇။ ကဏ္ဍဆုတောင်းခန်း ၉-၇-၂၀၀၁
၈။ သဗ္ဗမင်္ဂလာတရားတော် ၃၁-၁၂-၂၀၀၁ (၁၃၆၃ ခုနှစ် နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၁ရက်နေ့)
CD cover design for MP3Disc 40
MP3 Disc 41
၁။ အပ္ပမာဒတရား(၃) ၂၆-၃-၂၀၀၃ (၁၃၆၄ ခုနှစ် တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၉ရက်နေ့ည)
၂။ အပ္ပမာဒတရား(၄) ၃-၄-၂၀၀၃ (၁၃၆၄ ခုနှစ် နှောင်းတန်ခူးလဆန်း ၂ရက်နေ့ည)
၃။ အပ္ပမာဒတရား(၅) ၄-၄-၂၀၀၃ (၁၃၆၄ ခုနှစ် နှောင်းတန်ခူးလဆန်း ၃ရက်နေ့ည)
၆။ ဝနဝါသီတိဿသာမနေ တရားတော်
၇။ ကိမတ္တိယသုတ္တန် တရားတော်
CD cover design for MP3Disc 41
MP3 Disc 42
၁။ ဘာပေးရင်ဘာရမလဲ တရားတော်
၂။ သပ္ပူရိသဒါနသုတ္တန် တရားတော်
၃။ သတ္တဌာန ခုနှစ်ပတ်ဖြစ်စဉ် ဗုဒ္ဓဝင် တရားတော်
၅။ အာဒိတ္တသုတ္တန် တရားတော်
၆။ မစ္ဆရိယသုတ္တန် တရားတော်
၇။ သောကပါကသာမဏေ တရားတော်
၈။ သုပ္ပဗုဒ္ဓ တရားတော်
CD cover design for MP3Disc 42
MP3 Disc 43
၂။ ကောင်းမှု(၇)မျိုး တရာတော်
၅။ လောက၏သဘော (၂-၁၀-၂၀၀၄)
၆။ မေတ္တာတရား (၂-၁၂-၂၀၀၁)
၈။ ချမ်းသာသုခတရားလေးပါး (၁၁-၃-၁၉၉၅) ၁၃၅၆ ခုနှစ် တပေါင်းလဆန်း ၁၁ရက်
CD cover design for MP3Disc 43
MP3 Disc 44
၁။ ရာဇောဝါဒ (မင်းကျင့်တရား၁၀ပါး) ၁
၂။ ရာဇောဝါဒ (မင်းကျင့်တရား၁၀ပါး) ၂
၃။ မေတ္တာစွမ်းရည် ၂၂-၃-၁၉၉၄
၄။ အမိန့် ၀၁-၀၇-၂၀၀၃
၅။ လိပ်ကလေးလိုနေပါ ၁၇-၉-၂၀၀၇
၆။ နေနည်းသုံးပါး တရားတော် (၂၁-၁၀-၂၀၀၇) သီတကူ ကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်
၇။ ဧကရာဇ်မင်းကြီးရဲ့ ဘဝနိဂုံးတရားတော် (၃၀-၁၀-၂၀၀၇) မန္တလေးမြို့ အဝေရာ ရာမ ရန်ကင်းကျောင်း
၈။ ငါကြောင့် မဟုတ်၊ သူ့ကြောင့်မဟုတ် တရားတော် (၅-၁၁-၂၀၀၇) ထန်းတပင်မြို့၊ ရွှေတဂူဘုရားကြီး
MP3 Disc 45
၁။ လူမိုက်တို့သွားရာလမ်း ၁၃-၁၀-၂၀၀၇
၂။ လူမိုက်တွေကိုပဲ စည်းရုံးလို့ နေတော့မယ် (၂၅-၁၀-၂၀၀၇) Singapore
၃။ ကောသလမင်းကြီးရဲ့ စောရကြီးတွေ (26-10-2007) Singapore
MP3 တရားပေါင်း ၇၃၅ ပုဒ်ကို သာသနမာနိတ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အဖွဲ့မှ စုဆောင်းပြီးလှူဒါန်းပါသည်။
တရားတော်များ စုစည်းမှု (၇၃၅)ပုဒ်
၁။ မစ္ဆရိယသုတ္တန် (၁)
၂။ မစ္ဆရိယသုတ္တန် (၂)
၃။ နောက်ဆုံးဆယ်လမြတ်ဗုဒ္ဓတရား (၁)
၄။ နောက်ဆုံးဆယ်လမြတ်ဗုဒ္ဓတရား (၂)
၅။ စကားနှစ်ခွန်းတရား (၁)
၆။ စကားနှစ်ခွန်းတရား (၂)
၇။ သာမဏေကျော်လေးပါးတရား (၁)
၈။ သာမဏေကျော်လေးပါးတရား (၂)
၉။ အာနာပါန သတိပဌာန်သုတ္တံ (၁)
၁၀။ အာနာပါန သတိပဌာန်သုတ္တံ (၂)
၁၁။ အာနာပါန သတိပဌာန်သုတ္တံ (၃)
၁၂။ ကာမဇာတ် (၁)
၁၃။ ကာမဇာတ် (၂)
၁၆။ မေတ္တာတရား (မေမြို့ဟော)
၁၇။ မေတ္တာတရား (မေမြို့ဟော)
၁၈။ ဒါနကထာ (ပုဏ္ဏဝတ္တု) (၁)
၁၉။ ဒါနကထာ (ပုဏ္ဏဝတ္တု) (၂)
၂၀။ ကိမတ္တိယသုတ္တန် (၁)
၂၁။ ကိမတ္တိယသုတ္တန် (၂)
၂၂။ ကိမတ္တိယသုတ္တန် (၃)
၂၈။ တိပိဋကဓရ ဓမ္မပူဇာဒေသနာတရား
၃၁။ ပညာရှိပါမှ ပွဲဖြစ်သည့်တရား
၃၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် ဆုတောင်းနှစ်မျိုးတရား
၃၇။ ဆွမ်းအနုမောဒနာ (ပုဏ္ဍားအမျိုးသမီး)
၄၂။ အာယောဃရ (သံလှောင်အိမ်တရား)
၅၁။ ဓမ္မဒါသ (တရားကြေးမုံ)
၅၅။ ကမ္မသက္ကာထာ သမ္မာဒိဋ္ဌိ
၅၆။ ဘာပေးရင် ဘာရမလဲတရား
၅၈။ အစ္ဆရာသင်္ဂါတ သုတ္တန်
၆၀။ ဝေနာပဂုရ သုတ္တန်
၆၁။ ရှေးသူတော်ကောင်းတို့၏ လမ်းညွှန်
၆၄။ အသေဝနာစဗာလာနံ မင်္ဂလာ (၁)
၆၅။ အသေဝနာစဗာလာနံ မင်္ဂလာ (၂)
၆၈။ ပူဇာစနိယ မင်္ဂလာ
၆၉။ ပတိရူပဒေသဝါသောစ မင်္ဂလာ
၇၀။ ပုဗွေစကတပုညတာစ မင်္ဂလာ
၇၁။ အတ္တသမ္မာပဏီဓိစ မင်္ဂလာ
၇၃။ ပါနိယဒါနနှင့် သိပ္ပဉ္စမင်္ဂလာ (၁)
၇၄။ ပါနိယဒါနနှင့် သိပ္ပဉ္စမင်္ဂလာ (၂)
၇၆။ သုဘာသိတာစ မင်္ဂလာ
၇၇။ မာတာပိတုဥပဋ္ဌာန မင်္ဂလာ
၇၈။ ပုတ္တဒါရဿသင်္ဂဟ မင်္ဂလာ
၈၂။ ဉာတကာနဉ္စသင်္ဂဟော မင်္ဂလာ
၈၄။ အာရတီ ဝိရတီ ပါဝါမင်္ဂလာ
၈၅။ အပ္ပမာဒေါစ ဓမ္မေသု မင်္ဂလာ
၈၆။ မဇ္ဇပါနာစ သံယမောမင်္ဂလာ
၈၈။ နိဝါတ မင်္ဂလာ
၉၁။ ကာလေန ဓမ္မဿဝန မင်္ဂလာ
၉၂။ ခန္တီ မင်္ဂလာ
၉၃။ သောဝစဿနာ မင်္ဂလာ
၉၄။ သာမဏာနဉ္စဒဿနံ မင်္ဂလာ
၉၅။ ကာလေနဓမ္မသာကစ္ဆာ မင်္ဂလာ
၉၈။ အရိယာသစ္စာနဒဿနံ မင်္ဂလာ
၉၉။ နိဗ္ဗာနသစ္ဆိကိရိယာစ မင်္ဂလာ
၁၀၁။ အာသေကံ မင်္ဂလာ
၁၀၂။ ဝိရဇံ မင်္ဂလာ
၁၀၃။ ခေမံ မင်္ဂလာ
၁၁၅။ ဓမ္မိကသုတ္တန် (၁)
၁၁၆။ ဓမ္မိကသုတ္တန် (၂)
၁၁၈။ မေဃိယဝတ္တု (စိတ်ပြုပြင်နည်း)
၁၁၉။ သပ္ပုရိသဒါန (၁)
၁၂၀။ သပ္ပုရိသဒါန (၂)
၁၂၁။ အခွင့်သာခိုက်လုံ့လစိုက်တရား (၁)
၁၂၂။ အခွင့်သာခိုက်လုံ့လစိုက်တရား (၂)
၁၂၆။ ဒုလ္လဘတရား (၅)ပါးတရား
၁၂၇။ ဗုဒ္ဓဓမ္မ အကျဉ်းချုပ်တရား
၁၃၀။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား (၁)
၁၃၁။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား (၂)
၁၃၂။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား (၃)
၁၃၃။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား (၄)
၁၃၄။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား (၅)
၁၃၅။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား (၆)
၁၃၆။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား (၇)
၁၃၇။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား (၈)
၁၃၈။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား (၉)
၁၃၉။ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံတရား (၁၀)
၁၄၀။ ပြဿနာတရားငါးပါးတရား (၁)
၁၄၁။ ပြဿနာတရားငါးပါးတရား (၂)
၁၄၂။ ပြဿနာတရားငါးပါးတရား (၃)
၁၄၄။ အမြတ်ဆုံးအလှူတရား (၁)
၁၄၅။ အမြတ်ဆုံးအလှူတရား (၂)
၁၄၇။ ရာဟုလာဝတ္တု (၁)
၁၄၈။ ရာဟုလာဝတ္တု (၂)
၁၄၉။ ရာဟုလာဝတ္တု (၃)
၁၅၁။ ဒဋ္ဌဗ္ဗ သုတ္တန် (၁)
၁၅၂။ ဒဋ္ဌဗ္ဗ သုတ္တန် (၂)
၁၅၃။ အဘိဏှဩဝါဒ တရား
၁၅၅။ ထေရဝါဒ သင်္ဂါယနာတင်တရား
၁၅၇။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဘဝလမ်းညွှန်တရား
၁၅၈။ ဝေဒနာဝက္ခတရား (၁)
၁၅၉။ ဝေဒနာဝက္ခတရား (၂)
၁၆၀။ ကိသာဂေါတမီထေရီအပါဒါန် (၁)
၁၆၁။ ကိသာဂေါတမီထေရီအပါဒါန် (၂)
၁၆၂။ ပဏ္ဍိတသာမဏေ တရား (၁)
၁၆၃။ ပဏ္ဍိတသာမဏေ တရား (၂)
၁၆၄။ သံကစ္စသာမဏေတရား (၁)
၁၆၅။ သံကစ္စသာမဏေတရား (၂)
၁၆၇။ ဥပါသိကာဧတဒဂ် (၁)
၁၆၈။ ဥပါသိကာဧတဒဂ် (၂)
၁၆၉။ အနာထပိဏ္ဍိကောဝါဒသုတ္တန် (၁)
၁၇၀။ အနာထပိဏ္ဍိကောဝါဒသုတ္တန် (၂)
၁၇၁။ အနာထပိဏ္ဍိကောဝါဒသုတ္တန် (၃)
၁၇၂။ အနာထပိဏ္ဍိကောဝါဒသုတ္တန် (၄)
၁၇၄။ (၇)နေ့ ဗုဒ္ဓဝင်တရားတော် (၁)
၁၇၅။ (၇)နေ့ ဗုဒ္ဓဝင်တရားတော် (၂)
၁၇၆။ (၇)နေ့ ဗုဒ္ဓဝင်တရားတော် (၃)
၁၈၀။ ဆန္ဒောဝါဒသုတ္တန် (၁)
၁၈၁။ ဆန္ဒောဝါဒသုတ္တန် (၂)
၁၈၂။ ကေသမုတ္တိသုတ္တန် (ကာလာမရွာဟော)
၁၈၃။ သဒ္ဓါနှင့် မစ္ဆရိယတိုက်ပွဲ
၁၈၅။ မေတ္တာသုတ္တန် (၁)
၁၈၆။ မေတ္တာသုတ္တန် (၂)
၁၉၃။ ဒါရုန္ဓောပမသုတ္တန် (၁)
၁၉၄။ ဒါရုန္ဓောပမသုတ္တန် (၂)
၁၉၆။ သာမညဖလသုတ္တန် (သိမ်တော်ကြီး)
၁၉၇။ သဒ္ဓါနှင့် စာဂတရား
၁၉၉။ ဗဟုဒီတရ တရားတော်
၂၀၁။ သူတော်ကောင်းတရား (၇)ပါး
၂၀၉။ အမြတ်ဆုံးဥစ္စာ တရား (၂)ပါး
၂၁၀။ ပညာရှိမပါ ပွဲမပြီးဘူး
၂၁၁။ ကဆုန်လပြည့်နေ့ ဗုဒ္ဓနေ့
၂၁၂။ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ့သမိုင်း (၁)
၂၁၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ့သမိုင်း (၂)
၂၁၅။ ကံဏှရသေ့ဆုတောင်းတရား (စင်္ကာပူ)
၂၁၉။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဝါကျွတ်မိန့်ခွန်း
၂၂၁။ အာနန္ဒာထေရ်ရ အပါဒါန်
၂၂၂။ တဖုဿနှင့် ဘလ္လိကညီနောင်
၂၂၆။ ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ သံဃ လမ်းညွှန်တရား
၂၂၈။ မိဘများကသားသမီးများအပေါ် မျော်လင့်ချက် (၅)ချက်
၂၂၉။ ပရိနိဗ္ဗာနသုတ် (၁)
၂၃၀။ ပရိနိဗ္ဗာနသုတ် (၂)
၂၃၂။ ဘဒ္ဒဝဂ္ဂီနောင်ညီ သုံးကျိပ်တရား
၂၃၅။ ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ဘာသာတရား
၂၄၃။ သံဝေဂဉာဏ်နှင့် သံဝေဂဘာဝနာ
၂၄၉။ ပရိနိဗ္ဗာန်နှင့် နိဗ္ဗာန်
၂၅၀။ ဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်နှင့် ဓမ္မဖြစ်စဉ်
၂၅၆။ သိဋ္ဌ ဓမ္မအမြတ်တရား
၂၆၀။ သူရဿတီမယ်တော်နှင့် (၃၇)မင်းအကြောင်း
၂၆၃။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန် (၁)
၂၆၄။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန် (၂)
၂၆၅။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန် (၃)
၂၆၆။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန် (၄)
၂၆၇။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန် (၅)
၂၆၈။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန် (၆)
၂၆၉။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန် (၇)
၂၇၀။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန် (၈)
၂၇၁။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန် (၉)
၂၇၂။ စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန် (၁၀)
၂၇၃။ ဝိပါတ်တော် (၁၂)ပါးတရား (၁)
၂၇၄။ ဝိပါတ်တော် (၁၂)ပါးတရား (၂)
၂၇၅။ ဝိပါတ်တော် (၁၂)ပါးတရား (၃)
၂၇၆။ ဝိပါတ်တော် (၁၂)ပါးတရား (၄)
၂၇၇။ ဝိပါတ်တော် (၁၂)ပါးတရား (၅)
၂၇၈။ ဝိပါတ်တော် (၁၂)ပါးတရား (၆)
၂၇၉။ ဝိပါတ်တော် (၁၂)ပါးတရား (၇)
၂၈၀။ ဝိပါတ်တော် (၁၂)ပါးတရား (၈)
၂၈၁။ ဝိပါတ်တော် (၁၂)ပါးတရား (၉)
၂၈၂။ ဝိပါတ်တော် (၁၂)ပါးတရား (၁၀)
၂၈၃။ သက္ကပဥှသုတ္တန် (၁)
၂၈၄။ သက္ကပဥှသုတ္တန် (၂)
၂၈၅။ သက္ကပဥှသုတ္တန် (၃)
၂၈၆။ သက္ကပဥှသုတ္တန် (၄)
၂၈၇။ သက္ကပဥှသုတ္တန် (၅)
၂၈၈။ သက္ကပဥှသုတ္တန် (၆)
၂၈၉။ သင်္ခတနှင့် အသင်္ခတ (၁)
၂၉၀။ သင်္ခတနှင့် အသင်္ခတ (၂)
၂၉၁။ ပရိနိဗ္ဗာန်နှင့် နိဗ္ဗာန်
၂၉၂။ ရောဟိတဿသုတ္တန် (၁)
၂၉၃။ ရောဟိတဿသုတ္တန် (၂)
၂၉၄။ နိဗ္ဗာနပဥှာသုတ္တန် (၁)
၂၉၅။ နိဗ္ဗာနပဥှာသုတ္တန် (၂)
၂၉၇။ ပထမနိဗ္ဗာနပဋိသံယုတ္တသုတ္တန် (၁)
၂၉၈။ ပထမနိဗ္ဗာနပဋိသံယုတ္တသုတ္တန် (၂)
၂၉၉။ ပထမနိဗ္ဗာနပဋိသံယုတ္တသုတ္တန် (၃)
၃၀ဝ။ ဒုတိယနိဗ္ဗာနပဋိသံယုတ္တသတ္တန် (၁)
၃၀၁။ ဒုတိယနိဗ္ဗာနပဋိသံယုတ္တသတ္တန် (၂)
၃၀၂။ တတိယနိဗ္ဗာနပဋိသံယုတ္တသုတ္တန် (၁)
၃၀၃။ တတိယနိဗ္ဗာနပဋိသံယုတ္တသုတ္တန် (၂)
၃၀၄။ စတုတ္တွနိဗ္ဗာနပဋိသံယုတ္တသတ္တန် (၁)
၃၀၅။ စတုတ္တွနိဗ္ဗာနပဋိသံယုတ္တသတ္တန် (၂)
၃၀၆။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်တရား (၁)
၃၀၇။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်တရား (၂)
၃၀၈။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်တရား (၃)
၃၀၉။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်တရား (၄)
၃၁၀။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်တရား (၅)
၃၁၁။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်တရား (၆)
၃၁၂။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည်တရား (၇)
၃၁၃။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည်တရား (၁)
၃၁၄။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည်တရား (၂)
၃၁၅။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည်တရား (၃)
၃၁၆။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည်တရား (၄)
၃၁၇။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည်တရား (၅)
၃၁၈။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည်တရား (၆)
၃၁၉။ ဓမ္မရတနာ့ဂုဏ်ရည်တရား (၇)
၃၂၀။ သံဃရတနာဂုဏ်ရည်တရား (၁)
၃၂၁။ သံဃရတနာဂုဏ်ရည်တရား (၂)
၃၂၂။ သံဃရတနာဂုဏ်ရည်တရား (၃)
၃၂၃။ သံဃရတနာဂုဏ်ရည်တရား (၄)
၃၂၄။ သံဃရတနာဂုဏ်ရည်တရား (၅)
၃၂၅။ သံဃရတနာဂုဏ်ရည်တရား (၆)
၃၂၆။ သံဃရတနာဂုဏ်ရည်တရား (၇)
၃၂၇။ သံဃရတနာဂုဏ်ရည်တရား (၈)
၃၂၈။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မီကိုးကွယ်မှု အခြေအနေတရား (အပိုင်း ၁)
၃၂၉။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မီကိုးကွယ်မှု အခြေအနေတရား (အပိုင်း ၂)
၃၃၀။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မီကိုးကွယ်မှု အခြေအနေတရား (အပိုင်း ၃)
၃၃၁။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မီကိုးကွယ်မှု အခြေအနေတရား (အပိုင်း ၄)
၃၃၂။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မီကိုးကွယ်မှု အခြေအနေတရား (အပိုင်း ၅)
၃၃၃။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မီကိုးကွယ်မှု အခြေအနေတရား (အပိုင်း ၆)
၃၃၄။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မီကိုးကွယ်မှု အခြေအနေတရား (အပိုင်း ၇)
၃၃၅။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မီကိုးကွယ်မှု အခြေအနေတရား (အပိုင်း ၈)
၃၃၆။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မီကိုးကွယ်မှု အခြေအနေတရား (အပိုင်း ၉)
၃၃၇။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မီကိုးကွယ်မှု အခြေအနေတရား (အပိုင်း ၁၀)
၃၃၈။ သံဝေဇနိယလေးဌာနတရား (၁)
၃၃၉။ သံဝေဇနိယလေးဌာနတရား (၂)
၃၄၀။ သံဝေဇနိယလေးဌာနတရား (၃)
၃၄၁။ သံဝေဇနိယလေးဌာနတရား (၄)
၃၄၂။ ပဋိကူလမနသီကာရတရား (၁)
၃၄၃။ ပဋိကူလမနသီကာရတရား (၂)
၃၄၄။ ပဋိကူလမနသီကာရတရား (၃)
၃၄၅။ ဓာတုဝိဘဇ္ဇနသုတ္တန် (၁)
၃၄၆။ ဓာတုဝိဘဇ္ဇနသုတ္တန် (၂)
၃၄၇။ ဓာတုဝိဘဇ္ဇနသုတ္တန် (၃)
၃၄၈။ ဝေဒနာဝိက္ခဘနသတ္တန် (၁)
၃၄၉။ ဝေဒနာဝိက္ခဘနသတ္တန် (၂)
၃၅၀။ နန္ဒမာတာသုတ္တန် (၁)
၃၅၁။ နန္ဒမာတာသုတ္တန် (၂)
၃၅၂။ ကံဏှဇာတ်တော် (၁)
၃၅၃။ ကံဏှဇာတ်တော် (၂)
၃၅၄။ ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်ပညာရေး (၁)
၃၅၅။ ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်ပညာရေး (၂)
၃၅၈။ အဘိဏှပစ္စဝက္ခိတဗ္ဗသုတ္တန် (၁)
၃၅၉။ အဘိဏှပစ္စဝက္ခိတဗ္ဗသုတ္တန် (၂)
၃၆၀။ အဘိဏှပစ္စဝက္ခိတဗ္ဗသုတ္တန် (၃)
၃၆၁။ အဘိဏှပစ္စဝက္ခိတဗ္ဗသုတ္တန် (၄)
၃၆၅။ အာနပါနဿတိပဋ္ဌာန်တရား (၁)
၃၆၆။ အာနပါနဿတိပဋ္ဌာန်တရား (၂)
၃၆၇။ အာနပါနဿတိပဋ္ဌာန်တရား (၃)
၃၆၈။ အာနပါနဿတိပဋ္ဌာန်တရား (၄)
၃၆၉။ အာနပါနဿတိပဋ္ဌာန်တရား (၅)
၃၇၀။ အာနပါနဿတိပဋ္ဌာန်တရား (၆)
၃၇၁။ အာနပါနဿတိပဋ္ဌာန်တရား (၇)
၃၇၂။ အာနပါနဿတိပဋ္ဌာန်တရား (၈)
၃၇၃။ အာနပါနဿတိပဋ္ဌာန်တရား (၉)
၃၇၄။ အာနပါနဿတိပဋ္ဌာန်တရား (၁၀)
၃၇၅။ အာနပါနဿတိပဋ္ဌာန်တရား (၁၁)
၃၇၆။ ပါယာသိသုတ္တန် (၁)
၃၇၇။ ပါယာသိသုတ္တန် (၂)
၃၇၈။ ပါယာသိသုတ္တန် (၃)
၃၇၉။ ပါယာသိသုတ္တန် (၄)
၃၈၀။ ပါယာသိသုတ္တန် (၅)
၃၈၁။ ပါယာသိသုတ္တန် (၆)
၃၈၂။ ပါယာသိသုတ္တန် (၇)
၃၈၃။ ပါယာသိသုတ္တန် (၈)
၃၈၄။ ပါယာသိသုတ္တန် (၉)
၃၈၅။ ပါယာသိသုတ္တန် (၁၀)
၃၈၆။ ပါယာသိသုတ္တန် (၁၁)
၃၈၇။ ပါယာသိသုတ္တန် (၁၂)
၃၈၈။ ပါယာသိသုတ္တန် (၁၃)
၃၈၉။ ပါယာသိသုတ္တန် (၁၄)
၃၉၀။ ပါယာသိသုတ္တန် (၁၅)
၃၉၁။ ပါယာသိသုတ္တန် (၁၆)
၃၉၂။ ပါယာသိသုတ္တန် (၁၇)
၃၉၃။ ပါယာသိသုတ္တန် (၁၈)
၃၉၄။ စိတ်ကောင်းဝင်ခိုက် ကောင်းမှုကိုမြန်မြန်လုပ်ကြပါ
၃၉၇။ ကိုယ့်ပိုင်နက် ကိုယ့်စားကျက်
၃၉၉။ နိုင်ငံရတနာများကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
၄၀၁။ ကရုဏာ ဘာဝနာ
၄၀၄။ ရုပ်ခန္ဓာသာအို၍ ဉာဏ်ပညာမအို
၄၀၆။ Character is the Poormen Capital
၄၀၇။ စေတီယပူဇာ (ကာကွယ်ခြင်းငါးမျိုး)
၄၁၀။ မျက်မှောက်ကမ္ဘာ့အခြေအနေနှင့် ဗုဒ္ဓတရားတော်၏အနေအထား
၄၁၆။ အတွင်းမီး အပြင်မီး
၄၂၁။ ဆူးခင်းလမ်းမှ ပန်းခင်းလမ်းသို့
၄၂၆။ ဆုတ်ယုတ်လာသောခေတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၄၂၈။ ဗုဒ္ဓစာပေမှာတွေ့ရှိရသောရှေးခေတ် ဟောင်းပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်
၄၃၀။ ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး
၄၃၂။ အခွင့်သာခိုက် အခွင့်ကောင်းကို လက်မလွတ်စေနဲ့
၄၃၄။ သတ္တဌာန ခုနှစ်ပတ်ဖြစ်စဉ်ဗုဒ္ဓဝင်
၄၄၁။ သိကြားမင်းရေးသော ခန္တီစာတမ်း
၄၄၃။ ပညာရှိပါမှ ပွဲဖြစ်သည်
၄၆၀။ နိဗ္ဗာန်ရှာနည်း (နာလန္ဒသုတ်)
၄၆၁။ ဦးညွတ်နိုင်သူများ ဘုန်းကံကြီးကြသည်
၄၆၄။ ဓမ္မကထိကမလေး၏ ဂုဏ်ရည်
၄၆၆။ ခန္တီပါရမီ (မြေကြီးကဲ့သို့ကျင့်ပါ)
၄၇၂။ လူမိုက်နှင့် မတွေ့ရပါစေနဲ့ (အကိတ္တိဇာတ်)
၄၇၃။ အဘိဓမ္မာနှင့် ဝိပဿနာ
၄၇၄။ သာသနာတော်ကြီးပွားကြောင်းတရား (၇)ပါး
၄၇၈။ မေတ္တာခြုံမှ လုံလိမ့်မည်
၄၈၀။ စိတ်ကိုပြင်မှ ချမ်းသာရ
၄၈၃။ အကန်းကမ္ဘာမှာ ဉာဏ်ရှိကြစမ်းပါ
၄၈၆။ သဒ္ဓါနှင့် မစ္ဆရိယတိုက်ပွဲ
၄၈၉။ စိတ်ကိုဓမ္မဆေးဖြင့် ပြုပြင်မည်
၄၉၁။ ဒေါသမဖြစ်ပါရစေနဲ့ (အကိတ္တိဇာတ်)
၄၉၂။ သူတော်ကောင်းနဲ့ တွေ့ပါရစေ (အကိတ္တိဇာတ်)
၄၉၇။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတံတားဖြင့် ဘဝပင်လယ်ကိုဖြတ်ကျော်ခြင်း
၄၉၈။ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ် မဟာသမယ
၅၀၂။ သြင်္ကန်နှင့် သတိပဋ္ဌာန်အပိုင်း (၁)
၅၀၃။ သြင်္ကန်နှင့် သတိပဋ္ဌာန်အပိုင်း (၂)
၅၀၄။ သြင်္ကန်နှင့် သတိပဋ္ဌာန်အပိုင်း (၃)
၅၀၅။ သြင်္ကန်နှင့် သတိပဋ္ဌာန်အပိုင်း (၄)
၅၀၆။ သြင်္ကန်နှင့် သတိပဋ္ဌာန်အပိုင်း (၅)
၅၁၄။ ဥပစာလာထေရ်ရီပြောသော လောကသဘောတရား (၄)ပါး
၅၁၅။ သီလနှင့်ပညာသည်သာလျှင် အမြတ်ဆုံး
၅၁၇။ သာသနာတော်ကြီးပွားကြောင်းတရား (၇)ပါး
၅၁၈။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ညီညွတ်ရေး (ပင်လုံ)
၅၁၉။ သောပါက၏ ဂုဏ်ရည်များ
၅၃၀။ ဆုတ်ယုတ်လာသောခေတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (စက္ကဝတ္တိသုတ်)
၅၃၅။ အိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းသည့် တရားလေးပါး
၅၃၆။ မဟာသမယ အခါတော်တည်တော်နေ့ (နယုန်လပြည့်နေ့)
၅၃၇။ ဟာဟာ...ဟင် တရားတော်
၅၄၁။ အောင်ဆုတောင်းဂါထာ၊ အနေကဇာတင်၊ မဟာဗောဓိသုတ်၊ ပဋ္ဌာန်း၊ ရောင်ခြည် တော်ဘွဲ့ဘုရားရှိခိုး
၅၄၂။ ပရိတ်ကြီး (၁၁)သုတ် နိဒါန်းအဖွင့် နှင့်ပါဠိတော်
၅၄၄။ ဓမ္မစက္ကပဝတ္တနသုတ်၊ အနတ္တလက္ခဏသုတ်
၅၄၅။ တရားတုက တရားစစ်ကို ဖျတ်ဆီးတက်ပုံ
၅၄၆။ စွန့်လွှတ်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခြင်းဆီသို့
၅၄၇။ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များသို့ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေး
၅၄၈။ ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင် နေနိုင်ကြပါစေ
၅၅၁။ ဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး
၅၅၂။ ဥပစာလာထေရီပြောတဲ့ လောကသဘော
၅၅၆။ အတွင်းရှုပ် အပြင်ရှုပ်
၅၅၇။ မြတ်စွာဘုရားပေးသော နေနည်း ၃ပါး
၅၆၅။ နတ်သားမေးသော ပုစ္ဆာလေးမျိုး
၅၇၃။ အိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းသည့် တရားလေးပါး
၅၇၄။ မိမိဘဝရပ်တည်မှုကို မိမိကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ပါ
၅၇၅။ အဖေနေ့အခမ်းအနား (ဟောပြောပွဲ)
၅၇၆။ ကိုယ့်စားကျက်မှာ ကိုယ်နေ
၅၇၉။ ရွှေစည်းခုံစေတီတော်မြောက်ကျွန်းသို့ ကြွရောက်တော်မူလေပြီ
၅၈၀။ တရားမျှတခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ညီညွတ်ခြင်း နှင့်အတူလက်တွဲနေထိုင်ခြင်း
၅၈၁။ မေတ္တာအခါတော်နေ့ ကရုဏာအလှူတော်
၅၉၀။ ကရုဏာထားတက်ပါစေ (တိဿရဟန်းဝတ္တု)
၅၉၂။ စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း၊ ပညာ
၅၉၉။ ဘဝပြည့်စုံခြင်း၏ အခြေခံအကြောင်းတရား
၆၀ဝ။ မေတ္တာဆိုသည်မှာ (မေတ္တာစွမ်းရည်)
၆၀၁။ သြင်္ကန်တွင်းသတိပဋ္ဌာန်အပိုင်း (၁)
၆၀၂။ သြင်္ကန်တွင်းသတိပဋ္ဌာန်အပိုင်း (၂)
၆၀၃။ သြင်္ကန်တွင်းသတိပဋ္ဌာန်အပိုင်း (၃)
၆၀၄။ သြင်္ကန်တွင်းသတိပဋ္ဌာန်အပိုင်း (၄)
၆၀၅။ သြင်္ကန်တွင်းသတိပဋ္ဌာန်အပိုင်း (၅)
၆၀၆။ သြင်္ကန်တွင်းသတိပဋ္ဌာန်အပိုင်း (၆)
၆၀၇။ သြင်္ကန်တွင်းသတိပဋ္ဌာန်အပိုင်း (၇)
၆၀၈။ သြင်္ကန်တွင်းသတိပဋ္ဌာန်အပိုင်း (၈)
၆၀၉။ သြင်္ကန်တွင်းသတိပဋ္ဌာန်အပိုင်း (၉)
၆၁၀။ သြင်္ကန်တွင်းသတိပဋ္ဌာန်အပိုင်း (၁၀)
၆၁၁။ ရန်ကုန်သီတဂူဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
၆၁၂။ လူနေမှုစနစ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ (လူ့ဝိနည်း)
၆၁၅။ စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း
၆၁၆။ ခန္တီနှင့်မေတ္တာကျင့်သုံးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ကြပါ
၆၁၈။ ခန္တီနှင့်မေတ္တာကျင့်သုံးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ကြပါ
၆၁၉။ ဂျကတာ မေတ္တာ
၆၂၄။ ဗာဟီရအားဟောကြားသော တရားအကျဉ်းချုပ်
၆၃၀။ သာဝိကာ ဘာသိတ သုတ္တန်တရား
၆၃၃။ ဝဇီရာထေရီ (သဲတော)
၆၃၄။ အရှုပ်ကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲ (ဘာသာရေးအရှုပ်)
၆၃၆။ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၏ အမျိုးကောင်းသမီး ရတနာများ
၆၃၇။ Character is Power
၆၃၉။ Knowledge & Tsisdom
၆၄၀။ သာမညဖလ အခါတော်နေ့ (တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်)
၆၄၁။ ဩဝါဒပါတိမောက် အခါတော်နေ့ (တပိုတွဲလပြည့်)
၆၄၆။ ဘဝပင်လယ်မှာမိမိကိုယ်ကို ကျွန်းနဲ့တူအောင်တည်ဆောက်ထားပါ
၆၅၁။ ထားဝယ် ကရုဏာ
၆၅၄။ နတ်မောက်မြို့မှ အမျှဝေသံ
၆၅၅။ သူတစ်ပါးစားကျက် သွားမကျက်စားနဲ့
၆၅၆။ မြစ်ငယ်ကရုဏာ (မြစ်ကြီးနား)
၆၅၉။ မိထွေးတော်ဂေါတမီလျှောက်ထားသော ကံကောင်းသူများ
၆၆၁။ မဟာသတိပဋ္ဌာန် ကာယာနုပဿနာ အပိုင်း (၁-၂) ရန်ကုန်
၆၆၃။ မလွန် ကရုဏာ (မန္တလေး)
၆၆၄။ ကောသလမင်းကြီးအား ဗုဒ္ဓမိန့်ကြားတော်မူသောအပ္ပမာဒ
၆၆၆။ ကောင်းကွက်ကိုရှာ မေတ္တာ (မန္တလေး)
၆၆၇။ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုခန္တီဝါဒဖြင့် တည်ဆောက်ပါ
၆၇၀။ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရဟန္တာပေါင်း (၁၂၅၀)တို့၏ပထမအကြိမ်သံဃာ့ အစည်းအဝေး
၆၇၁။ အရှုပ်ထဲမှာ ရှင်းအောင်နေ
၆၇၃။ သူများစားကျက် မကျက်စားနဲ့
၆၇၄။ မာရ်နတ်ဖမ်းစားခြင်း (၁၀)ချက်
၆၇၈။ ဂရုဓမ္မအလှူတော် (မန္တလေးအကျဉ်းထောင်)
၆၈၀။ ဘဝတစ်ခုလုံး၏ အဆုံးအဖြတ်ဥစ္စာခုနှစ်ပါး
၆၈၂။ ဗုဒ္ဓတရားတော်၏အခြေခံအစပျိုး သဘောတရား
၆၈၃။ ချမ်းသာခြင်းလေးမျိုး (ဆစ်ဒနီမြို့)
၆၈၄။ နေနည်းသုံးပါး (မလေးရှား)
၆၈၆။ ရှင်နေသမျှသင်နေကြရမည် (အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဘီဟာပြည်နယ်၊ ဂယာမြို့)
၆၈၇။ သာသနာတော်၌ကျောင်းတိုက်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်း
၆၈၈။ ဝါဆိုလပြည့်ဓမ္မစကြာ တရားတော်နှင့်မေတ္တာသုတ္တန်
၆၉၀။ နွေဦးဆောင်းနှောင်းလတပေါင်းအပိုင်း (၁-၂)
၆၉၁။ ဗြဟ္မစရိယအပိုင်း (၁) ၁၀-၇-၂၀၁၁
၆၉၂။ ဗြဟ္မစရိယအပိုင်း (၂)
၆၉၃။ ဗြဟ္မစရိယအပိုင်း (၃) ၅-၇-၂၀၁၁
၆၉၄။ ဗြဟ္မစရိယအပိုင်း (၄) ၁၂-၇-၂၀၁၁
၆၉၅။ ဗြဟ္မစရိယအပိုင်း (၅) ၁၆-၇-၂၀၁၁
၆၉၆။ ဗြဟ္မစရိယအပိုင်း (၆) ၁၇-၇-၂၀၁၁
697 - Maharsatipahtana Sutta Part(1)
698 - Maharsatipahtana Sutta Part(2)
699 - Maharsatipahtana Sutta Part(3)
700 - Maharsatipahtana Sutta Part(4)
701 - Maharsatipahtana Sutta Part(5)
702 - Maharsatipahtana Sutta Part(6)
703 - Maharsatipahtana Sutta Part(7)
704 - Maharsatipahtana Sutta Part(8)
705 - Maharsatipahtana Sutta Part(9)
706 - Maharsatipahtana Sutta Part(10)
707 - Maharsatipahtana Sutta Part(11)
708 - Maharsatipahtana Sutta Part(12)
709 - Maharsatipahtana Sutta Part(13)
710 - Maharsatipahtana Sutta Part(14)
711 - Maharsatipahtana Sutta Part(15)
712 - Maharsatipahtana Sutta Part(16)
713 - Maharsatipahtana Sutta Part(17)
714 - Maharsatipahtana Sutta Part(18)
715 - Maharsatipahtana Sutta Part(19)
716 - Maharsatipahtana Sutta Part(20)
717 - Fundamental Buddhism Special Lecture (1)
718 - Fundamental Buddhism Special Lecture (2)
719 - Fundamental Buddhism Special Lecture (3)
720 - Global Buddhist Congregation 2011 Speeches in India
721- Lectures (1)
722- Lectures (2)
723- Lectures (3)
724- Lectures (4)
725- Lectures (5)
726 - Method+Ology+Research
727- Monastic Education (Research and Compilation) Part (1)
728 - Monastic Education (Research and Compilation) Part (2)
729 - Monastic Education (Research and Compilation) Part (3)
730 - Monastic Education (Research and Compilation) Part (4)
731- Pa-Auk Taw Ya Meditation Center Dhamma Talk
732- Pa-Auk Taw Ya Meditation Center Dhamma Talk
733 - Pa-Auk Taw Ya Meditation Center Dhamma Talk
734 - Appamada Dhamma Talk (Pyin Oo Lwin)
၁။ နိဝါတ မင်္ဂလာ(၁)
၂။ နိဝါတ မင်္ဂလာ(၂)
၃။ နိဝါတ မင်္ဂလာ(၃)
ရ။ ကတညုတာ မင်္ဂလာ(၁)
၈။ ကတညုတာ မင်္ဂလာ(၂)
၁။ ခန္တီ မင်္ဂလာ(၁)
၂။ ခန္တီ မင်္ဂလာ(၂)
၃။ ခန္တီ မင်္ဂလာ(၃)
၁၀။ တပ မင်္ဂလာ(၁)
၁။ တပ မင်္ဂလာ(၂)
၂။ တပ မင်္ဂလာ(၃)
၃။ ဗြဟ္မစရိယ မင်္ဂလာ(၁)
၄။ ဗြဟ္မစရိယ မင်္ဂလာ(၂)
၈။ နိဗ္ဗာနသစ္ဆိကိရိယာစ မင်္ဂလာ(၁)
၉။ နိဗ္ဗာနသစ္ဆိကိရိယာစ မင်္ဂလာ(၂)
၁၀။ နိဗ္ဗာနသစ္ဆိကိရိယာစ မင်္ဂလာ(၃)
၆။ ဝိရဇံ မင်္ဂလာ(၁)
၇။ ဝိရဇံ မင်္ဂလာ(၂)
၈။ ခေမံ မင်္ဂလာ(၁)
၉။ ခေမံ မင်္ဂလာ(၂)
၁၀။ ခေမံ မင်္ဂလာ(၃)
အထက်ပါ တရားများကို Analog တိပ်ခွေများမှ Digital Media သို့ပြောင်းလဲ ပေးကြသော
Singapore နိုင်ငံရှိ ကိုရဲမြင့်နှင့် သူငယ်ချင်းတစုတို့အား
Dammadownload မှ ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါကြောင်း
Sayadaw U Nyanissara